definitions နဲ့ူးပ, စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny - နှုတ်ကပတ်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ
စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny ဆိုချက်
အတွေးအခေါ်နှင့် Destiny ကနေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အစာပိုဒ်တိုများ
မတော်တဆ, တစ်ခုက: များသောအားဖြင့်သိသာအကြောင်းမရှိဘဲမမျှော်လင့်ဖွသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ဟုဆိုသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမတော်တဆမှုမလွှဲမရှောင်မတော်တဆမှုခေါ်ဖြစ်ပျက်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့ unobserved သို့မဟုတ်ရှေ့အကြောင်းတရားများတစ်ကွင်းဆက်သို့မဟုတ်စက်ဝိုင်းအတွင်းမှသာမြင်နိုင်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ စက်ဝိုင်း၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများမတော်တဆမှုနှင့်ဆက်စပ်သောထားတဲ့အကြံအစည်နှင့်လုပ်ရပ်များဖြစ်ကြသည်။
AIA: ဤနေရာတွင်အောင်မြင်သောတစ်စုံလင် sexless နှင့်နေိုငျသောခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဥပဒေတစ်ခုတက္ကသိုလ်အတွက်၎င်း၏ function ကိုအဖြစ်သတိဖြစ်ခြင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီသည်ဒီဂရီမှတဆင့်တိုးတက်လာခဲ့သည်တစ်ယူနစ်မှပေးထားသောအမည်ပါ; အရာသဘောသဘာဝကနေဘွဲ့ရများနှင့်သဘာဝ-side ကနေကွဲပြားခြားနားသွားမယ့်အချက်သို့မဟုတ်လိုင်းအဖြစ်အသိဉာဏ်-ဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အရက်: ကာယခန္ဓာကိုယ်သည်အရက်ယမကာများသောက်ခြင်းဖြင့်ရောဂါကူးစက်ခြင်းကိုခံလိုသောဆန္ဒနှင့်ခံစားမှုကိုပြုသူ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဖြစ်သည်။ အရက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရပြီးအစေခံကျွန်အဖြစ်ထားရှိခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရာတွင်ကြားခံအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်အရက်သည်ဝိညာဉျအနနှေငျ့မာစတာဖွစျလာသောအခါရက်စက်။ မဆုတ်မနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အနာဂတ်ကာလ၌ဖြစ်စေ၊ အနာဂတ်ဘဝ၌ဖြစ်စေ၊ လိုအပ်သောလုပ်သူတိုင်းသည် fiend ကိုရင်ဆိုင်ရပြီးအောင်နိုင်လိမ့်မည်သို့မဟုတ်ထိုအချိန်တွင်၎င်းသည်အောင်မြင်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ အရက်မသောက်လျှင်အရက်သည်အန္တရာယ်ကင်းသည်။ ကသာအလတ်စားဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လူတစ် ဦး သည် t ကိုသောက်သည့်အခါအရက်သေစာသောက်သုံးသည့်အရက်သည်သွေးထဲရှိအလိုဆန္ဒများနှင့်အာရုံကြောများအတွင်းသို့လှည့်စားခြင်းနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်သည်။ မိတ်ဆွေနှင့်မိတ်ဆွေဟူသောယုံကြည်ချက်သို့ရလိုသောဆန္ဒနှင့်ခံစားချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအားလမ်းပြပေးသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးအဆင့်အားလုံးကိုဖြတ်သန်း။ ကြည်ညိုလေးစားမှုနှင့်ကောင်းသောမိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၏စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည်။ ပြုသူသည်နောက်ဆုံးတွင်လူ့ပုံသဏ္ဌာန်ကိုယူရန်အလွန်အမင်းရှုံးနိမ့်သွားသောအခါ fiend သည်၎င်းကိုသတိရှိရှိ inertia တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်ကမ္ဘာ၏အတွင်းပိုင်းကျဉ်းထဲရှိထောင်ထဲသို့ပို့ဆောင်သည်။ သတိရှိခြင်းသည် inertia သည်မည်သည့်ဘာသာရေးနှင့်မည်သည့်ငရဲတွင်မဆိုပြင်းထန်သောမီးလောင်ခြင်းများထက် ပို၍ ဒေါသထွက်ပြီးကြောက်စရာဖြစ်သည်။ အရက်သည်သဘာဝတွင်ထိန်းသိမ်းသောဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်သူကထိန်းသိမ်းသောအရာသတ်ပစ်။ ယစ်မျိုး၏စိတ်ဓာတ်သည်လူတို့၏သိသောအလင်းကိုကြောက်ရွံ့။ လူကိုအားမခွာစေရန်ကြိုးပမ်းသည်။ အရက်သောက်ခြင်း၏အစေခံကျွန်မဟုတ်ဘဲမာစတာဖြစ်ရန်သာသေချာသည့်နည်းလမ်းမှာ၎င်းကိုမမြည်းပါနှင့်။ ခိုင်မာသောနှင့်တိကျသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထား ရှိ၍ ဟန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ပုံစံဖြင့်မယူရန်မထားပါနှင့်။ ထိုအခါတ ဦး တည်းမာစတာဖြစ်လိမ့်မည်။
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အစုလိုက်အပြုံလိုက်သို့မဟုတ်ပုံစံသို့အုပ်စုဖွဲ့သဘောသဘာဝယူနစ်ဖြစ်ပြီးမြင်နိုင်၏, ထိုသို့အတူတကွအပြောင်းအလဲများကရရှိထားသူသို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာသောအခါ, ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ပျောက်ဆုံးဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
အစာစားချင်စိတ်: အရသာ gratify နှင့်စောင်ရေအတွက်ဒီကိစ္စကိုစောင့်ရှောက်ဖို့သဘောသဘာဝအဖွဲ့အစည်းများ၏တိုက်တွန်းတုံ့ပြန်အတွက်ပစ္စည်းနှင့်အတူအနံ့ရန်အလိုရှိ၏။
Astral ခန္ဓာကိုယ်: ဤစာအုပ်အတွက်အသုံးပြုမယ့်အသုံးအနှုန်းအဖြစ်တောက်ပ-အစိုင်အခဲဟာလေးဆရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုဖော်ပြရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားသုံးဦး airy-အစိုင်အခဲ, အရည်-အစိုင်အခဲများနှင့်အစိုင်အခဲ-အစိုင်အခဲရှိပါတယ်။ အဆိုပါ airy-အစိုင်အခဲနှင့်အရည်-အစိုင်အခဲသာထုများမှာသူတို့မဟုတ်
ပုံစံသို့တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ astral ခန္ဓာကိုယ်မွေးဖွားသည်အထိအသက်ရှူ-ပုံစံ၏ပုံစံနှင့်အညီကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိစ္စပုံစံသွင်းသွင်းသောအရာဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီနောကျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကို၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုစောင့်ရှောက်ရန် astral ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မူတည်
အသက်တော်-ပုံစံ၏ပုံစံအရသိရသည်။ အသက်တော်-form ကိုအသေခံမှာခန္ဓာကိုယ်အရွက်ပြီးနောက်, astral ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအနီးတွင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုအခါ astral ခန္ဓာကိုယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်မူတည်လျက်, အဖြစ်လူစုခွဲတာဖြစ်ပါတယ်
လေထု, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူ့: ကနေထွက်ရှိတဲ့တောက်ပ, airy, အရည်နှင့်အစိုင်အခဲယူနစ်၏အလင်းဆုံအစုလိုက်အပြုံလိုက်သည်နှင့်အသက်တော်အားဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်မှတဆင့်ယူနစ်လေးခုစဉ်ဆက်မပြတ်စီးအတွက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့စောင့်ရှောက်လျှင်, အသက်တော်-ပုံစံ၏တက်ကြွသောဘေးထွက်။
လူ့, အကြားအမြင်ရ၏လေထု: အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်, အရာတစျခုသောအဘို့ကို၏ passive ခြမ်းများ၏အဘိဥာဏ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျောက်ကပ်နှင့် adrenals နှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်အာရုံကြောနဲ့လူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏အသွေး၌တည်ရှိကြောင်း, ထိုပြုသော၏တက်ကြွသောဘေးထွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ, ပေါင် surges ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ re-တည်ရှိသည့်ကျင့်၏အလိုဆန္ဒနှင့်ခံစားမှုမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးနှင့်အာရုံကြောမှတစ်ဆင့်တွန်း။
လူ့, စိတ်ကျန်းမာရေး၏လေထု: အဆိုပါအဘိဥာဏ်လေထုမှတစ်ဆင့်နှင့်ခံစားမှု-စိတ်နှင့်အလိုဆန္ဒ-စိတ်ကိုအသက်ရှူ၏မပြတ်မတောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်နှင့်ထွက်သွားအကြားကြားနေအချက်များမှာထင်ရသောအားဖွငျ့သော Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
One ရဲ့ Triune ကိုယ်ပိုင်, Noetic ၏လေထု: သိအလင်းထွက်သက်မှတဆင့်ပြုသော-in-the-ခန္ဓာကိုယ်ဖို့စိတ်ပိုင်းအဘိဥာဏ်လေထုအားဖြင့်ပါးသောအနေဖြင့်ရေလှောင်ကန်, ဒါကြောင့်ပြောသည်။
ကမ္ဘာမြေ၏လေထု: လေးပါးလုံးဇုန်သို့မဟုတ်ထုတောက်ပ, airy ၏, အရည်, နှင့်အဝေးဆုံးကြယ်ပွဖို့ Compact နှင့်အလုံးမြေကြီးတပြင်အပေါ်ယံလွှာကနေနဲ့တဆင့်ခြင်းနှင့်အတွင်းပိုင်းမှတဆင့်တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်တက်စောင့်ရှောက်သောအစိုင်အခဲယူနစ်တက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်ရှု: ခန္ဓာကိုယ်အပေါငျးတို့သစစ်ဆင်ရေးကြောင့်စဉ်းစားခြင်းဖြင့်ရန်ခန္ဓာကိုယ်အသစ်တဖန်မွေးဖွားနှင့် restore စေသည်တိုင်အောင်, ဖြစ်တည်မှုထဲကတည်ရှိသို့မဟုတ် pass ဆက်လက်သောသို့မဟုတ်ထိုအသွေး၏အသက်, တစ်သျှူးများ၏ pervader နှင့်ဆောက်ခြင်း, ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဖျက်သင်္ဘောဖြစ်ပါသည် ထာဝရအသကျ။
အသက်ရှု-ပုံစံ: တစ်ဦးချင်းစီကလူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီလူနေမှုပုံစံ (ဝိညာဉျသ) ဖြစ်ပါသည်သည့်သဘောသဘာဝယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏သက်တော်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ယင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ကာလအတွင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သက်တမ်းတိုးမည်နှင့်တစ်ရှူးအသက်ရှင်ခြင်းကိုပေးတော်မူ၏ပုံစံအားဖြင့်နှစ်ဆယ်ကိုပုံနှင့်အညီ, နှင့်၎င်း၏ပုံစံကိုပုံစံအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုစောင့်၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်။ အသေသတ်ခြင်းကိုကိုယ်ခန္ဓာမှယင်း၏ခွဲခြာ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။
cell, တစ်ဦးက: အသက်တော်-link ကို: လေးယောက်စာစီယူနစ်များ၏ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်အရေးယူမှုအားဖြင့်လူနေမှုဖွဲ့စည်းပုံသို့ဖွဲ့စည်းသည့်တောက်ပသော, airy, အရည်နှင့်အမှုအစိုင်အခဲစီးကနေအမှုယာယီယူနစ်၏ရေးစပ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
မမြင်နိုင်သောအရာဆဲလ်, မဟုတ်မြင်နိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဏုအောက်၌ငါမြင်ရသောဖြစ်ရသောရေးစပ်ယာယီယူနစ်၏ကိုယ်ကိုဖွဲ့စည်းရန်ဘဝ-link ကို, Form-link ကိုနှင့်ဆဲလ်-link ကိုစာစီယူနစ်။ အဆိုပါလေးယောက်စာစီယူနစ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်
အတူတူနှင့်ဆဲလ်ထဲမှာအမြဲတည်တော်မူ၏ အဆိုပါယာယီယူနစ်အတွက်စာစီကြောင်းဆဲလ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်၏ပိုကြီးတဲ့အဖှဲ့အစညျး၏အဆက်မပြတ်စဉ်အတွင်းကြောင့်ဆဲလ်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့နှင့်အဖြစ်ယာယီယူနစ်ဖမ်းခြင်းနှင့် compose ဆက်လက်ရာမှစီးစီးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ လူသားတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ဦးကလာပ်စည်းများ၏လေးယောက်စာစီယူနစ် indestructible ပါ၏ သူတို့ယာယီယူနစ်တွေနဲ့ထောက်ပံ့ကြသည်မဟုတ်သည့်အခါဆဲလ်ခန္ဓာကိုယ်, ငြိမ်းလိမ့်မည်ပြိုကွဲပျက်စီးရမည်နှင့်ပျောက်ကွယ်သွားပေမယ့်ဆဲလ်၏စာစီကိုထပ်အနာဂတ်တစ်ချိန်ချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲကအဘို့တည်ဆောက်ကြမည်။
အခွင့်အလမ်း: "။ အခွင့်အလမ်းအဖြစ်အပျက်" ကိုနားလည်မပေးဘို့မိမိကိုယ်ကို excuse ရန်, သို့မဟုတ်ပေါ်ပေါက်သောလုပ်ရပ်များ, တ္ထုများနှင့်ဖြစ်ရပ်များကိုရှင်းပြဖို့နဲ့အရာကအလွယ်တကူ "အခွင့်အလမ်းများစွာဂိမ်းများ," သို့မဟုတ်အဖြစ်ကရှင်းပြသည်ကြသည်မဟုတ်အသုံးပြုသောစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်အခွင့်အလမ်းအဖြစ်မျှထိုကဲ့သို့သောအရာလည်းမရှိ, ဒါကြောင့်ဥပဒေနှင့်အမိန့်၏လွတ်လပ်သောပြုလျက်, ထက်တစ်ဖွအခြားမည်သည့်လမ်းအတွက်ဖြစ်ပျက်နိုငျခဲ့ကွောငျးအသိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအကြွေစေ့၏ Flip အဖြစ်အခွင့်အလမ်းအမျိုးမျိုးရှိသမျှလုပ်ရပ်, တစ်ကဒ်၏ကွေ့တစ်ဦးသေဆုံး၏ပစ်သူတို့ရူပဗေဒဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အညီသို့မဟုတ် knavery နှင့်ပရိယာယ်၏ဥပဒေများနေကြသည်ဖြစ်စေ, အချို့သောဥပဒေများနှင့်အညီနှင့်နိုင်ရန်အတွက်တွေ့ကြုံတတ်၏။ အဘယ်အရာကိုအခွင့်အလမ်းဟုခေါ်ပညတ်တရား၏လွတ်လပ်သောဖြစ်လျှင်, သဘာဝတရား၏အဘယ်သူမျှမအားကိုးဥပဒေများရှိပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါတနေ့နှင့်တညဉ့်ရာသီမရှိဧကန်အမှန်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားကျနော်တို့နားလည်ရန်လုံလောက်သောဒုက္ခကိုယူမထားတဲ့ "အခွင့်အလမ်း" အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ကြသည်နည်းတူ, ငါတို့ကပိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နားလည်ပေးသောဥပဒေများဖြစ်ကြသည်။
ဇာတ်ကောင်: တဦးတည်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနှင့်အလိုဆန္ဒများ၏ရိုးသားမှုနှင့်အမှန်တရားဒီဂရီသည်မိမိတစ်ဦးချင်းစီအတွေး, စကားလုံးနဲ့ action ကိုဖော်ပြအဖြစ်ဖြစ်ပါသည်။ အတွေးနှင့်လုပ်ရပ်အတွက်ရိုးသားမှုနှင့်အမှန်တရားအခြေခံများမှာ
ကောင်းသောဇာတ်ကောင်တစ်ဦးအားထောက်ထားစာနာခြင်းနှင့်အကြောက်ကင်းဇာတ်ကောင်များ၏ကွဲပြားသောအမှတ်အသားများ။ ဇာတ်ကောင်မှေးရာပါသည်ထင်နှင့်ပြုမူရန်ဓာတ်အဖြစ်, တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟောင်းတဦးဘဝတွေကိုထံမှအမွေဆက်ခံ; တဦးတည်းရွေးကောက်အဖြစ်ဆက်လက်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
သဟာယ: အဆိုပါအခွင့်အရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသို့မိမိကိုယ်ကိုစဉ်းစားခြင်း, အလင်းကိုလက်ခံရရှိအတွက်စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ system ကိုအညီဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, ဘုရားသခငျ့, "စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသော": အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ဝန်နှင့်ကလေးမွေးဖွားအားဖြင့်လိုက်နာရအမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက်တစ်ဦး Ovum ၏ impregnation, မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဦးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွေးဖွားတဲ့ဘုရားသခငျ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကနေရလဒ်လို့မရပါဘူး။ တစ်ဦးကအမှန်တကယ် "စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသော" ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းထာဝရအသက်ကိုတစ်စုံလင်သော sexless ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့သေမင်း၏မစုံလငျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဘို့ဖြစ်၏။ တကျိပ်နှစ်ပါးရှေ့အလရောဂါပိုးဆယ်သုံးလပိုးနှင့်အတူပေါင်းစည်းခဲ့ကြသည့်အခါဦးခေါင်းမှ၎င်း၏ပြန်လာအပေါ်ကနေရောင်ခြည်ပိုးများကအဲဒီမှာတွေ့ဆုံခဲ့သည်နှင့်ထောက်လှမ်းရေးထံမှအလင်းတစ်ဦးရောင်ခြည်ကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦး Self-impregnation တစ်ဦးဘုရားသခငျ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ စုံလင်သောကိုယ်ခန္ဓာ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအောက်ပါအတိုင်း။
သြတ္တပ္ပစိတ်: မဆိုကိုယ်ကျင့်တရားဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်. ပြုမထားသင့်သောအရာကိုအကြောင်းကိုသိကျွမ်းရာအပေါင်းလဒ်သည်။ ဒါဟာညာဘက်အတှေးအချေါ, ညာခံစားမှုနှင့်ညာဘက်အရေးယူဘို့တရဲ့စံနှုန်းဖြစ်ပြီး; အဲဒါကိုလက်ျာဘက်ဖြစ်သိတယ်အဘယျသို့ကနေကွဲပြားရာမဆိုအတွေးသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်တားမြစ်သောနှလုံး၌တရား၏ soundless အသံတော်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ "အဘယ်သူမျှမ" သို့မဟုတ်သူသည်လည်းပြုရှောင်ရှားသို့မဟုတ်မပြုလုပ်သင့်သောအရာကိုကိုရည်မှတ်ပြုသောရဲ့အသိပညာ၏စကားသံက "မနေပါနဲ့"
သတိ: အသိပညာနှင့်အတူဖြစ်၏ သောကိုသိ၏ဖြစ်သည့်ဒီဂရီအသိပညာနှင့် ပတ်သက်. သတိဖြစ်ပါတယ်။
သတိ: တစ်ဦးချင်းစီအရာကသတိဖြစ်သည့်အတွက်ဒီဂရီအတွက်သတိဖြစ်ပါသည်သောအမှုအရာအပေါင်းတို့အတွက်ရောက်ရှိခြင်းဖြစ်ပါသည် as အဘယ်အရာကိုသို့မဟုတ် of အဘယ်အရာကိုထိုသို့သို့မဟုတ်ပါဘူး။ စကားလုံးတစ်လုံးအဖြစ်ကနာမ်သို့တီထွင် "သတိ" ကိုနာမဝိသေသနဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါနောက်ဆက် "သမီး။ " ဒါဟာဘာသာစကားမှာထူးခြားတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိ၏ မ synonym တွေဟာရှိပါတယ်, နှင့်၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုလူ့နားလည်နိုင်စွမ်းများထက်ကျော်လွန်သည်။ ဝိညာဏ် beginningless နှင့်အဆုံးမဲ့ဖြစ်၏ ဒါကြောင့်အစိတ်အပိုင်းများ, အရည်အသွေးတွေ, ပြည်နယ်များ, attribute တွေသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ သို့သျောလညျး, အချိန်နှင့်အာကာသအတွင်းနှင့်ကျော်လွန်ပြီးအနည်းဆုံးထံမှအကြီးမြတ်ဆုံးမှအရာခပ်သိမ်း, ဖြစ်ဖို့နဲ့လုပ်ဖို့ကမှီခိုသည်။ သဘာဝအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှယူနစ်နှင့်သဘာဝကျော်လွန်ပြီးယင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်သတိဖြစ်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုနှင့်သတ္တဝါဖွ as အဘယ်အရာကိုသို့မဟုတ် of သူတို့ဘာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း,, လုပ်ဖို့ရှိသမျှသည်အခြားသောအမှုအရာနှင့်သတ္တဝါသတိထားနဲ့သတိဖြစ်ငှါ၎င်း, တစ်ဦးတည်းသာအဆုံးစွန် Reality-သိစိတ်ကိုဦးတည်သတိဖြစ်ခြင်း၏မြင့်မားဒီဂရီဆက်လက်အတွက်တိုးဖို့ရှိပါတယ်။
ယဉ်ကျေးမှု: တစ်ဦးကလူသင်ယူမှု, ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဇာတ်ကောင်များ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဖွဲ့လုံးကလူ့ယဉ်ကျေးမှု၏မြင့်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်ပါတယ်။
အသေသတ်ခြင်းကို: ၎င်း၏ဇာတိနေထိုင်ရာ, ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူအသက်တော်-form ကိုချိတ်ဆက်သောဒဏ်ငွေ elastic ငွေရောင်ချည်ရဲ့ SNAP သို့မဟုတ်အများအပြားထဲကနေခန္ဓာကိုယ်အတွက်သတိမိမိကိုယ်ကိုများ၏ထွက်ခွာသွားသည်။ အဆိုပါပြင်းထန်သောအဆိုပါဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်ယင်း၏ခန္ဓာကိုယ်သေဆုံးရှိသည်ဖို့မိမိကိုယ်ကို၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါချည်ရဲ့ကြေကွဲနှင့်အတူ, resuscitation မဖြစ်နိုင်ဘူး။
အဓိပ္ပာယ်: အကြောင်းအရာတစ်ခုသို့မဟုတ်အရာ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်, အရာအပေါ်စဉ်းစားအသုံးပြုပုံအသိပညာရရှိနိုင်သည့်ဆက်စပ်စကားလုံးများကို၏ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်ပါတယ်။
လူသားမျိုးနွယ်: အမျိုးမျိုးနှင့်ပုံဆောငျသဘောအရဧဒင်ဥယျာဉ်မှာအာဒံနဲ့ဧဝရဲ့ကမျြးစာကိုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်၌ရှိသကဲ့သို့, ရှေးခေတ်ကျမ်းစာ၌ပြောသည်ခဲ့ပြီး; သူတို့ရဲ့သွေးဆောင်မှု, သူတို့ပြိုလဲ, ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကနေ၎င်းတို့၏မူလအပွစျနှငျ့ထုတျ။ ဤ
အဆိုပါပြုသော-in-the-ခန္ဓာကိုယ်အပြီးအပိုင်၏ဘုံမှများ၏ထွက်ခွာအတွက်လေးခုအဆင့်အဖြစ်ပြသထားပါသည်။ မွေးဖွားနှင့်သေခြင်း၏ဤလောကသို့အပြီးအပိုင်၏ဘုံကနေဆင်းသက်လာ, အပြောင်းအလဲ, ဌာနခွဲ, ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ယိုယွင်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အလိုဆန္ဒ-and ခံစားချက်၏အကျင့်သည်၎င်း၏စုံလင်သောကိုယ်ခန္ဓာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတိုးချဲ့နှင့်တိုးချဲ့အစိတ်အပိုင်းအတွက် feeling ကိုမြင်သောအခါအပြောင်းအလဲစတင်ခဲ့သည်။ တပ်မနှစ်ခုအဖြစ်အစားတဦးတည်းနှင့်မွဲထံမှ၎င်း၏ထွက်ခွာယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပြုသောရဲ့မြင်နေသည်၎င်း၏အလိုဆန္ဒနှင့်ကိုယ်နှိုက်၏အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်နှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်၎င်း၏ခံစားမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြုပြင်မွမ်းမံသက်ရောက်သည်သို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာကိစ္စနှင့်ပြောင်းလဲမှုပြင်နှင့်အောက်ပိုင်းပြည်နယ်မှအတွင်းပိုင်းနှင့်အသေးစိတ်အနေဖြင့်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ယိုယွင်းမြေ၏အပြင်ဘက်တွင်အပေါ်ယံလွှာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလောင်းတွေ၏မျိုးဆက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်လာမယ့်ခဲ့သည်။
အလိုဆန္ဒ: အတွင်းသတိတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏; ဒါကြောင့်ကိုယ်နှိုက်ကပြောင်းလဲမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆောင်တတ်၏နှင့်အခြားအမှုအရာအတွက်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အလိုဆန္ဒဟာပြုသော-in-the-ခန္ဓာကိုယ်, feeling သောများ၏ passive ခြမ်းများ၏တက်ကြွဘက်ဖြစ်၏ ဒါပေမယ့်အလိုဆန္ဒခံစား၎င်း၏သည်အခြားကျွန်မတို့ဟာခွဲလို့မရတဲ့အခြမ်းခြင်းမရှိဘဲပြုမူလို့မရပါဘူး။ အလိုဆန္ဒခွဲခြားဒါပေမယ့်ပိုင်းခွဲခံရဖို့ပေါ်လာတဲ့; အသိပညာအဘို့အလိုဆန္ဒနှင့်လိင်များအတွက်အလိုဆန္ဒ: ကအဖြစ်ခွဲခြားခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာခံစားချက်နှင့်အတူလူ့သဘောကိုသိသို့မဟုတ်ခံစားခဲ့ရခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်မျိုးပွားများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ လိင်အဘို့အလိုဆန္ဒကြောင့်ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်နေဆဲ, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့လေးကိုင်းအခက်များမှတစ်ဆင့်တငျပွ: အစားအစာများအတွက်အလိုဆန္ဒ, ဥစ္စာဘို့အလိုဆန္ဒ, တစ်နာမအဘို့အလိုဆန္ဒ, တန်ခိုးအဘို့အလိုဆန္ဒနှင့်ထိုကဲ့သို့သောငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု, ချစ်ခြင်း, အမုန်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့မရေမတွက်နိုင်သောအဆွယ်, , ချစ်ခင်စုံမက်, ရက်စက်မှု, ခိုက်ရန်, လောဘ, ရည်မှန်းချက်, စွန့်စားမှု, ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်အောင်မြင်ခြင်း။ အသိပညာအဘို့အလိုဆန္ဒပြောင်းလဲသွားမည်မဟုတ်ပါ; ဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အသိပညာများအတွက်အလိုဆန္ဒအတိုင်းစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်တစ်ခုအတွက်ဆန္ဒ (Fame) တစ်ဦးပူဖောင်းကဲ့သို့အချည်းနှီးနှင့် evanescent ဖြစ်ကြသည်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများအတွက် indeterminate attribute တွေ၏ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုစပျစ်သီးပြွတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ပါဝါအဘို့အလိုဆန္ဒ: ကိုယ်ပိုင် knowledge- များအတွက်အလိုဆန္ဒ (လိင်များအတွက်အလိုဆန္ဒ) ၏အမျိုးအနွယ်နှင့်ရန်ဘက်ပြုမည်ဖြစ်သောဖန်တီးထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်အသိပညာအဘို့အလိုဆန္ဒ: ယင်း၏ Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏ knower နှင့်အတူသတိနှင့်စပ်လျဉ်းသို့မဟုတ်ပြည်ထောင်စုအတွက်ဖြစ်ဖို့ပြုသော၏စိတ်ပိုင်းဖြတ်နှင့်မပျက်ခဲ့ဘူးအလိုရှိ၏။
လိင်အဘို့အလိုဆန္ဒ: သူ့ဟာသူကိုရည်မှတ်အဝိဇ္ဇာအတွက် grounded တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဖြစ်၏ ယင်းကြောင့်သောကိုယ်ခန္ဓာ၏လိင်အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်းအလိုဆန္ဒနှင့်အရာဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တစ်ဦးကိုယ်ထည်နှင့်အတူပြည်ထောင်စုသဖြင့်၎င်း၏နှိမ်နင်းခြင်းနှင့် unexpressed ခြမ်းနှင့်အတူစည်းလုံးညီညွတ်မှရှာတတ်၏။
စိတ်ပျက်အားငယ်: ကြောက်ရွံ့ရိုသေဖို့လက်နက်ချဖြစ်၏ အဘယ်အရာကို may ဖြစ်ပျက်ပါစေရန်အကွှငျးမဲ့နှုတ်ထွက်စာ။
Destiny: လိုအပ်ချက်ဖြစ်၏ ကြောင်းအရာဖြစ်သို့မဟုတ်ထင်ဟုသို့မဟုတ်အမှုကိုပြုထားပြီးအဘယျသို့များ၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်ရမည်။
Destiny, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ: လူ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မျိုးရိုးအလိုက်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရည်မှတ်အရာအားလုံးပါဝင်သည်; ယင်းအာရုံ, လိင်, ပုံစံနှင့်အင်္ဂါရပ်များ, ဘဝ, မိသားစုနှင့်လူ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ကျန်းမာရေး, အနေအထား, အသက်တာ၏သက်တမ်းနှင့်
သေမင်းထုံးစံ။ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးသည်၎င်းဘဝ၏အတွေးအခေါ်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုတို့၏အကျိုးဆက်နှင့်လက်ရှိဘ ၀ တွင်မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည့်သူ၏အတိတ်ဘ ၀ မှရရှိသောအကြွေးနှင့်ငွေပမာဏဖြစ်သည်။ လူတစ် ဦး သည်ခန္ဓာကိုယ်၏ကိုယ်စားပြုမှုကိုမလွတ်မြောက်နိုင်ပါ။ တ ဦး တည်းက၎င်းကိုလက်ခံပြီးအတိတ်ကအတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်။ သို့မဟုတ်တစ် ဦး ကထိုအတိတ်ကိုထင်မြင်ယူဆချက်၊ ပြောင်းလဲရန်၊ ပြောင်းလဲရန်နှင့်ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
Destiny, အကြားအမြင်ရ: ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်တဦးတည်းရဲ့သတိမိမိကိုယ်ကိုအဖြစ်ခံစားမှု-and ဆန္ဒနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်သမျှသောသူတို့မူကား, ဒါဟာအတိတ်ကာလတစျခုတပ်မက်လိုချင်သောအများနှင့်ထင်နှင့်အပြုတော်မူပြီတှငျအဘယျ၏ရလဒ်ဖြစ်ပြီး, ကြောင်း၏အနာဂတျတှငျကနေဖြစ်ပေါ်လာစေမည်ဖြစ်သော
Destiny, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ: အဘယ်အရာကိုများဘာများနှင့်ပြုသော-in-the-ခန္ဓာကိုယ် think ၏ဘာအလိုဆန္ဒနှင့်ခံစားမှုအဘို့အဖြစ်ဆုံးဖြတ်သည်။ သုံးစိတ်-ကိုခန္ဓာကိုယ်-စိတ်အလိုဆန္ဒ-စိတ်နှင့်၎င်း၏ Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏တွေးခေါ်အားဖြင့်, အကျင့်၏ဝန်ဆောင်မှုမှာထားခံစားမှု-စိတ်ထဲ-နေကြသည်။ အဆိုပါပြုသောဤသုံးပါးစိတ်နှင့်အတူမထားတဲ့အတှေးအချေါက၎င်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ္မာက၎င်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုထဲမှာတည်သည်နှင့်၎င်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇာတ်ကောင်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ, ဉာဏမှီနှင့်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဒေသာပင်များလည်းပါဝင်သည်။
Destiny, Noetic: ရရှိနိုင်သည့်တဦးတည်းခံစားချက်နှင့်အလိုဆန္ဒအတိုင်းမိမိကိုယ်ကို၏ရှိကြောင်းကိုယ်ပိုင်အသိပညာများပမာဏကိုသို့မဟုတ်ဒီဂရီ, တဦးတည်းရဲ့အဘိဥာဏ်လေထုထဲတွင်ဖြစ်သော noetic လေထု၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်
တဦးတည်းရဲ့ဖန်တီးမှုနှင့်အထွေထွေအင်အားစု၏တဦးတည်းရဲ့အတှေးအချေါနှငျ့အသုံးပြုခြင်း, ဒါကြောင့်ဒုက္ခ, ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း, ရောဂါများ, ဒါမှမဟုတ်အဖြစ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ္မာကနေတဆင့်တဦးတည်းလက်ပေါ်, နှင့်အခြားသောအပေါ်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နှင့်လူ့ဆက်ဆံရေးများထဲမှရဲ့အသိပညာအဖြစ်တငျပွ
ခံရသောဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့်။ self-အသိပညာ Self-ထိန်းချုပ်မှု, တဦးတည်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနှင့်အလိုဆန္ဒများ၏ထိန်းချုပ်မှုဖြင့်ကပြသနေသည်။ တဦးတည်းမိမိကိုယ်ကိုနှင့်အခြားသူများအဘို့ပြုရပါမည်ရုံသိသည့်အခါ One ရဲ့ noetic ကြမ္မာ, အကျပ်အတည်းကာလ၌ထင်ရှားစေခြင်းငှါ။ ဒါဟာအစတစ်ဘာသာရပ်အပေါ်သစ္စာဉာဏ်အလင်းများအတွက်ပင်ကိုယ်အဖြစ်လာနိုငျသညျ။
မာရျနတျက The: တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုစရိုကျအလိုရှိ၏။ ဒါဟာသှေးဆောငျလ goads နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာ၌ကမှားအရေးယူမှုမှတဦးတည်းမောင်းနှင့်ယင်း၏အပြီးအသေခံပြည်နယ်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာတညှဉျးဆဲ။
ရှုထောင့်: အမှုမဟုတျဘဲနေရာဖြစ်၏ အာကာသအာကာသရှုထောင်မဟုတ်ပါဘူး, အဘယ်သူမျှအတိုင်းအတာရှိပါတယ်။ dimensions ယူနစ်များမှာ; ယူနစ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိစ္စ၏ခွဲခြားမဲဆန္ဒနယ်မှပါ၏ ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုအတိုင်းအတာအဖြစ်ကိစ္စသူတို့ရဲ့အထူးသဖြင့်အမျိုးမျိုးဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေခွဲခြားနှင့်ဆက်စပ်သောယူနစ်နှင့်ပုံမှန်ဒါမှမဟုတ်အဖြစ်ရေးစပ်တစ်လုပ်-Up ဖြစ်ပါတယ်။ ကိစ္စလေးဖက်မြင်သည်: On-သမီး, ဒါမှမဟုတ်မျက်နှာပြင်ကိစ္စ; In-သမီး, ဒါမှမဟုတ်ထောင့်ကိစ္စ, မှတဆင့်, ဒါမှမဟုတ်လိုင်းကိစ္စ, နှင့်ရှိနေခြင်း, ဒါမှမဟုတ်အမှတ်ကိစ္စ။ အရေအတွက်သရုပ်နှင့်ဝေးလံခေါင်သီဖို့အကျွမ်းတဝင်ကနေဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းယူနစ်၏ပထမဦးဆုံးအတိုင်းအတာပေါ်တွင်-သမီးသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ယူနစ်, အဘယ်သူမျှမသိမြင်နိုင်သောအတိမ်အနက်သို့မဟုတ်အထူသို့မဟုတ်ချဉ်ဆီရှိပါတယ်; ကပေါ်မူတည်ခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်ကမြင်နိုင်မြင်သာထင်, အစိုင်အခဲဖြစ်စေခြင်းငှါဒုတိယနှင့်တတိယရှုထောင့်ရန်လိုအပ်သည်။
ယင်းယူနစ်၏ဒုတိယရှုထောင် In-သမီးသို့မဟုတ်ထောင့်ကိစ္စဖြစ်၏ ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်အဖြစ်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ကျစ်လစ်သိပ်သည်းမျက်နှာပြင်မှထိုသို့တတိယရှုထောင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ယင်းယူနစ်၏တတိယရှုထောင်မှတဆင့်သို့မဟုတ်လိုင်းကိစ္စဖြစ်၏ အဲဒါကိုသယ်ဆောင်ရန်အဘို့အစတုတ္ထအတိုင်းအတာ, အကငျြ့ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်, transmit, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်ကိစ္စအဆိုပါ unmanifested Non-ရှုထောင်ကိစ္စကနေ In-သမီးသို့နှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့မျက်နှာပြင်ကို fix ဒါခန္ဓာကိုယ်မှထွက်ခြင်းနှင့်အစိုင်အခဲမျက်နှာပြင်ကိစ္စအဖြစ်မျက်နှာပြင်များတည်ငြိမ်။
ယင်းယူနစ်များ၏စတုတ္ထအတိုင်းအတာရှိနေခြင်းသို့မဟုတ်ပွိုင့်ကိစ္စ, ဒါမှမဟုတ်လိုင်းကိစ္စ၏နောက်ရှုထောင် built နှင့်ဖွံ့ဖြိုးသောမှတစ်ဆင့်ထားတဲ့တစ်လျှောက်တွင်ရမှတ်၏အခြေခံကိစ္စလိုင်းအဖြစ်မှတ်တဲ့ဆက်ခံသည်။ ထိုသို့ unmanifested undimensional ကိစ္စအဖြစ်သို့မဟုတ်မှတဆင့်သို့မဟုတ်တစ်အချက်အားဖွငျ့နှင့်အမှတ်ယူနစ်တစ်ကိစ္စလိုင်းအဖြစ်မှတ်တဲ့ဆက်ခံအဖြစ်လိုင်းကိစ္စအဖြစ်ယူနစ်၏နောက်ရှုထောင်ဖွံ့ဖြိုးသောအားဖွငျ့တငျပွနှင့်မြင်ကြပါလိမ့်မည် In-သမီးသို့မဟုတ်မြင်နိုင်မြင်သာထင်သာအစိုင်အခဲကိစ္စပြုမူသောအမှု, အရာဝတ္ထုနှင့်ဤရည်မှန်းချက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာ၏ဖြစ်ရပ်များအဖြစ်ပြသသည်အထိမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်မျက်နှာပြင် compacts ပေးသောထောင့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ရသောအားဖွငျ့။
မရိုးသားမှု: အတှေးအချေါသို့မဟုတ်သရုပ်ဆောင်ညာဘက်ဖြစ်လူသိများသည်အဘယ်အရာကိုဆန့်ကျင်ခြင်း, အတှေးအချေါမြားနှငျ့မှားဖို့လူသိများသည်အရာကိုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ တဒါနောက်ဆုံးမှာသူ့ကိုယ်သူအဘယျသို့မှန်သည်မှားပါကြောင်းယုံကြည်စေခြင်းငှါစဉ်းစားနဲ့လုပ်နေတာ; နှင့်အဘယ်အရာမှားယွင်းနေသည်မှန်သည်။
ကျင့်: အခါအားလျော်စွာယောက်ျားသည်ကိုယ်ထည်သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ re-တည်ရှိများနှင့်အရာများသောအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အမည်အားဖြင့်ကိုယ်နှိုက်ကသတ်မှတ်ပေးသော Triune ကိုယ်ပိုင်၏ကိုသိ၏နှင့်ကျွန်မတို့ဟာခွဲလို့မရတဲ့အစိတ်အပိုင်း။ ဒါဟာအလိုဆန္ဒအတိုင်းယင်း၏တက်ကြွဘက်ဖြစ်ကြပြီးခြောက်လခံစားချက်အဖြစ်က၎င်း၏ passive ဘက်များမှာခြောက်ယောက်သောတဆယ်နှစ်ပါးသောဝေမျှ၏ဖြစ်ပါတယ်။ အလိုဆန္ဒ၏ခြောက်လတက်ကြွဝေမျှသောသူသည်အသေကောင်များနှင့်ခံစားချက်အမြိုးသမီးတအလောင်းတွေအတွက်အောင်မြင်သော Re-တည်ရှိ၏ခြောက်လ passive ဝေမျှအောင်မြင်မှု Re-တည်ရှိ။ ဒါပေမယ့်အလိုဆန္ဒ
နှင့်ခံစားမှုသီးခြားဘယ်တော့မှမဖြစ်ကြ; ယောက်ျားသည်ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်အလိုဆန္ဒခန္ဓာကိုယ်အထီးဖြစ်စေနှင့်၎င်း၏ခံစားမှုခြမ်းလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်; ထိုမိန်းမကားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခံစားချက်က၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးသမီးဖြစ်စေနှင့်၎င်း၏အလိုဆန္ဒအခြမ်းလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်။
အိပ်မက်များ: ရည်မှန်းချက်နှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္၏ဖြစ်ကြသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာအိပ်မက်နိုးဖြစ်ခြင်း၏နှိုးပြည်နယ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်၏, သို့ရာတွင်ထိုသို့နှိုးအိပ်မက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပုဂ္ဂလဒိဋ္အိပ်မက်ဟာအိပ်ပျော်နေတဲ့အိပ်မက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါခြားနားချက်သောနိုး၌တည်ရှိ၏
မြင်ကြကြားနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကမ္ဘာ၏နောက်ခံပေါ်တွင်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်အခြားအတှေးအများ၏ပြင်ပဖြစ်ကြောင်းသို့မှသာစစ်မှန်သောဟန်သမျှသောအရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်အသံအိပ်မက်မက်; နှင့်ကျနော်တို့အိပ်ပျော်နေတဲ့အိပ်မက်၌တွေ့မြင်သို့မဟုတ်စကားကိုနားထောငျသောအရာတို့ကို၎င်းရည်မှန်းချက်ကမ္ဘာ၏စီမံကိန်း၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ကမ္ဘာ၏နောက်ခံပေါ်တွင်ထင်ဟပ်ဖြစ်ကြောင်း။ ကျွန်တော်အိပ်ပျော်အိပ်မက်နေကြသည်နေစဉ်နှိုးကမ်ဘာပျေါတှငျစီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်ထင်ဟပ်ရုံကြှနျုပျတို့အတှကျတကယျ့အဖြစ်များမှာ
ယခု။ ကျွန်တော်နိုးလာသောအခါနှိုးကမ္ဘာမှအိပ်မက်ကမ္ဘာကြီးနေရာ၌နှင့် Unreal ပုံရသည်ရှိသောကြောင့်သင်တန်း၏, ကျွန်တော်, အအိပ်အိပ်မက်ထို့နောက်ခဲ့ပုံကိုမှန်ကန်မှတ်မိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အိပ်ပျော်ကိုကျနော်တို့ကနှိုးပြည်နယ်အတွင်းရှိနေစဉ်ကျွန်တော်စဉ်းစားသောအရာတို့ကိုရန်ဖြစ်ပျက်သောအရာပိုဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ထင်ဟပ်နေစဉ်ကျွန်တော်အိပ်မက်၌တွေ့မြင်သို့မဟုတ်စကားကိုနားထောငျသို့မဟုတ်ပြုသို့သော်အားလုံး။ အဆိုပါအိပ်ပျော်နေသောအိပ်မက်ရှေ့မှာကျင်းပမှုအရာတို့ကိုထင်ဟပ်တဲ့မှန်မှနှိုငျးယှဉျနိုငျသညျ။ အဆိုပါအိပ်ပျော်နေတဲ့အိပ်မက်ထဲတွင်အဖြစ်အပျက်အပေါ်တှေးတောဆငျခွ by တဦးတည်းသူမပြုမီသဘောပေါက်ကြဘူးကြောင်း, သူ၏အကြံအစည်နှင့်သူ၏လှုပ်ရှားမှု, မိမိကိုမိမိအကြောင်းကိုအများကြီးအနက်ကိုဘော်ပြလိမ့်မည်။ ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်မတူညီကြ, အသက်ရှင်ခြင်းကိုအခြားကမ္ဘာကဖြစ်ပါတယ် Dream ။ အိပ်မက်များခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်အနည်းဆုံးအမျိုးမျိုးနှင့်အမျိုးပေါင်းသို့ခွဲခြားရပါမည်။ သေဆုံးပြည်နယ်များအတွက်နှိုးပြည်နယ်ဖို့အိပ်ပျော်နေတဲ့အိပ်မက်ပင်ဖြစ်သည်အတန်ငယ်အဖွစျမွကွေီးပျေါဘဝနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်ပြီးနောက်။
တာဝန်: တဦးတည်းမိမိကိုယ်ကိုဖို့ဒါမှမဟုတ်တာဝန်တောင်းဆိုကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်လိုလိုလားလားသို့မဟုတ် unwillingly, paid ရမည်ဖြစ်သည့်အခြားသူများမှကြွေးတင်နေသည်ဟုအရာဖြစ်တယ်။ အဆိုပါပြုသောအားဖြင့်ကိုယ်နှိုက်လွှတ်ပေးခြင်းသည်အထိလုပ်ငန်းတာဝန်များ, မွကွေီးပျေါမှာထပ်ခါတလဲလဲဘဝတွေကိုရန်ပြုသော-in-the-ခန္ဓာကိုယ်ခညျြနှောငျ
အပြစ်တင်၏ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသို့မဟုတ်ကြောက်စိတ်မျှော်လင့်ချက်မပါဘဲလိုလိုလားလားနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာအားလုံးတာဝန်များကို၏စွမ်းဆောင်ရည်, နှင့်ကောင်းမွန်စွာပြုကြရလဒ်များကိုမှ unattached ဖြစ်ခြင်း။
"နေထိုင်သူ": အဆိုပါအဘိဥာဏ်လေထုထဲ၌ကျိန်းဝပ်တော်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ nter နှင့်အကြမ်းဖက်မှုများ၏လုပ်ရပ်များဖို့ပြုသောသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ကြိုးစားပါတယ်သောပစ္စုပ္ပန်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပြုသော၏ဟောင်းတစ်ဦးဘဝကနေဆိုးအလိုဆန္ဒဆိုလိုဖို့, ဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အလေ့အကျင့်အတွက်လုပ်ကြဖို့အသုံးပြုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ် ကျင့်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်။ အဆိုပါပြုသောနေသောအဖြစ်သို့မဟုတ်ကျင့်ဆိုး၏ရင်ခွင်အဖြစ်၎င်း၏အလိုဆန္ဒများအတွက်တာဝန်ရှိသည်; ယင်း၏အလိုဆန္ဒများကိုဖကျြဆီးမရနိုငျ; သူတို့နောက်ဆုံးမှာစဉ်းစားတွေးခေါ်အားဖြင့်၎င်း, အလိုတော်အားဖြင့်ပြောင်းလဲသွားရပါမည်။
သေဆုံး: နှလုံးစှနျးကနေသူ့ရဲ့ဒဏ်ငွေပုံစံစုဆောင်းပြီးတော့များသောအားဖြင့်လည်ချောင်းထဲမှာတစ်ဦး gurgle သို့မဟုတ်ခလောက်ဖြစ်စေတဲ့, ထွက်သက်၏နောက်ဆုံးသက်ပြင်းရှူးနှင့်အတူပါးစပ်မှတစ်ဆင့်ကိုယ်တိုင်ကထွက် puffing ၏အသက်တော်-ပုံစံ၏ထုတ်ရှည်လျားရုတ်တရက်သို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သေခြင်းတရားမှာပြုသောထွက်သက်နှင့်အတူခန္ဓာကိုယ်အရွက်။
ဖြေလျှော့: ကြမ္မာနှင့်သူ့ဟာသူအတွက်ပြုသောရဲ့မှီခို၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်; မသက်ဆိုင်ဘဲမူလဥစ္စာဓနသို့မဟုတ်ဆင်းရဲမွဲတေမှုအရေးယူအတွက်သေချာသောမှန်မှန်, ဘဝသို့မဟုတ်မိသားစုသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများကိုအတွက်အနေအထား။
အတ္တ: လူ့၏ "ငါ" ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ခံစားမှုကြောင့်က၎င်း၏ Triune ကိုယ်ပိုင်ငါ-သမီး၏ဝိသေသလက္ခဏာမှခံစားရများ၏စပ်လျဉ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအတ္တများသောအားဖြင့်ကိုယ်နှိုက်နှင့်အတူကိုယ်ခန္ဓာ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများပါဝင်သည်ပေမယ့်အတ္တကိုသာဖြစ်ပါတယ် ခံစားချက် ဝိသေသလက္ခဏာ၏။ အဆိုပါ အကယ်.
ခံစားချက်အထောက်အထားခဲ့ကြသည်လူ့အတ္တထက်ကိုယ်တိုင်ကအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမကပိုသိတယ်သော်လည်း, ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ခံစားမှု, အပြတ်အတောက်ဆက်လက်အားလုံးကိုအချိန်မှတစ်ဆင့်နှင့်ကျော်လွန်ပြီးဆက်ရှိနေသေးသောအမြဲတမ်းနှင့် deathless "ငါ" အဖြစ်သူ့ဟာသူသိကြလိမ့်မယ်
အဲဒါကို "ဟုခံစားမှု။ " ဖြစ်ပါတယ်
ဒြပ်စင်, တစ်ခုက: ခွဲခြားနှင့်အရာရှိသမျှတို့ကိုအလောင်းတွေသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်ရေးစပ်နေကြတယ်, တစ်ဦးချင်းစီဒြပ်စင်အခြားသုံးဒြပ်စင်၏တစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ယင်း၏မျိုးအားဖြင့်ခွဲခြားစေခြင်းငှါဤမျှနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကြင်နာနိုင်အောင်ကိစ္စအဖြစ်ပေးသောသဘာဝသို့သဘောသဘာဝယူနစ်လေးခုအခြေခံအမျိုးမျိုးတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ပေါင်းစပ်ပြီးနှင့်သဘာဝတရား၏တပ်ဖွဲ့များအဖြစ်သို့မဟုတ်မည်သည့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်သရုပ်ဆောင်ခြင်းရှိမရှိ၎င်း၏ဇာတ်ကောင်များနှင့် function ကိုအားဖြင့်လူသိများနိုင်ပါသည်။
ဒြပ်စင်, တစ်ခုက: တစ်ဦးချင်းစီကမီး၏ဒြပ်စင်၏အဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်လေထု၏, ဒါမှမဟုတ်ရေ, ဒါမှမဟုတ်မြေကြီးတပြင်တငျပွသဘောသဘာဝတစ်ယူနစ်ဖြစ်၏ သို့မဟုတ်အခြားသဘာဝယူနစ်တစ်ခုအစုလိုက်အပြုံလိုက်အတွက် Element တစ်ခုရဲ့တစ်ဦးချင်းယူနစ်အဖြစ်နှင့်ယူနစ်၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်လွှမ်းမိုး။
ဒြပ်စင်အောက်ပိုင်း: မီး, လေ, ရေ, မြေကြီးယူနစ်လေးခုဒြပ်စင်များမှာ, ဒီမှာကိုခေါ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်, ပေါ်တယ်, ပုံစံနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံယူနစ်။ သူတို့ကသဘာဝသမျှသောအမှုအရာများ၏အကြောင်းတရားများ, စသောအပြောင်းအလဲထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်ပွဲများမှာ
ခဏအဘို့ကျန်ကြွင်းသောအရာပြောင်းလဲမှု, ဖြစ်တည်မှုသို့ လာ. , အရာပျော်နှင့်ကွယ်ပျောက်အခြားပွဲသို့ re-created ခံရဖို့ပါလိမ့်မယ်။
element, Upper: မီးသတ္တဝါ, လေ, ရေ, မြေကြီးဒြပ်စင်အရာထဲကသူတို့ spheres ကို၏ Intelligence အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနေကြတယ်, ဒါမှမဟုတ်ကမ္ဘာ၏အစိုးရဖွဲ့စည်းသူအများတို့သည် Triune တည်ပြီးပြည့်စုံခြင်းဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့၏
ဤအသတ္တဝါလျှင်းမသိရပါနှင့်ဘာမျှမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်, သဘောသဘာဝယူနစ်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီသဘာဝမရှိကြပေ။ သူတို့ကစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ဒြပ်စင်များ၏ unmanifested ခြမ်းထဲက created, သူတို့လုပ်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ၌သူတို့ကိုညွှန်ကြားသူ Triune တည်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ဖို့ဿုံကိုတုံ့ပြန်နေကြသည်။ သူတို့ဟာအဘယ်သူမျှမသဘောသဘာဝတပါးသောဘုရားများသို့မဟုတ်အခြားတပ်ဖွဲ့များကမနိုင်နိုင်သည့်ဆန့်ကျင်သည်ပညတ်တရား၏အာဏာဖြစ်ကြသည်။ ဘာသာတရားသို့မဟုတ်အစဉ်အလာမှာတော့သူတို့ကောင်းကင်တမန်မင်းကောင်းကင်တမန်များသို့မဟုတ်ရောက်လာသောသံတမန်တို့အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့နိုင်ပါသည်။ တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည့်လူ့ရန်ညွှန်ကြားချက်ပေးစေခြင်းငှါထင်ရှားစေခြင်းငှါ, ဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားများ၏ရေးရာပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းကိုရောက်စေဖို့ပေမယ့်သူတို့က, လူ့ Instruments ခြင်းမရှိဘဲ, ကမ္ဘာ၏အစိုးရ၏တိုက်ရိုက်အမိန့်ဖြင့်ပြုမူ။
ငြူစူခြင်း: သို့မဟုတ်တဦးတည်း hungeringly ဖြစ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရှိသည်ဖို့လိုအဘယ်အရာကိုသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ဆီသို့နေမကောင်း-အလိုတော်သို့မဟုတ်အာဃာတခါးသီးမှု၏ခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့အတွက်တန်းတူရေး: တစ်ဦးချင်းစီတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, စဉ်းစားရန်ဖြစ်, အလိုတော်ရန်ပြုရန်နှင့်ပြုပါရန်နှင့်ရှိသည်ဖို့, အလိုတော်ရန်သူဖြစ်နိုင်ဘာရှိသည်ဖို့, အင်အား, ဖိအားသို့မဟုတ်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းခြင်းမရှိဘဲ, အတိုင်းအတာပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းဖြစ်ပါသည် သူမကြိုးစားပါဘူး
ထာဝရအက The: သော beginningless နှင့်အဆုံးမဲ့အချိန်အတွင်းမှာနှင့်ကျော်လွန်ပြီးနှင့်အချိန်အားဖြင့်ကန့်သတ်သို့မဟုတ်တိုင်းတာအပေါ်မှီခိုသည့်အာရုံ, မ, နှင့်အာရုံအတိတ်, ပစ္စုပ္ပန်, ဒါမှမဟုတ်အနာဂတ်အဖြစ်, အချိန်အားဖြင့်ထိခိုက်သောအရာမူကား, ကြောင်းအရာအတွက်အမှုအရာတို့သည်ဖြစ်ကြ, သူတို့သည်မဖြစ်သကဲ့သို့အရာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဘူးကဲ့သို့ဖြစ်ရသိရသည်။
အတှေ့အကွုံ: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခံစားချက်အပေါ်အာရုံမှတဆင့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့လုပ်ရပ်, အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်၏အထင်အမြင်နှင့်နာကျင်မှုသို့မဟုတ်အပျြောအပါးအဖြစ်ခံစား၏တုံ့ပြန်မှု, ဝမ်းမြောက်သောစိတ်သို့မဟုတ်ဝမ်းနည်းခြင်း, သို့မဟုတ်အခြားခံစားချက်သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအတွေ့အကြုံပြုသောအတွေ့အကြုံကနေသင်ယူ extract မည်အကြောင်း, ပြုသောများအတွက်ပြင်ပ၏အနှစ်သာရဖြစ်ပြီး, သင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အပြင်ပန်း, တစ်ခုက: ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ္မာအတိုင်း, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေယာဉ်တခုတခုအပေါ်မှာလုပ်ရပ်, အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်အဖြစ် exteriorized ရှေ့မှာမအတွေးထဲတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲသောလုပ်ရပ်, အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အချက်အလက်နဲ့: ရည်ရွယ်ချက်မှာသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လုပ်ရပ်များ, ပြည်နယ်အတွက်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကြုံတွေ့သို့မဟုတ်လေ့လာတွေ့ရှိဖို့အဖြစ်ထင်ရှားခြင်းနှင့်အာရုံအားဖြင့်စုံစမ်းထားတဲ့အပေါ်လေယာဉ်ပေါ်မှာတ္ထုသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များ, သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်များကထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရအဖြစ်များ၏ဖြစ်ရပ်မှန်များဖြစ်ကြသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ, အဘိဥာဏ်အချက်အလက်များ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် noetic အချက်အလက်များ: အချက်အလက်လေးမျိုး၏ဖြစ်ကြသည်။
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သံသယမရှိဘဲယုံကြည်မှုနှင့်ယုံကြည်မှု၏အသက်တော်-ပုံစံပေါ်တွင်ခိုင်ခံ့စှဲစေသည်ဖြစ်သောပြုသော၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်ခြင်းအရာသည်ကျင့်ကနေလာပါတယ်။
မုသာ: သစ္စာကိုဖျက်ဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်နေသည်အရာကိုတကယ်တော့, ဒါမှမဟုတ်စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်နေသည်သောအရာကို၏ငြင်းပယ်အဖြစ်ကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျော်ကြားမှု, (တစ်ဦးကအမည်): ပူဖောင်းအဖြစ် evanescent ဖြစ်ကြသည်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများအတွက် indeterminate attribute တွေ၏ဆွဲဆောင်မှုများပြောင်းလဲနေတဲ့စပျစ်သီးပြွတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြောက်လန့်: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခကိုရည်မှတ် foreboding သို့မဟုတ်ရြောကျမညျ့အန်တရာယျ၏ခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ခံစားချက်: ခံစားရသောခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်တဦးတည်းရဲ့သတိမိမိကိုယ်ကို၏ဖြစ်၏ သောခန္ဓာကိုယ်ခံစားရပေမယ့်ခံစားရသောခန္ဓာကိုယ်နှင့်အာရုံထဲကနေ, ခံစားချက်အဖြစ်သူ့ဟာသူဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ခွဲခြားမထားဘူး, ထိုသို့ပြုသော-in-the-ခန္ဓာကိုယ်, အလိုဆန္ဒဖြစ်သည့်များ၏တက်ကြွဘက်၏ passive ခြမ်းဖြစ်ပါတယ်။
စားနပ်ရိက္ခာ: လေးခုစနစ်များ၏အဆောက်အဦးဖွင့်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ upkeep ဘို့မီးလေထု, ရေ, မြေကြီးယူနစ်၏ဒြပ်ပေါင်းများ၏မရေမတွက်နိုင်သောပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတာသဘာဝပစ္စည်းများ၏ဖြစ်ပါတယ်။
form ကို: လမ်းညွှန်နှင့်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းအဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းဘောငျသတ်မှတ်သောစိတ်ကူး, အမျိုးအစား, ပုံစံသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းဖြစ်၏ နှင့်ပုံစံအသွင်အပြင်အဖြစ်မြင်ကွင်းသို့ဖွဲ့စည်းပုံရရှိထားသူများနှင့်ဖက်ရှင်တွေ။
လတ်ြလပ်ခ: ဒါဟာသဘာဝကနေသူ့ဟာသူ detach လုပ်လိုက်သောနှင့် unattached ဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်အခါပြုသောများ၏အလိုဆန္ဒ-and ခံစားချက်၏ပြည်နယ်သို့မဟုတ်အခွအေနေဖြစ်ပါတယ်။ Freedom ကိုသူသည်အနေရာတိုင်းမှာတဦးတည်းကသူနှစ်သက်တဲ့ဘယ်သို့ဆိုသို့မဟုတ်ပြုအံ့သောငှါမဆိုလိုပါ။ လတ်ြလပ်ဖြစ်ပါသည်: လေးပါးကိုအာရုံမဆိုအရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်အရာမှပူးတွဲမှုမရှိဘဲဖြစ်နှင့်အလိုတော်နှင့်မရှိသည်; နှင့်ဖြစ်ပါသည်ပါလိမ့်မည်သို့မဟုတ်မသို့မဟုတ်ရှိပါတယ်ဘယ်အရာကိုတဦးတည်းရန်, စဉ်းစားခြင်းဖြင့်, ဖြစ်ဖို့ဆန္ဒရှိဖို့, လုပ်များနှင့်ရှိသည်ဖို့, ပူးတွဲခံခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သဘာဝမဆိုအရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်အရာမှအတွေးအတွက်ပူးတွဲ, သင်စဉ်းစားနေချိန်တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို attach မည်မဟုတ်ကြောင်းကြသည်မဟုတ်ဆိုလိုသည်။ attachment ကျွန်ခံကိုဆိုလိုသည်။
Function ကို: ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အရာအဘို့ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ချက်၏သင်တန်းဖြစ်ပြီး, အရာရွေးချယ်မှုအားဖြင့်, ဒါမှမဟုတ်လိုအပ်ချက်အားဖြင့်ဖျော်ဖြေသည်။
လောင်းကစား: ၏ဂိမ်းများကိုအားဖြင့် "လောင်းကစား" အားဖြင့် "ကံ" များကပိုက်ဆံသို့မဟုတ်တန်ဖိုးတစ်ခုခုအနိုင်ရဖို့လောင်းကစားဝိုင်းဝိညာဉျတျောတစျခု, ဒါမှမဟုတ်ရရန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နာတာရှည်အလိုဆန္ဒ, တစ်ခုစွဲ "အခွင့်အလမ်း" ဖြစ်ပါတယ်အစားရိုးသားအလုပ်ကဝင်ငွေ။
Genius, တစ်ဦးက: မိမိအကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏နယ်ပယ်များတွင်အခြားသူများထံမှသူ့ကိုခွဲခြားထားတဲ့မူလအစနဲ့စွမ်းရည်ကိုပြသတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအလက်ဆောင်တွေမွေးရာပါဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကပစ္စုပ္ပန်ဘဝ၌လေ့လာမှုကဝယ်ယူမခံခဲ့ရပါ။ သူတို့ကမိမိအအတိတ်ကဘဝများစွာကိုအတွက်အများကြီးအတွေးနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအားဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့ကြနှင့်အတိတ်ကနေရလဒ်အဖြစ်သူနှင့်အတူကိုကျော်ယူဆောင်နေကြသည်။ ပါရမီ၏ကွဲပြားဝိသေသလက္ခဏာများအတွေးအခေါ်များကိုရည်မှတ်မူရင်း, နည်းလမ်း, သူ၏ပါရမီဖော်ပြ၏တိုက်ရိုက်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သူမဆိုကျောင်းရဲ့သင်ကြားမှုအပေါ်မူတည်ပါဘူး; သူကသစ်ကိုနည်းလမ်းများကိုကြံစည်ခြင်းနှင့်အာရုံအဆိုအရသည်သူ၏ခံစားချက်-and ဆန္ဒဖော်ပြ၌မိမိသုံးစိတ်ထဲတွင်မဆိုအသုံးပြုသည်။ သူကသူ့ပါရမီ၏လယ်ပြင်၌သူ၏အတိတ်သူ၏အမှတ်တရများများ၏ပေါင်းလဒ်နဲ့အတူထိတွေ့၌တည်ရှိ၏။
ပိုးက The Lunar: အစဉ်အဆက်စနစ်အနေဖြင့်ထုတ်လုပ်ကာ Re-တည်ဆဲပြုသောများအတွက်နေထိုင်ရာဖြစ်, တစ်ဦးလူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပှားအတှကျလိုအပျသညျ့ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှတဆင့်၎င်း၏ခရီးသွားသည့်မှားသောစိတ်နှင့်ကင်းလွတ်နှင့်ဆုတ်လ၏အဆင့်ဆင်တူဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လမှတစ်ဦးနှင့်စပ်လျဉ်းရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာလဟုခေါ်သည်။ ဒါဟာ pituitary ခန္ဓာကိုယ်မှစတင်သည်နှင့်အစာပြွန်နှင့်အစာခြေကျေးရွာအုပ်စုများ၏အာရုံကြောတလျှောက်က၎င်း၏အောက်ဖက်လမ်းကြောင်းဆက်လက်ဖြစ်လျှင်, ဆုံးရှုံးခဲ့ရမဟုတ်မှန်လျှင်, ဦးခေါင်းမှကျောရိုးတစ်လျှောက်တက်။ ယင်း၏အောက်ဖက်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသဘာဝထွက်စလှေတျတျောခဲ့သောအလင်းတို့ကိုစုဝေးစေသဖြင့်, အစာခြေစနစ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားအစားအစာထဲမှာသဘာဝအားဖြင့်ပြန်ပြီးလျှင်, က Self-ထိန်းချုပ်မှုများကဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးသောအသွေးတော်ကနေအလင်းတို့ကိုစုဝေးစေသော။
ပိုးက The နေရောင်ခြည်: အပျိုဖော်ဝင်စမှာ pituitary ခန္ဓာကိုယ်၌တည်ရှိ၏နှင့်အချို့သောရှင်းရှင်းလင်းလင်းအလင်းရှိတယ်သောပြုသောတစ်ဦးသောအဘို့ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ခြောက်လကနေရောင်ကဲ့သို့တောင်ပိုင်းလမ်းကြောင်းကိုရက်နေ့တွင်, ကျောရိုး၏ညာဘက်အခြမ်းအပေါ်, ဆငျးသ; ထို့နောက်သူကပထမဦးဆုံး lumbar ချပေးမှာလှည့်နှင့်က pineal ခန္ဓာကိုယ်ရောက်ရှိသည်အထိခြောက်လက၎င်း၏မြောက်ပိုင်းသင်တန်းပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက်အပေါ်တက်။ ယင်း၏တောင်ပိုင်းနှင့်မြောက်ပိုင်းကခရီးကင်းလှည့်တွင်ကျောရိုးထာဝရအသက်တာ၏လမ်းကြောင်းကို။ အဆိုပါ lunar ပိုးကနေရောင်ခြည်ပိုးဖြတ်သန်းတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်အားဖြင့်ခိုင်ခံ့သည်။
စွဲမက်ဖွယ်ရာ: တအာရုံကသူ၏ခံစားချက်-and ဆန္ဒအပေါ်ပစ်သော, တစ်ဦးစာလုံးပေါင်းများက object တစ်ခုသို့မဟုတ်အရာနှင့်အတူစိတ်ဝင်စားတယ်, သူ့ကိုချုပ်ထားလျက်ရှိသောရရှိထားသူဖြစ်သောကြောင့်, တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်းမှတဆင့်မြင်နေထံမှသူ့ကိုကာကွယ်ပေးသည်နှင့်နားလည်မှုမှသည်ကြောင်းခံရသောတစ်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ် ဒါဟာတကယ်တော့ဖြစ်သကဲ့သို့အရာ။
မှောငျ: တစ်အဘိဥာဏ်ပြည်နယ်ချည်းခံစားချက်တွေကိုနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုကျော် brooding ဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ အထဲတွင်တဦးတည်းမိမိကိုယ်ကိုဖို့အန္တရာယ်ပြုမူသောအမှုဆီသို့ဦးတည်စေခြင်းငှါအရာ, ရောဂါနှင့်အဆင်မပြေ၏အတွေးများကိုဆွဲဆောင်တံ့သောမှောင်တစ်ခုလေထုဖန်တီးနိုင်ပြီး
အခြားသူတွေ။ မှောငျများအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်း Self-စိတ်ပိုင်းဖြတ်အတွေးနှင့်ညာဘက်အရေးယူမှုဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားသခငျသညျအဖြေ: ယင်းသူတို့ခံစားမိရာ၏တန်ခိုးအာနုဘော်သို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်များ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်လူသားတွေတို့၏အကြံအစည်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဖြစ်ခြင်းဟာအတွေးဖြစ်၏ တစုံတယောက်သောသူသည်သို့မဟုတ်, ဖြစ်ဖို့ဆန္ဒရှိဖို့, လုပ်ကြိုက်နှစ်သက်စေခြင်းငှါ, ဘယျအဖွစျ။
အစိုးရ, ကိုယ်ပိုင်: မိမိကိုယ်ကိုမိမိကိုယ်ကိုဆိုလိုသည်မှာလူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ရှိနေပြီးကိုယ်ခန္ဓာ၏အော်ပရေတာဖြစ်သောသူသည်သတိရှိရှိပြုသောခံစားမှုနှင့်လိုအင်ဆန္ဒများပေါင်းစည်းမှုဖြစ်သည်။ အစိုးရသည်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုသည်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် ဦး စားပေးမှုများ၊ မလိုမုန်းထားမှုများသို့မဟုတ်ကိလေသာများမှတွန်းလှန်နိုင်သည့်သို့မဟုတ်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သောမိမိ၏ခံစားချက်နှင့်အလိုဆန္ဒများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်ခြင်း၊ မှန်ကန်စွာစဉ်းစားခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှအာဏာပိုင်များဖြစ်သောအာရုံများ၏အရာဝတ္ထုများနှင့်ပတ်သက်သောကြိုက်နှစ်သက်မှုများနှင့်မနှစ်သက်ရာများကထိန်းချုပ်ထားမည့်အစားအတွင်းမှအခွင့်အာဏာစံနှုန်းများအနေဖြင့်ဖြစ်သည်။
လောဘ: , get ရန်ရှိသည်ဖို့, တပ်မက်လိုချင်သောသမျှကိုင်ဖို့လောဘဖြစ်ပါတယ်။
မြေပြင်, ဘုံ: နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးစီးပွားများအတွက်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောတွေ့ကြံပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ရသောနေရာတစ်နေရာသို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဆိုလိုတာရန်ဒီနေရာကိုအသုံးပြုသည်။ မြေကြီးတပြင်လူ့အလောင်းတွေအတွက်ကိုကျင့်သောသူသာလျှင်မိမိတို့၏ဘုံအကျိုးစီးပွားများအတွက်အတူတကွဆောင်ရွက်ရန်အဘို့အစည်းအဝေးမြေပြင်သည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပြုသောကြောင့်ဖြတ်သန်းရာသဘာဝတရား၏ဒြပ်စင်၏ယူနစ်များအကြားအရေးယူများအတွက်ဘုံမြေပြင်သည်။ ဒါကြောင့်လည်းမြေကြီးတပြင်မျက်နှာပြင်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသောလူတို့အတှေးအပေါ်ကြီးထွားနှင့်မြေပေါ်မှာအတည်ဖြစ်သောအပင်နှင့်တိရိစ္ဆာန်များအဖြစ် exteriorized ထားတဲ့အပေါ်နှင့်အလိုဆန္ဒများနှင့်လူ့သတ္တဝါ၏ခံစားချက်များကို၏ပုံစံများသို့ပြင်ပနေသောဘုံမြေပြင်သည်။
အလေ့အထ: စကားလုံးသို့မဟုတ်စဉ်းစားတွေးခေါ်အားဖြင့်အသက်ရှု-form ကိုတခုတခုအပေါ်မှာအထင်အမြင်၏လုပ်ရပ်အားဖြင့်စကားရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးဆန်းတဲ့အသံသို့မဟုတ်ပြုမူသောအမှုထပ်ဖြစ်မကြာခဏတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အကြောင်းမရှိဖယ်ရှားနေသည်မဟုတ်လျှင် ပို. ပို. ပိုပြီးသိသာဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ဖြစ်သောလေ့လာသူ၏ကွာဟတဲ့အတွက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ "ရပ်တန့်" နဲ့ "ပြန်လုပ်ကြဘူး" ဟုအဆိုပါစကားလုံးသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ် -whatever: ဒီအလေ့အကျင့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောစဉ်းစားတွေးခေါ်ဆက်လက်မဟုတ်အသုံးပြုပုံသို့မဟုတ်အပြုသဘောစဉ်းစားတွေးခေါ်နေဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ အလေ့အကျင့်ဆန့်ကျင်အပြုသဘောစဉ်းစားတွေးခေါ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားကိုထွက်သက်-ပုံစံအပေါ်အထင်အမြင် efface, ဒါကြောင့်ယင်း၏ထပ်မဖြစ်အောင်တားဆီးပါလိမ့်မယ်။
တရားစီရငျ၏ခန်းမ: အဆိုပါပြုသောကိုယ်နှိုက်ကိုတွေ့ထားတဲ့အတွက်အသေခံပြီးနောက်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလင်း၏တစ်ဦးခန်းမရှိပုံအဘယ်အရာကိုတကယ်အသိပညာပေအလင်း၏နယ်ပယ်သည်။ ကတတျနိုငျသလျှင်ပြုသော, ဘယ်နေရာမှာမဆို, အံ့ဩမိန်းမောခြင်းနှင့်ကလည်းအရေးပေါ်သတိပေးမှုကိုဖြစ်ပါတယ်လွတ်မြောက်ရန်မယ်လို့; ဒါပေမဲ့
မနိုင်။ ထိုသို့ form မှာမဟုတျပါဘူးသော်လည်းဒါဟာမွကွေီးပျေါမှာ, ကသူ့ဟာသူဖြစ်ဟုယုံကြည်ရသော, ပုံစံမသိဖြစ်၏ ပုံစံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်မပါဘဲ၎င်း၏သက်တော်-ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်၌သို့မဟုတ်အပေါ်ကိုသိတတ်သောအလင်းအသက်ရှု-ဖွဲ့စည်းရန်, အမှန်တရား, အကို
ဒါကြောင့်ထင်ခဲ့သမျှသောအမှု, မြေကြီးပေါ်က၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်ရှိနေစဉ်ထိုသို့ပြုကြသည်ကိုပြုမူသောအမှုသတိတာဘဲ။ သိအလင်း, အမှန်တရား, ဖြစ်သူတို့ကိုပြသထားတယ်အဖြစ်ပြုသောသူတို့ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်ကဤမသိဖြစ်တယ်, နှင့်ပြုသောကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုစီရင်, နှင့်၎င်း၏
ပျော်ရွှင်မှု: သူတို့မျှတတဲ့ပြည်ထောင်စုအတွင်းဖြစ်ကြပြီးအခါတဦးတည်း Right-and-အကြောင်းပြချက်များနှင့်အလိုဆန္ဒ-and ခံစားချက်၏ပြည်နယ်နှင့်အညီထင်နှင့်ဘာလုပ်တယ်၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်
လက်ကိုတင်ခြင်းအားဖြင့်အနာရောဂါငြိမ်းစရာ: လူနာအတှကျအကြိုးရန်, ရောဂါကိုငြိမ်းစေသောသူပိတ်ဆို့ထားပြီးသောအသက် re-တည်ထောင်သည့်စနစ်တကျစီးဆင်းမှု၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သဘာဝကအသုံးပြုခံရဖို့သာဆန္ဒရှိတူရိယာကြောင်းကိုနားလည်သင့်တယ်
ဒါမှမဟုတ်လူနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတူဝငျရောကျစှကျ။ ဒါဟာရောဂါကိုငြိမ်းစေသောဦးခေါင်း၏ရှေ့နှင့်နောက်ကျောအပေါ်လက်ျာနှင့်လက်ဝဲလက်နှင့်စွန်ပလွံအားမရဖြင့်ပြုပါ, အဲဒီနောက်အခြားသုံးအလားအလာဦးနှောက်ငှါ, thorax ထဲမှာ, ဝမ်းဗိုက်, နှင့်စခွေငျးငှါ
ထွင်ထားတဲ။ ထို့ကြောင့်ရောဂါကိုငြိမ်းစေသောရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်လုပ်နေတာအတွက်လျှပ်စစ်နှင့်သံလိုက်တပ်ဖွဲ့များစီးဆင်းနှင့်သဘာဝအားဖြင့်၎င်း၏စနစ်တကျလည်ပတ်မှုအတွက်ညှိနှိုင်းမှုသို့လူနာများ၏စက်ထားရာကနေတဆင့်တူရိယာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရောဂါကိုငြိမ်းစေသော၌တည်နေသင့်တယ်
passive ကောင်းသော-အလိုတော်, လစာသို့မဟုတ်အမြတ်၏အတွေးမပါဘဲ။
အနာရောဂါငြိမ်းစရာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖွငျ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအယှက်ကုသနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီမှာရောဂါရှိကြောင်းငြင်းဆိုသဖြင့်အဖြစ်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားထုတ်မှုအားဖြင့်ရောဂါ၏ရောဂါပျောက်ကင်းသင်ပေးနှင့်လေ့ကျင့်ရန်ကြိုးစားသောအများအပြားကျောင်းများဖြစ်ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်ကျန်းမာရေးအတည်ပြုခြင်းဖြင့်
ရောဂါ၏အရပျ၌, ဒါမှမဟုတ်ဆုတောင်းပဌနာခွငျးအားဖွငျ့, ဒါမှမဟုတ်စကားများသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုများ၏အထပ်ထပ်အသုံးပြုပုံသို့မဟုတ်သမျှသည်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားထုတ်မှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ စဉ်းစားနဲ့စိတ်ခံစားမှုမြော်လင့်ခြင်း, ရူ့, ဝမ်းမြောက်ခြင်း, ဝမ်းနည်းခြင်း, ဒုက္ခ, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အသုံးပြုပုံခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်စေလုပ်ပါ။ တစ်ကယ့်ရောဂါ၏ရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်
ရောဂါ၏အပြင်ပန်းဖြစ်သည့်အရာ၏အတွေးဟန်ချက်ညီမှုကိုထိခိုက်ခြင်း။ အကြောင်းရင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်, ရောဂါပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ရောဂါ၏ငြင်းပယ်ခြင်းသည်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ရောဂါမရှိပါက၎င်းကိုငြင်းပယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျန်းမာရေးရှိသည့်နေရာတွင်ရှိနှင့်ပြီးသားကိုအတည်ပြုခြင်းဖြင့်ရရှိသောဘာမျှမရှိပါ။
ကြားနာ: လူသားတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသဘာဝတရား၏လေကြောင်းဒြပ်စင်၏သံအမတ်ကြီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်, လေ၏ယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြားနာသဘာဝတရား၏လေကြောင်းဒြပ်စင်များနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအသက်ရှူမှုစနစ်တစ်ခုလုံးကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှငျ့ဆကျသှယျပေးသောမှတဆင့်ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကြားအာရုံက၎င်း၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ၏ညာဘက်စပ်လျဉ်းမှတဆင့်နားကြားအဖြစ်အဆိုပါအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ်၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြတ်သန်းနှင့်ပြောပြတယ်နှင့် vitalizes သောသဘာဝယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းကင်ဘုံသည်: ပျော်ရွှင်မှုပြည်နယ်နှင့်ကာလ, သည်အာရုံ၏မွကွေီးအချိန်အားဖြင့်ကန့်သတ်ထားဘဲ, မရှိအစအဦးရှိသည်ဖို့ပုံရသည်ရာ။ ဒါဟာမွကွေီးပျေါမှာအသက်ရှည်သမျှတဦးတည်းရဲ့အတှေးအချေါနှငျ့စံနမူနာတစ်ခုပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါသည်, ဘယ်မှာဆင်းရဲခက်ခဲမှုကိုအဘယ်သူမျှမအတွေးသို့မဟုတ်
ဤအအမှတ်တရများဟာငရဲကလေးကာလအတွင်းထွက်သက်-ပုံစံကနေဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်အဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မပျော်ရွှင်, ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါပြုသောအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်း၏သက်တော်-ပုံစံပေါ်တွင်ကြာလာသောအခါကောင်းကင်ဘုံသည်အမှန်တကယ်ကစတင်ခဲ့သည်။ ဒါကအစအဦးများကဲ့သို့မထင်ထားဘူး; ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲရှိခဲ့သော်လည်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပြုသောမှတဆင့်သွားပြီ, ကောင်းမကောင်းကိုတှေးအချေါနှငျ့မွကွေီးပျေါမှာနေစဉ်ကရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ပွုတျောမူသောကောင်းသောအကျင့်ကိုကုန်သောအခါကောင်းကင်ဘုံသည်အဆုံးသတ်ထားသည်။ ထိုအခါမျက်မှောက်နှင့်ကြားနာခြင်းနှင့်အရသာနှင့်အနံ့များ၏အာရုံထွက်သက်-ပုံစံကနေဖြေလျော့, သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟူသောအသုံးအနှုနျးခဲ့ကြရာ၏ဒြပ်စင်သို့သွားကြ၏ ယင်း၏အလှည့်မွကွေီးပျေါမှာသူ့ရဲ့လာမယ့် Re-တည်ရှိမှုအဘို့အလာသည်အထိထိုသို့ရှိရာပြုသော၏အဘို့ကိုယျနှိုကျသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိ, istence ။
ငရဲ: ညှဉ်းဆဲခြင်း၏ဆငျးရဲဒုက်ခတစ်ဦးချင်းအခွအေနေသို့မဟုတ်ပြည်နယ်, မအသိုင်းအဝိုင်းကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဆင်းရဲဒုက္ခသို့မဟုတ်ညှဉ်းဆဲခြင်းမှကွဲကွာနဲ့ metempsychosis မှတဆင့်၎င်း၏ကျမ်းပိုဒ်ထဲတွင်ပြုသောအားဖြင့်ပယ် sloughed ခဲ့ကြသည့်ခံစားချက်များကိုနှင့်အလိုဆန္ဒများ၏အစိတ်အပိုင်းများအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ခံစားခကျြမြားနှငျ့အလိုဆန္ဒများကြောင့်ဒါမှမဟုတ်သူတို့စိတ်သက်သာရာရနိုင်သည့်တဆင့်ဒါမှမဟုတ်သူတို့အဘို့အတော်ကိုစိတ်မနာစေဘယ်အရာကိုရတဲ့၏အလြှငျးမရှိတပ်မက်ခြင်းနှင့်အလိုဆန္ဒကြောင့်ဆငျးရဲဒုက်ခသည်။ ဒါကသူတို့ရဲ့ညှဉ်းဆဲ-ငရဲပါပဲ။ မြေကြီးပေါ်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစဉ်အခါ, ကောင်းသောမကောင်းသောခံစားချက်များကိုနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုမွကွေီးပျေါမှာဘဝတစ်လျှောက်လုံး intermingled ခဲ့ပြီးသောဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝမ်းနည်းခြင်းသူတို့ရဲ့ကာလရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် metempsychosis စဉ်အတွင်းယင်းငရဲကလေးဖြစ်စဉ်ကိုကောင်းမွန်သောမှဒုစရိုက်ကိုခွဲခြား; ကောင်းမွန်သော ", ကောင်းကင်" တွင်မိမိတို့၏ unalloyed ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရန်ပေါ်သွားနှင့်မကောင်းသောအထို့နောက်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ခံစားခကျြမြားနှငျ့အလိုဆန္ဒများဖြစ်နှင့်အထင်ကြီးနေကြတယ်နိုင်မည့်ဆင်းရဲဒုက္ခညှဉ်းဆဲ, အဘယျမှာကျန်ရှိနေသူတို့နောက်တဖန်အတူယူဆောင်ကြသောအခါနိုင်အောင်, သူတို့က, နိုင် သူတို့ရှေးခယျြလျှင်, ကောင်းသောမှဒုစရိုက်များနှင့်အမြတ်အစွန်းကိုရှောငျ။ ကောင်းကင်နှင့်ငရဲသင်ယူမှုများအတွက်ကြုံနေရပေမယ့်မပေးဘို့ဖြစ်ကြ၏။ မြေကြီးတပြင်တှေးအချေါနှငျ့သင်ယူမှုအဘို့ရာအရပ်ကိုကြောင့်မြေကြီး, အတွေ့အကြုံကနေသင်ယူများအတွက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပြည်နယ်များအတွက်သေသောနောက်အကြံအစည်နှင့်အကျင့်ကိုအိပ်မက်၌ရှိသကဲ့သို့နောက်တဖန်ကျော်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမဆင်ခြင်ခြင်းသို့မဟုတ်အသစ်စဉ်းစားတွေးခေါ်လည်းမရှိ။
မျိုးရိုးအလိုက်: ယေဘုယျအားဖြင့်လူသားများ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးများ၊ အချက်များနှင့်လက္ခဏာများသည်လူသားအားဖြင့်ကူးစက်ခံရပြီးအမွေဆက်ခံခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သွေးနဲ့မိသားစုဆက်စပ်မှုကြောင့်ဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိမှန်ကန်ရမယ်။ ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးအမှန်တရားနေရာတစ်ခုကိုမပေး။ ဆိုလိုသည်မှာမသေနိုင်သောအကျင့်၏ဆန္ဒနှင့်ဆန္ဒသည်မွေးဖွားပြီးသည်နှင့်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာတွင်နေထိုင်ပြီး၎င်းနှင့်အတူသူ၏စိတ်ဓာတ်နှင့်စရိုက်လက္ခဏာဆောင်သည်။ မျိုးပွားခြင်း၊ မွေးမြူခြင်း၊ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်အသင်းအဖွဲ့များသည်အရေးကြီးသော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏အရည်အသွေးနှင့်ခွန်အားအရပြုသူသည်၎င်းနှင့်မတူသည်။ er of do breath the the the the the the the the the the the the ပုံစံ compositor ယူနစ်များကိုပေးစွမ်းနှင့်အသက်သည်မိခင်မှပေးသောပစ္စည်းကိုကိုယ်ပိုင်ပုံစံသို့တည်ဆောက်ပြီးမွေးဖွားပြီးနောက်တွင်အသက်ရှူပုံစံသည်၎င်း၏ပုံစံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
တိုးတက်မှုနှင့်အသက်အရွယ်အပေါငျးတို့သအဆင့်ဆင့်ကတဆင့်။ တစ်ဦးချင်းစီကလူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပြုသောအချိန်ကျော်လွန်သည်။ ယင်း၏သက်တော်-form ကိုအားလုံးသိကြသမိုင်း antecedes ရာယင်း၏သမိုင်း, သမုတ်သော။
မျှော်လင့်ချက်: ကမ္ဘာကြီးကိုတောမှတဆင့်အားလုံး၎င်း၏လှည့်လည်အတွက်ပြုသောအတွက်မွေးရာပါအလားအလာအလင်းဖြစ်၏ ထိုသို့ပြုသော၏သဘောထားအရသိရသည်ကောင်းသောသို့မဟုတ်နာမကျန်းဖြစ်အတွက်ဦးဆောင်သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်; ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းအာရုံ၏အရာဝတ္ထုကိုရည်မှတ်မသေချာမရေရာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့လာသောအခါအကြောင်းပြချက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသေချာပါပဲ။
လူ့ခံ, A: မျက်မှောက်, ကြားနာ, အရသာနှင့်အနံ့လေးအာရုံကကိုယ်စားပြုလေးစနစ်များသို့ဆဲလ်များနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအဖြစ်ရေးစပ်နှင့်ဖွဲ့စည်းသဘောသဘာဝလေးသောဒြပ်စင်၏ယူနစ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်တယ်, အလိုအလျှောက်အသက်တော်-ပုံစံအားဖြင့်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် operated, အထွေထွေမန်နေဂျာ ထိုလူခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုယ်ခန္ဓာ၏, နှင့်အရာထဲသို့ပြုသောတစ်ဦးသောအဘို့ကိုအထဲသို့ဝင်သောနှင့်ပြန်လည်တည်ရှိလျက်, တိရိစ္ဆာန်လူ့စေသည်။
လူသား၏လေး Classes ရဲ့: လူတွေစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်လေးမျိုးအတန်းသို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ပိုင်းခြားလေ၏။ တစ်ခုချင်းစီကိုတဦးတည်း, မိမိအတှေးအချေါမိမိအထဲ၌ထားထားတဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်လူတန်းစား; သူနေသမျှကာလပတ်လုံးသူမအဖြစ်ကိုသူစဉ်းစားတွေးခေါ်အဖြစ်ကနေတော်မူမည် သူကထဲကမိမိကိုမိမိယူသူထို့နောက်ပိုင်မည့်အတန်းသို့သူ့ကိုငါထားမည်သောစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်သည့်အခါလေးပါးအတန်းကိုအခြားသို့ကိုယ်တော်တိုင်ထားမည်။ အဆိုပါလေးအတန်းများမှာ: အလုပ်သားများ, ကုန်သည်, အတွေးခေါ်ရှင်, အ
knowers ။ အဆိုပါအလုပ်သမားသည်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အာရုံသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏တပ်မက်ခြင်း, မိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စားချင်နှင့်သက်သာခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးသို့မဟုတ်အပျော်အပါးကျေနပ်ဖို့ထင်၏။ အဆိုပါကုန်သည်, အမြတ်သည်မိမိအလိုဆန္ဒကျေနပ်ဖို့ဝယ်ဖို့သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်သို့မဟုတ်အကျိုးအမြတ်အတွက်ကုန်ဖလှယ်ရေး, ဥစ္စာရဖို့, စည်းစိမ်ဥစ္စာရှိသည်ထင်၏။ အဆိုပါတွေးခေါ်စဉ်းစားရန်သူ၏အလိုဆန္ဒကျေနပ်ဖို့ idealize ရန်, ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းငှါ, အသက်မွေးဝမ်းသို့မဟုတ်အနုပညာသို့မဟုတ်သိပ္ပံ၌၎င်း, သင်ယူမှုနှင့်အောင်မြင်မှုများအတွက် excel မှထင်၏။ အခါနှင့်ဘယ်လိုအဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အဘယ်မှာသိရန်, သူသည်သူ့ကိုယ်သူသိတယ်သောအရာကိုအခြားသူများအားဖြစ်စေဝေငှဖို့: အဆိုပါ knower အမှုအရာများ၏အကြောင်းတရားများကိုသိရန်ဆန္ဒကျေနပ်ဖို့ထင်၏။
Hypnosis, ကိုယ်ပိုင်: အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိညှို့အားဖြင့်နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်း၏ပြည်နယ်သို့မိမိကိုယ်ကိုချပြီးနှင့်မိမိကိုယ်ကိုအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နေပါတယ်။ Self-ညှို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ Self-controlled ဖြစ်ရပါမည်။ Self-hypnosis အတွက်ပြုသောအဆိုပါ hypnotist အဖြစ်နှင့်လည်းဘာသာရပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ သူမတတျနိုငျကွောငျးကိုလုပ်ဖို့ချင်ပါတယ်အဘယျသို့သတ်မှတ်ထားသည်။ ထို့နောက် hypnotist အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သူရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူကညှို့အိပ်စက်ခြင်းအတွက်အခါကိုယ်တော်တိုင်ဤပညတ်တို့ကိုထုတ်ပေးမှသူ့ကိုယ်သူညွှန်ကြားထားသည်။ ထို့နောက်အကြံပြုချက်အသုံးပြုပုံသူအိပ်သွားကြောင်းကိုယ်တော်တိုင်ဟောပြောသောအိပ်စက်ခြင်းမှမိမိကိုမိမိကိုထည့်လေ့မရှိ, သူသည်အိပ်ပျော်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့သော။ ယင်းညှို့အိပ်စက်ခြင်းအတွက်သူအချိန်နှင့်နေရာရှိအရာလုပ်ဖို့ကိုယ်တော်တိုင်ပညတ်တော်မူ၏။ သူကဒါကြောင့်မိမိကိုမိမိမှာထားတော်မူသောအခါ, သူသည်နှိုးပြည်နယ်မှပြန်လည်ရောက်ရှိ။ bidden လုပ်ဖို့အဖြစ်နိုးသူမရှိပါဘူး။ ဒီအလေ့အကျင့်မရှိလေးစားမှုအတွက်တဦးတည်းမဖြစ်မနေသူမရောထွေးမည်ဖြစ်ပြီး Self-ထိန်းချုပ်ပျက်ကွက်ပါလိမ့်မယ်တခြား, မိမိကိုယျကိုလှည့်ဖြား။
ညှို့သို့မဟုတ် Hypnosis: hypnotized ခံရဖို့သူ့ကိုယ်သူကြုံတွေ့နေကြရသည်သူတစ်ဦးဘာသာရပ်အပေါ်ထုတ်လုပ်အိပ်စက်ခြင်းတစ်ခုအတုပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘာသာရပ်သည်သို့မဟုတ်သူ့ကိုယ်သူအပြုသဘောဆောင်သူဖြစ်ရမည်သူ hypnotist မှအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်စေသည်။ အဆိုပါဘာသာရပ်သည်သူ၏စှနျ့
ခံစားချက်-and ဆန္ဒ hypnotist ၏ခံစားချက်-and ဆန္ဒနှင့်မိမိလေးအာရုံသူ့ရဲ့အသက်ရှူ-ပုံစံနှင့်အသုံးပြုခြင်း၏လက်နက်ချထိန်းချုပ်မှုလုပ်နေသဖြင့်။ အဆိုပါ hypnotist ကသူ့ဘာသာရပ်၏မျက်လုံးများသို့မဟုတ်အသံနှင့်လက်အားတဆင့်နှင့်အကြိမ်ကြိမ်သူအိပ်သွားနှင့်သူအိပ်ပျော်ကြောင်းကိုကြောင်းသူ့ကိုပြောပြခြင်းဖြင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်လျှပ်စစ်-သံလိုက်အင်အားမဆိုသို့မဟုတ်အားလုံးကို အသုံးပြု. အကြောင်းအရာ hypnotizes ။ ဘာသာရပ်အိပ်ထားအိပ်စက်ခြင်း၏အကြံပြုချက်မှတင်သွင်းခြင်း။ မိမိအ, မိမိကိုယျကိုတင်သွင်းဘဲလျက်
အသက်ရှု-ပုံစံနှင့် hypnotist ၏ထိန်းချုပ်မှုအားမိမိလေးအာရုံ, ဘာသာရပ်အမိန့်နာခံသူတကယ်လုပ်နေတာ- မှလွဲ. ဘာသူနေတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေဖို့လုပ်မရနိုင်သည်ကို သိ. မရှိဘဲ hypnotist ဖွငျ့မှာထားတျောမူဘာမှလုပ်ဖို့အခြေအနေဖြစ်ပါသည် အကျင့်ပျက်လုပ်ရပ်သူသည်မိမိအနိုးပြည်နယ်ထဲမှာအဲဒီလိုသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်မယ်လို့မဟုတ်လျှင်။ သူမည်သူမဆို hypnotizes သည့်အခါတစ်ဦးက hypnotist သင်ျခြိုငျးတာဝနျယူ။ အဆိုပါဘာသာရပ်သည်ကိုယ်တော်တိုင်အခြားထိန်းချုပ်ထားခံရဖို့ခွင့်ပြုဘို့ကြာရှည်စွာမှတစ်ဆင့်ခံရရမည်ဖြစ်သည်။ သူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်တဲ့အထိတစ်ဦးချင်းစီ Self-ထိန်းချုပ်မှုလေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။ ထိုအခါသူသည်အခြားထိန်းချုပ်ဖို့သို့မဟုတ်အခြားသူ့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
Hypnotist, တစ်ဦးက: အလိုတော်, စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့် Self-ယုံကြည်မှုနှင့်အတူအဘယ်သူသည်သူ၏ဘာသာရပ်များ hypnotizing သူဥာဏ်နှင့်တကွသောဤတင်ပြသောသောဒီဂရီမှညှို့၏ဖြစ်ရပ်ထုတ်လုပ်အောင်မြင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အထောက်အထား, အဆိုပါအယူမှားအဖြစ် "ငါ": တဦးတည်းရဲ့ knower ၏ငါ-သမီး၏ဇစ်မြစ်အစစ်အမှန်၏ရှေ့မှောက်တွင်၏ခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ-သမီး changeless နှင့်ထာဝရအတွက်အစအဦးသို့မဟုတ်အဆုံးမရှိဘဲ knower ၏ Self-သတိ selfsame ဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်ပါသည်။
ကိုယျခန်ဓာ-စိတ်ထဲနှင့်အတူစဉ်းစားနှင့်၎င်း၏ဇစ်မြစ်အစစ်အမှန်၏ရှေ့မှောက်တွင် feeling ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အာရုံနှင့်တသားတများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်သောယုံကြည်ချက်ထဲသို့ပြုသောလှညျ့။
စံပြ: တဦးတည်း, စဉ်းစားရန်ဖြစ်ပြုမှ, ဒါမှမဟုတ်ရှိသည်ဖို့အတှကျအကောငျးဆုံးကဘာလဲဆိုတာ၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အထောက်အထား, One ရဲ့: ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ခံစားချက်တဦးတည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်, တဦးတည်းရဲ့တဦးတည်းအတိတ်ထဲမှာဘာအဖြစ်ယခုအတူတူဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်နှင့်အနာဂတ်၌ဖြစ်တူညီသောခံစားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုမှာရဲ့ခံစားချက်ဘာလို့လဲဆိုတော့တဦးတည်းရဲ့ Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏ knower ၏ဝိသေသလက္ခဏာအနေဖြင့်ယင်း၏ခှဲမခှာ၏, ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်ပြုသောအတွက်လိုအပ်သောနှင့်အချို့ဖြစ်ပါတယ်။
ငါ-သမီး: ထာဝရအတွက် Triune ကိုယ်ပိုင်၏, ဆွဲသွင်းပါဝင် undying နှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်မပြောင်းလဲသောဝိသေသလက္ခဏာရှိ၏ ခံပြီး, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူ၏ရှေ့မှောက်တွင်ထင်နှင့်အခံစားရနှင့်ကိုယ်နှိုက်စကားပြော "ငါ" အဖြစ်နှင့်၎င်း၏ Corporation ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသောဘဝတစ်လျှောက်လုံးမပြောင်းလဲတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာမသိဖြစ်ဖို့လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ခံစားနိုင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။
အဝိဇ္ဇာ: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိုက်ရာပြုသော-in-the-ခန္ဓာကိုယ်အလိုလိုနှင့်၎င်း၏အခွင့်အရေးနှင့်အကြောင်းပြချက်၏ပညာအတတ်မရှိဘဲ, ဖြစ်သည့်အတွက်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ခံစားမှုနှင့်အလိုဆန္ဒ၏စိတ်ခံစားမှုများနှင့်စပ်ဆိုင်သောစိတ်က၎င်း၏တွေးခေါ်နဲ့ knower ကျော်လွှားပါပြီ။
ထင်ယောင်ထင်မှား: လူတဖြစ်ဖို့နေရာသို့မဟုတ်မြင်ကွင်းတစ်ခုကသရုပ်ဖော်ထားတဲ့, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးဝေးလံသော post ကိုဖြစ်မယ့်တံလျှပ်အဖြစ်အဖြစ်မှန်ဘို့ဖန်စီသို့မဟုတ်အသွင်အပြင်၏အမှား, ယင်းအာရုံလှည့်ဖြားခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုတစ်ဦးအမှားဖြစ်ပေါ်စေသည်ထားတဲ့ဘာမှမ။
စိတ်ကူးစိတ်သန်း: ခံစားချက်-and ဆန္ဒ၏စဉ်းစားတွေးခေါ်အရေးပါဖို့ပုံစံကိုပေးသောအတွက်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကူးစိတ်သန်း, Nature-: အမှတ်တရများနှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်အသိဆွဲဆောင်မှု၏အလိုအလျောက်နဲ့ထိန်းအကွပ်မဲ့ကစားလျက်ရှိ၏ အဆိုပါပေါင်းစပ်ပြီးသို့မဟုတ်ပေါင်းစည်းအလားတူဆွဲဆောင်မှု၏အမှတ်တရများနှင့်အတူအာရုံအားဖြင့်အသက်ရှု-ပုံစံပေါ်တွင်လုပ်ပုံနှင့်အရာပေါင်းစပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေယာဉ်များ၏ဖြစ်ရပ်မှန်များကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ဤရွေ့ကားမာန်တွေ့ကြုံအတင်းအကျပ်နှင့်ဆင်ခြင်ခြင်းတောလိမ့်မည်။
Incubus: obsessive ဖို့ဒါမှမဟုတ်အိပ်နေစဉ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစပ်လျဉ်းရှိသည်ဖို့ရှာကြံထားတဲ့မမြင်ရတဲ့အထီးပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ Incubi နှစ်မျိုး၏ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တစ်ဦးချင်းစီမျိုးမျိုးပေါင်းရှိပါတယ်။ အသုံးအများဆုံးလိင် incubus ဖြစ်ပါသည်, အခြားစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအိပ်မက်ရင်ဒါမှမဟုတ်တချို့ဇီဝကမ္မနှောင့်အယှက်မှအကြီးအကျယ်ကြောင့်ဖြစ်ရသောအိပ်မက်ဆိုးခေါ်ဘာ၌ရှိသကဲ့သို့, ထိုမိန်းမသည် obsessive ဖို့ကြိုးစားပါတယ်သော incubus ဖြစ်ပါတယ်။ incubus ၏ကြင်နာသူမ၏နိုးဘဝစဉ်အတွင်းအိပ်ပျော်၏လုပ်ဆောင်ချက်အတွေးနှင့်သူမုဒ်၏အလေ့အထအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦး incubus ၏ပုံစံကြောင့်မြင်ခဲ့သည်ဆိုပါကတစ်ဦးမာရ်နတ်သို့မဟုတ်တစ်ပင့်ကူသို့မဟုတ်တစ်ဝက်ဖို့, ကောင်းကင်တမန်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘုရား၏ကြောင်းကနေကွဲပြားလိမ့်မယ်။
အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်အတွက်ဗီဇ: ကြောင်းတိရိစ္ဆာန်၌လူ့ထံမှကားမောင်းတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ ဆန္ဒနှင့်အတူတက်ခညျြနှောငျလူ့ထံမှအလင်း, ၎င်း၏လုပ်ရပ်များအတွက်တိရိစ္ဆာန်လမ်းညွှန်သို့မဟုတ်ဦးဆောင်သောအရာသဘာဝတရား၏လေးအာရုံသည်နှင့်အညီဖြစ်ပါတယ်။
ထောက်လှမ်းရေး: သမျှသော Intelligence related ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အရာသတိဖြစ်ခြင်းမသိသူကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအားလုံးကိုသတ္တဝါများ၏စပ်လျဉ်းခွဲခြားနှင့်ပြောပြတယ်နှင့်တည်စေ; နှင့်, သူတို့က, သတိဖြစ်ခြင်း၌ရှိသကဲ့သို့နှင့်၎င်းတို့၏ကွဲပြားခြားနားသောဒီဂရီပေးသောအားဖြင့်, တစ်ဦးချင်းစီကတခြား၎င်းတို့၏စပ်လျဉ်းယူနစ်အားလုံးယူနစ်သို့မဟုတ်ထုခွဲခြားနှင့်ဆက်စပ်, အထင်ကြီး။
ထောက်လှမ်းရေး, တစ်ခုက: ကလူကို endows ဒါစဉ်းစားရန်သူ့ကိုဖွပေးသောနှင့်အတူ၎င်း၏ Self-သတိအလင်း, ကနေတဆင့်အဓိပတိထောက်လှမ်းရေးနှင့်အတူယောက်ျား၏ Triune ကိုယ်ပိုင်စပ်လျဉ်းသည့်ဠာအတွင်းရှိယူနစ်၏အမြင့်ဆုံးအမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။
ထောက်လှမ်းရေးတစ်ဦး၏ဒြေ: ခုနစျပါးရှိပါတယ်: မီးနယ်ပယ်အုပ်ချုပ်သောအလင်းနှင့်ငါ-နံနက်စှမျး; လေထု၏နယ်ပယ်အုပ်ချုပ်အချိန်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ကစှမျး; ရေနယ်ပယ်ထဲမှာပုံရိပ်နှင့်မှောင်မိုက်စှမျး; နှင့်မြေကြီးများ၏နယ်ပယ်များတွင်အာရုံစိုက်ဒြေ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဒြေ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အထူးသဖြင့် function ကိုနှင့်အာဏာနှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီးအခြားသူများနှင့်အတူခှဲမခှာအပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအလင်းဒြေယင်း၏ Triune ကိုယ်ပိုင်အားဖွငျ့ကမ္ဘာမှအလင်းပို့ပေး; အချိန်ကို
ဒြေပုစည်းမျဉ်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြား၎င်းတို့၏စပ်လျဉ်းသဘောသဘာဝယူနစ်အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်သောအရာဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပုံရိပ်ဒြေကိစ္စအပေါ်ပုံစံ၏စိတ်ကူးစိတျစှဲ။ အဆိုပါအာရုံစိုက်ဒြေကြောင့်ဖြစ်သောဖို့ဘာသာရပ်ပေါ်ရှိအခြားစှမျးစင်တာ
ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ မှောင်မိုက်ဒြေဆန်သောသို့မဟုတ်အခြားစှမျးရန်ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏။ အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်ကဒြေအတွေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဦးတည်ချက်ပေးသည်။ အဆိုပါငါ-နံနက်ဒြေပုထောက်လှမ်းရေး၏အစစ်အမှန်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအာရုံစိုက်ဒြေခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပြုသောမှတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အဆက်အသွယ်သို့ကြွလာတော်မူသောတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ထောက်လှမ်းရေးက The အဓိပတိ: တစ်ခုအသိဉာဏ်ယူနစ်တစ်ယူနစ်အဖြစ်သတိဖြစ်ခြင်းအတွက်တိုးနိုငျသောကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အဆုံးစွန်ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဓိပတိထောက်လှမ်းရေးဘွေ၌ရှိသမျှသည်အခြားသောထောက်လှမ်းရေးကိုယ်စားပြုပြီးမသိ။ ထောက်လှမ်းရေးအားလုံးဥပဒကိုသိသောကြောင့်၎င်းသည်အခြားထောက်လှမ်းရေး၏အုပ်စိုးသောမင်းကိုမျှမက, သူတို့ဥပဒဖြစ်ကြပြီးတစ်ဦးချင်းစီထောက်လှမ်းရေးသူ့ဟာသူအုပ်စိုးခြင်းနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်နဲ့တစ်လောကလုံးဥပဒေနှင့်အညီပြုမူ။ ဒါပေမယ့်အဓိပတိထောက်လှမ်းရေးယင်း၏တာဝန်ခံနှင့်ကြီးကြပ်မှုထဲမှာရှိပါတယ်
လူအပေါင်းတို့သည် spheres ကိုများနှင့်ကမ္ဘာနှင့်စကြဝဠာသဘောသဘာဝတစ်လျှောက်လုံးနတ်ဘုရားများနှင့်သတ္တဝါသိတယ်။
ပင်ကိုယ်: ဒေသနာ, အတွင်းကနေကျူရှင်ဖြစ်၏ ထိုသို့ပြုသောဖို့အကြောင်းပြချက်ကတဆင့်လာရသောတိုက်ရိုက်အသိပညာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအာရုံ၏ကုန်သွယ်မှုသို့မဟုတ်ရေးရာနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်သည်မဟုတ်, ကိုယ်ကျင့်တရားမေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်ဒဿနဘာသာရပ်နှင့်ရှားပါးသည်။ အဆိုပါပြုသောယင်း၏ knower နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးဖွင့်လှစ်နိုင်ပါကပြီးတော့မည်သည့်ဘာသာရပ်ပေါ်ဗဟုသုတအသိပညာများရှိသည်နိုင်ဘူး။
Istence: သူ့ဟာသူမှာသူ့ဟာသူ၏အဖြစ်မှန်မသိခံစားချက်-and ဆန္ဒပြုသော၏, သူ့ဟာသူအဖြစ်ဖြစ်၏ မရတည်ရှိသကဲ့သို့မဖြစ်တည်မှုအတွက်, ဒါပေမယ့်သဘာဝတရား၏လှည့်အနေဖြင့်ကိုယ်နှိုက်က၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ disattachment ကနေရရှိလာတဲ့က၎င်း၏တစ်ဦးတည်း၌တည်၏။
တရားမျှတရေး:ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်ရှိဘာသာရပ်နှင့် ပတ်သက်. အသိပညာများအရေးယူသည်, တရားစီရင်ခြင်းအသံထွက်နှင့်ဥပဒေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့်။
Knower က The: အချိန်နှင့်အမှန်တကယ်နှင့်စစ်မှန်သောအသိပညာရှိပြီးဖြစ်သော Triune ကိုယ်ပိုင်, နှင့်ထာဝရ၏သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အသိပညာနှစ်မျိုး၏ဖြစ်ပါသည်: အစစ်အမှန်သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ဗဟုသုတနှင့် sense- သို့မဟုတ်လူ့အသိပညာ။ အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်၏ self-အသိပညာကြိုးစားအားထုတ်မှုများနှင့် immeasurable ဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းတို့နှင့် Triune တည်၏ knowers မှဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ကမ္ဘာထဲမှာနေရာအရပ်ယူထားပြီးသမျှသောသူတို့ပါဝင်သည်သော်လည်းဒါဟာအာရုံပေါ်မှာမှီခိုမျှမက, ဒီသဘာဝတရား၏ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးယူနစ်ကနေထာဝရအတွက်အချိန်တခုလုံးတစ်လျှောက်လုံးကမ္ဘာ့များ၏ All- သိ. Triune ကိုယ်ပိုင်ဖို့အရာရာစိုးရိမ်။ ဒါဟာ minutest အသေးစိတ်နှင့်တစ်ဿုံဆက်စပ်ခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောမြေတပြင်လုံးအဖြစ်တစ်ချိန်ကမရရှိနိုင်မှာအစစ်အမှန်နှင့်မပြောင်းလဲသောအသိပညာဖြစ်ပါတယ်။
Sense သည်-အသိပညာ, သိပ္ပံ, ဒါမှမဟုတ်လူ့အသိပညာ, သဘာဝဥပဒေများအဖြစ်လေ့လာတွေ့ရှိသဘာဝတရား၏အချက်အလက်များများစုဆောင်းနှင့် systematized ပေါင်းလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးနေသေးသောအာရုံနှင့်မစုံလငျအလောင်းတွေကတဆင့်ကိုကျင့်သောသူသာလျှင်ခြင်းဖြင့်ကြုံတွေ့။ ထိုအခါအသိပညာနှင့်ဥပဒေများ၏ထုတ်ပြန်ချက်များအချိန်ဖို့အချိန်ကနေပြောင်းလဲသွားခံရဖို့ရှိသည်။
ကျင့်သောသူသာလျှင်၏အသိပညာ: စဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ပြုသောရဲ့သင်ယူမှု၏အနှစ်သာရဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအလင်းသည်၎င်း၏ attachment များကိုမှလွတ်မြောက်နှင့် noetic လေထုပြန်၎င်း၏အတှေး၏ခွင်, unattached နှင့် unattachable, ထို့ကြောင့်အသိပညာဖြစ်၏ ဒါဟာလူ့ "အသိပညာ။ " မဟုတ်ပါဘူး
အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏တွေးခေါ်ရှင်များ၏အသိပညာ: ယင်း၏ပြုသောရန်, နှင့်လူ့အလောင်းတွေအခြားပြုသောရန်ပြုသောရဲ့စပ်လျဉ်းသူတို့၏တွေးခေါ်ရှင်မှတဆင့်ဥပဒေနှင့်တရားမျှတမှု၏အုပ်ချုပ်ရေးကိုရည်မှတ်အားလုံးအသိပညာပါဝင်သည်။
အားလုံးတွေးခေါ်ပညတ္တိကျမ်းကိုငါသိ၏။ သူတို့ဟာအချင်းချင်းသဘောတူညီချက်ထဲမှာနှင့်လူ့အလောင်းတွေမှာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပြုသောမှကြမ္မာ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအတွက်သူတို့ရဲ့ knowers နှင့်အတူအစဉ်အမြဲရှိပါသည်။ ဥပဒေနှင့်တရားမျှတမှုဟာသူတို့ရဲ့အသိပညာသံသယမရှိချေနှင့်မျက်နှာကိုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကာကွယ်ပေးသည်။ အဲဒါကိုစေသည်အဖြစ်တိုင်းလူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပြုသောယင်း၏ကံကြမ္မာကိုရရှိသွားတဲ့။ ဆိုလိုသည်မှာ, ဥပဒေနှင့်တရားမျှတမှုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်, ကိုယ်ပိုင်အသိပညာ၏ Knower ၏အသိပညာ: ပါဝင်သည်နှင့်လေးကမ္ဘာထဲမှာအရာအားလုံးပါဝငျ။ self ကြောင့်အသိပညာဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အသိပညာ၏ဝိသေသလက္ခဏာသတ်မှတ်နှင့်တစ်ခုဖြစ်သည်ငါ-Ness အဖြစ်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်
တစ်ဦးသဘောသဘာဝယူနစ်အဖြစ်သဘာဝမှအလုပ်သင်။ အဲဒီမှာသူကသတိခဲ့သည် as အချိန်၏သဘောသဘာဝစက်အမျိုးမျိုးရှိသမျှအစိတ်အပိုင်းအတွက်အောင်မြင်မှုဟာသူ့ရဲ့ function ကို။ ကထာဝရအတွက်၎င်း၏ထောက်လှမ်းရေးများ၏ကိုယ်ပိုင် သိ. အလင်းသည်တစ်ဦး Triune ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်လိုက်တဲ့အခါ
ဒါကြောင့်အချိန်အတွက်အောင်မြင်သောသတိခဲ့သည့်အဖြစ် function ကိုထာဝရအတွက်, အချိန်အားဖြင့်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်မရရှိနိုင်, န့်အသတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ knower ၏ငါ-သမီးတစ်ဦးချင်းစီ function ကိုသတ်မှတ်နှင့်ထာဝရအတွက်ဖွဲ့စည်းမှုအားလုံးအတူတကွယူနစ်သတိကြီးနှင့် knower ၏ self တစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြားစီထိုကဲ့သို့သော function ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာကိုသိနှင့်သည်အချိန်ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, နှင့်အရာအဖြစ်ဝိသေသလက္ခဏာပါပဲ။ ဤသည်ကိုသိသောဥာဏ်ငါ-သမီးနှင့်ကိုယ်ပိုင်များ၏စိတ်ထဲတွင်အားဖြင့်တွေးခေါ်နိုင်ဖို့ပါးသည်နှင့်အခွင့်အရေးများ၌၎င်း, ပင်ကိုယ်အဖြစ်အကြောင်းပြချက်အတွက်သြတ္တပ္ပစိတ်အတိုင်းပြုသောမှမရရှိနိုင်ပေမည်။
အသိပညာ, Noetic (အသိပညာ၏ကမ္ဘာ့ဖလား): Triune တည်ရှိသမျှသော knowers ၏ noetic လေထုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ တိုင်း Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏ရှိတယ်အားလုံးသိကျွမ်းခြင်းပညာရရှိနိုင်ပါနှင့်သည်အခြား knower များ၏ဝန်ဆောင်မှုမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပဒေ: ယင်း၏ထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူတို့၏အကြံအစည်နှင့်လုပ်ရပ်များအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်စွမ်းဆောင်မှုများအတွက်ညွှန်း, ဖြစ်ပြီး, အရာမှစာရင်းပေးသွင်းထားသူမြားကိုခညျြနှောငျနေကြသည်။
သဘာဝတရား, တစ်ဦးကဥပဒေ: သာက၎င်း၏ function ကိုအဖြစ်သတိသောယူနစ်များ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုသို့မဟုတ် function ကိုဖြစ်ပါတယ်။
အတွေးအခေါ်၏ပညတ္တိကျမ်း, အဆိုပါ: ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေယာဉ်ပေါ်မှာရှိသမျှသောအရာသည်, မိမိတာဝန်ဖို့နှင့်အချိန်တို့၏တွဲဖက်မှာအဆိုအရအခွအေနေကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့သူတဦးတည်းအားဖြင့်ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းထားရပါမည်သည့်အတွေးများ၏ပြင်ပဖြစ်ပါတယ်
အတွေးအခေါ်, Destiny ၏ပညတ္တိကျမ်း။ ၏အေးဂျင့်များ: တစ်ခုချင်းစီကိုလူ့အသက်ကို၌သူ၏ရည်ရွယ်ချက်အားဖြင့်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူထင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူမများကကောငျးကြိုးအတှကျသို့မဟုတ်ဒုစရိုက်အပြစ်သည်များအတွက်အေးဂျင့်သည်။ သူထင်နှင့်မဘယ်သို့သောအားဖြင့်, တဦးတည်းကိုအခြားသူများကအသုံးပြုခံရဖို့သူ့ကိုယ်သူသို့မဟုတ်သူ့ကိုယ်သူကိုက်ညီ။ ပြည်သူ့သူတို့အတှေးအများနှင့်လုပ်ရပ်များအားဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတပ်ဆင်ကြပါပြီအဖြစ် မှလွဲ. သူတို့၏အတွင်းစိတ်သဘောထားဆန့်ကျင်ပြုမူဖို့အသုံးပြုသို့မဟုတ်အတင်းအကျပ်မရနိုင်ပါ။ ထိုအခါသူတို့ကသူတို့အဘယ်သူမျှမရှိတယ်အထူးသဖြင့်လာသောအခါအခြားသောလူသားမြားသဖွငျ့ပြုမူသို့မဟုတ်အထွက်နှုန်းမှသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနေကြတယ်
အသက်တာ၌အဓိပ္ပါယ်ရည်ရွယ်ချက်။ ဘာပဲရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ကောငျးကြိုးအတှကျသို့မဟုတ်ပညတ်တရား၏သတိအေးဂျင့်များကကမ္ဘာ၏အစိုးရနှင့်အတူဘေးဥပဒ်အဘို့အတွက် fit ပါလိမ့်မယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ရှိသူများသည်လည်းတူရိယာဖြစ်ကြသည်။
သင်ယူ: အလင်းလွတ်မြောက်နိုင်ပြီးအတွေ့အကြုံထပ်ခါတလဲလဲမရစရာမလိုဟုနိုင်အောင်, စဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်အတွေ့အကြုံကနေထုတ်ယူအတွေ့အကြုံ၏အနှစ်သာရဖြစ်ပါသည်။ အတွေ့အကြုံ, စမ်းသပ်မှု, လေ့လာရေးနှင့်သဘောသဘာဝကိုရည်မှတ်အမှတ်တရများအဖြစ်ဤအများ၏မှတ်တမ်းတင်အဖြစ်အသိ-သင်ယူခြင်း; သင်ယူနှစ်မျိုးသည် နှင့်, ခံစားချက်-and ဆန္ဒနှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးအဖြစ်သူ့ဟာသူ၏စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ရလဒ်အဖြစ်ပြုသော-သင်ယူခြင်း။ မှတ်ဉာဏ်သင်ယူမှု၏အသေးစိတျကိုယျခန်ဓာ၏ဘဝအသက်တာမှတဆင့်ကြာရှည်စေခြင်းငှါပေမယ့်အသေခံပြီးနောက်ပျောက်ဆုံးသွားပါလိမ့်မည်။ အဘယျအကျင့်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကနေကွဲပြားအဖြစ်သူ့ဟာသူအကြောင်းကိုသိတော့ကိုဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်ပါ; ကြောင်းထို့နောက်၎င်း၏မွေးရာပါအသိပညာအဖြစ်ညျမွကွေီးပျေါက၎င်း၏အသက်တာကနေတဆင့်ပြုသောအတူဖြစ်လိမ့်မည်။
မုသာကိုသုံးသော, တစ်ဦးက: သူမဟုတျဘဲဒါကြောင့်သစ္စာကိုဖျက်ဖြစ်သိတယ်သောအရာကိုအဖြစ်စစ်မှန်တဲ့ကိုပြောပြသူကိုတဦးတည်းဖြစ်၏။
ဘဝက: တိုးတက်မှု၏တစ်ယူနစ်, ပုံစံမှတဆင့်အလင်း၏လေယာဉ်တင်သင်္ဘောဖြစ်ပါတယ်။ အသက်သည်စုစုပေါင်းနှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးသို့ဒဏ်ငွေဆောင်ခဲ့နှင့်သနျ့စစုစုပေါင်းပြောင်းလဲ, အပေါ်ကနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကြားအေးဂျင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ တိုင်းအမြိုးအနှယျ၌အသက်ရှိတဲ့ယူနစ်ရှိသေး၏။ လူကအသက်ရှု-ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
အသက်) One ရဲ့ဝေဖန်နားလည်မှုရန်: ပိုပြီးတစ်ခုသို့မဟုတ်အိပ်မက်ဆိုး, ရုတ်တရက်သို့မဟုတ်ရှည်လျားကိုထုတ်, နောက်ထပ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းများနှင့်ပြင်းထန်သောတစ်ဦးပုံကိုမှန်ကန်ပေမယ့်မသေချာမရေရာစီးရီးအဖြစ်အပျက်-တစ် phantasmagoria နည်းဖြစ်ပါတယ်။
Light က: အရာမြင်နိုင်စေသည်, ဒါပေမယ့်အရာကိုယ်တိုင်ကမမွငျရနိုငျသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအဖြစ်သို့မဟုတ်ဓာတ်ငွေ့, အရည်သို့မဟုတ်စိုင်အခဲများလောင်ကျွမ်းခြင်းအဖြစ် starlight သို့မဟုတ်နေရောင်ခြည်သို့မဟုတ်လရောင်သို့မဟုတ် earthlight ၏, ဒါမှမဟုတ်ပေါင်းစပ်သို့မဟုတ်ငွေ့ရည်ဖွဲ့နှင့်ဤ၏စကားရပ်၏ယူနစ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။
အလင်း attachment နဲ့ Unattachable: အဆိုပါထောက်လှမ်းရေး၏သိအလင်းပြုသော-in-the-ခန္ဓာကိုယ်က၎င်း၏စဉ်းစားတွေးခေါ်အတွက်အသုံးပြုသည်သော Triune ကိုယ်ပိုင်မှပစ္စည်းများကိုငှါးရမ်းပေးသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ပူးတွဲအလင်းပြုသော၎င်း၏အကြံအစည်ပြုမူခြင်းဖြင့်သဘောသဘာဝသို့ပို့ပေးနှင့် reclaims နှင့်အထပ်ထပ်ကိုအသုံးပြုသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ကအလင်းခဲ့သည့်အတွက်အကြံအစည်ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပါ unattachable အလင်း, အကျင့်ဖော်ထုတ်နှင့် unattachable ဖန်ဆင်းတော်မူပြီသောအရာဖြစ်ပါသည်။ unattachable ကိုဖန်ဆင်းကြောင်းအလင်းကိုတဦးတည်းရဲ့ noetic လေထုပြန်နှင့်အသိပညာအဖြစ်တဦးတည်းမှရရှိနိုင်ပါသည်။
သိသည်အလင်း: အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်င်း၏ထောက်လှမ်းရေးထံမှလက်ခံရရှိသည့်အလင်းဖြစ်၏။ ဒါဟာသဘာဝမဟုတ်သလိုသဘာဝအားဖြင့်ထင်ဟပ်မဟုတ်ပါဘူးဒါဟာသဘာဝယူနစ်နှင့်အတူသဘာဝနှင့်အပေါငျးအသငျးမြားသို့စလှေတျသောအခါသော်လည်း, သဘောသဘာဝကိုထင်ရှားစွာပြဟန်
ထောက်လှမ်းရေးနှင့်သဘောသဘာဝအတွက်ဘုရား ဟူ. ခေါ်ဝေါ်နိုင်ပါသည်။ အခါစဉ်းစားအသုံးပြုပုံသိအလင်းဖွင့်ခြင်းနှင့်မည်သည့်အရာပေါ်တွင်ကျင်းပ, အဲဒါကိုဖြစ်သကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းအရာပြသထားတယ်။ အမှန်တရားဖြစ်သောအရာတို့ကိုပြသသောကွောငျ့သိအလင်းထို့ကြောင့်အမှန်တရားဖြစ်ပါသည်
သူတို့အသှငျပွောငျးသို့မဟုတ်ဟန်ဆောင်စရာမလိုဘဲ, preference ကိုသို့မဟုတ်စိတ်စွန်းကွက်ခြင်းမရှိဘဲ, ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်။ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကြောင့်သူတို့အပျေါမှာလှညျ့ကျင်းပသည့်အခါကလူသိများလုပ်နေကြသည်။ ပါ-and ဆန္ဒခံစားသောအခါမူကားသိအလင်းအတှေးအနေဖြင့် fogged နှင့်ယုတ်လျော့နေသည်
စဉ်းစားရန်, ဒါလူ့ဖြစ်လျက်ရှိကြောင့်သူတို့ကိုကြည့်ဖို့လိုသည်အဖြစ်အမှုအရာကိုမြင်, ဒါမှမဟုတ်အမှန်တရားတစ်ခုပြုပြင်ထားသောဒီဂရီ၌တည်၏။
ကျင့်သောသူသာလျှင်အတွက်အလင်းအလားအလာ: သူကအကျိုးမပေးနိုင်သို့မဟုတ်ရဖို့သို့မဟုတ်သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူ၏တာဝန်များဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မဟုတ်သောကွောငျ့တစျ ungrudgingly နှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်အတူ, uncomplainingly တာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်သည့်အခါထိုတာဝန်များကိုကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအကြံအစည်ဟန်ချက်ညီနေသည် သူ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်အကြံအစည်မျှတတဲ့အခါသူလွှတ်ပေးခြင်းသောအလင်းသူ့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းအသစ်တခုကိုအဓိပ္ပာယ်ပေးသည်။ ဒါဟာသူ့ကိုသူမတိုင်မီနားမလည်ခဲ့အမူအရာဘာသာရပ်များသို့တစ်ခုထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးသည်။ သူအလိုအလျောက်နှင့်လိုချင်မှုအရာတို့ကိုချည်နှောင်ထားရှိမည်ခဲ့အလင်းလွတ်ဆက်လက်သကဲ့သို့, သူသည်သူ၌တည်ရှိ၏သူတစ်ဦးထောက်လှမ်းရေးဖြစ်လာသည့်အခါအရာအမှန်တကယ်အသိပညာပေအလင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအလားအလာအလင်းခံစားရနှင့်နားလည်ရန်စတင်ခဲ့သည်။
သဘာဝတရား၏အလငျးရောငျ: အရောင်တောက်ပခြင်း၊ တောက်ပခြင်းသို့မဟုတ်အရောင်တောက်ခြင်းကဲ့သို့သောတုန့်ပြန်မှုများသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိပြုမူသူများကသဘာဝသို့လွှတ်လိုက်သောသတိပြုအလင်းဆီသို့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။
Link ကိုယူနစ်, တစ်ဦးက Breath-: အရောင်တောက်ပသည့်အရာဝတ္ထုများကိုဖမ်းယူသိမ်းဆည်းထားပြီးသက်ရှိများနှင့်ဆက်နွယ်နေသောယူနစ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအဆိပ်ဖြစ်သည်။
Link ကိုယူနစ်, တစ်ဦးက Life-: ယာယီလေထုထဲရှိထုတ်လွှတ်သည့်ယူနစ်များကိုဖမ်းယူထိန်းသိမ်းထားပြီး၎င်းသည်သက်ရှိပုံစံနှင့်ဆက်စပ်မှုနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယူနစ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
Link ကိုယူနစ်, တစ်ဦးက Form-: ယာယီအရည်၏ယာယီယူနစ်များကိုဖမ်းယူထိန်းသိမ်းထားပြီး၎င်း၏ဆဲလ်၏ဆဲလ် - ချိတ်ဆက်မှုနှင့်ဘဝချိတ်ဆက်ယူနစ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
Link ကိုယူနစ်, တစ်ဦးက Cell-: အစိုင်အခဲဒြပ်ထု၏ယာယီယူနစ်များကိုဖမ်းယူထိန်းသိမ်းထားပြီး၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ရှိအခြားကိုယ်တွင်းရှိဆဲလ်များနှင့်၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
"ပျောက်ဆုံးသွားသော Soul" A: “ ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်” ဟုခေါ်သော“ ၀ ိညာဉ်” သည်“ စိုးလ်” မဟုတ်ပါ။ ပြုသူ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ထာဝရမဟုတ်ပါ။ ၎င်း၏တည်ရှိမှုနှင့်ပြုမူသူ၏အခြားအပိုင်းများမှခေတ္တပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုအနက်မှတစ်စုံတစ်ရာသောအပြုအမူပြုသူတစ် ဦး သည်ကာလရှည်ကြာစွာတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဆန်စွဲစွဲမြဲမြဲဆန့်ကျင်။ အခြားသူများအားတမင်တကာလိမ်လည်ခြင်း၊ လူသတ်မှု၊ ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ရက်စက်စွာပြုမူခြင်းတို့အတွက်၎င်းကိုငှားရမ်းထားသောအလင်းကို အသုံးပြု၍ လူသားတို့၏ရန်သူဖြစ်လာသောအခါ၎င်းဖြစ်ပျက်သည်။ ထိုအခါအလင်းဆုတ်ခွာနှင့်ပြုမူသောအဘို့ကိုပြန်လည်တည်ရှိရပ်စဲ; ၎င်းသည်မိမိကိုယ်မိမိကုန်သွားသည်အထိမြေကြီးအပေါ်ယံလွှာ၏အခန်းများသို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီး၎င်းသည်မြေကြီးပေါ်သို့ပြန်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ဒုတိယအဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာအပျော်အပါး၊ စားကြူးခြင်း၊ သောက်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမိမိကိုယ်ကိုအလိုလိုက်ခြင်းအားဖြင့်အလင်းကိုဖြုန်းတီးပြီးနောက်ဆုံးတွင်မပျောက်နိုင်သောလူထုံဖြစ်လာသည်။ ထိုအခါပြုသူသောအဘို့ကိုမြေကြီးတပြင်အခန်းထဲသို့သွား။ ၎င်းသည်၎င်း၏ပြန်လည်တည်ရှိမှုကိုဆက်လက်ခွင့်ပြုနိုင်သည်အထိရှိနေသည်။ ကိစ္စရပ်နှစ်ခုစလုံးတွင်အငြိမ်းစားသည်အခြားသူများ၏လုံခြုံမှုသာမကမိမိ၏လုံခြုံမှုအတွက်ဖြစ်သည်။
မတ်ေတာသညျ: ကမ္ဘာမှတဆင့်သတိရှိရှိတူညီဖြစ်၏ လူသားအတွင်းရှိပြုကျင့်သူအား၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အတွင်း၌သူတစ်ပါး၏ခံစားချက်နှင့်လိုချင်တပ်မက်မှု၊ မိမိနှင့်အခြားသူတစ် ဦး အနေဖြင့်မိမိကိုယ်ကို၏ဆန္ဒနှင့်ခံစားချက်ဖြစ်သည်။
ကျင့်သောသူသာလျှင်မေတ္တာ: ခံစားချက်နှင့်အလိုဆန္ဒအကြားမျှတသောပေါင်းစည်းမှုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအခြေအနေသည်တစ်ခုချင်းစီသည်မိမိကိုယ်ကိုခံစားစေလို။ ဖြစ်လိုသည်။
မုသာစကားကိုနှင့်မရိုးသားမှု: မရိုးမသားဖြစ်လို။ လိမ်လိုသောဆန္ဒသည်အထူးဘေးဆိုးများဖြစ်သည်။ သူတို့အတူတူသွား။ မရိုးသားသူဖြစ်ရန်နှင့်လိမ်လည်ရန်ရွေးချယ်သူသည်ဘဝများစွာမှတစ်ဆင့်အတွေ့အကြုံများစွာပြီးနောက်အရာဝတ္ထုများကိုမမြင်တွေ့ခဲ့သူဖြစ်သည်
သူလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သောအရာကိုလွဲမှားစွာအနက်ဖွင့်ခဲ့သည်။ သူသည်လူတို့၏အဆိုးဆုံးဘက်ကိုအထူးသဖြင့်မြင်ခဲ့ပြီးလူအားလုံးသည်လိမ်လည်သူ၊ မရိုးသားသူများဖြစ်ကြောင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုရိုးသားဖြောင့်မှန်သည်ဟုယုံကြည်ကြသူများသည်သူတို့၏မရိုးသားမှုကိုဖုံးကွယ်ရန်နှင့်သူတို့၏လိမ်လည်မှုများကိုဖုံးကွယ်ရန်လုံလောက်သောလိမ္မာပါးနပ်သူများဖြစ်ကြောင်းသူကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခဲ့သည်။ ဤနိဂုံးချုပ်သည်မုန်းတီးမှုနှင့်လက်စားချေမှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပြီးတော့လူသားဟာလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ရန်သူဖြစ်လာနိုင်တယ်၊
မိမိအကျိုးအတွက်အခြားသူများကိုဂရုစိုက်ရန်။ လူတစ် ဦး ဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်ကမ္ဘာကြီးအတွက်ကျိန်စာကြီးမည်မျှကြီးပြင်းလာစေကာမူသူ၏ကံကြမ္မာနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏အတွေးများကသူ့ကိုသူ့အားဤလောကနှင့်သူ့အားဖော်ပြလိမ့်မည်။ အတွေးနှင့်အပြုအမူတို့တွင်ရိုးသားခြင်းနှင့်မှန်ကန်ခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုသိသောဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုသူအချိန်မှီလေ့လာလိမ့်မည်။
ငြိုး:ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်း၊ ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်စေရန်ကြံစည်ခြင်း၊ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောဆန္ဒနှင့်မှန်ကန်သောလုပ်ရပ်အတွက်ရန်သူဖြစ်သည်။
အမူအကျင့်: ကောင်းသောအမူအကျင့်သည်ပြုမူသူ၏စရိုက်လက္ခဏာပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကဖွံ့ဖြိုးပြီးနေကြသည်။ အပေါ်ယံအရောင်တင်ခြင်းသည်ဘ ၀ ၌လုပ်သူ၏အနေအထားမည်သို့ပင်ဖြစ်စေကောင်းသောအပြုအမူများ၏အရည်အသွေးကိုဖုံးကွယ်ထားမည်မဟုတ်ပါ။
ဒီကိစ္စကို: Triune Selves ကဲ့သို့အသိဉာဏ်ယူနစ်ဖြစ်တိုးတက်ရသောအရာ, သဘောသဘာဝအဖြစ်အသိဉာဏ်မရှိသောယူနစ်အဖြစ်ထင်ရှားပစ္စည်းဥစ္စာနှင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အလတ်စား, တစ်ဦးက: ရုပ်သံလိုင်း, နည်းလမ်း, ဒါမှမဟုတ်အစီးအနင်းဆိုလိုတာကယေဘုယျအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ဤသေခြာသောပြည်နယ်များမှတောက်ပနေသောသို့မဟုတ်နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်မှထွက်ပေါ်လာသောလေထုကိုသဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်စေသောအရာများ၊ elementals များသို့မဟုတ်လှည့်လည်သွားလာနေသောလူများအားဆွဲဆောင်ပြီးသက်ရှိများကိုရှာဖွေသည့်သူကိုဖော်ပြရန်ဤတွင်အသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်နတ်ကတော်သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသူနှင့်သူပြုသူအကြားဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
မှတ်ဉာဏ်: အဆိုပါစှဲခေါ်ဆောင်သွားသောအပေါ်တစ် ဦး အထင်အမြင်များ၏မျိုးပွားသည်။ မှတ်ဉာဏ်နှစ်မျိုးရှိသည်။ sense-memory နှင့် doer-memory ။ အာရုံ - မှတ်ဉာဏ်တွင်စာသင်ခန်း (၄) ခုရှိသည်။ အမြင်မှတ်ဥာဏ်၊ ကြားနိုင်သည့်မှတ်ဉာဏ်၊ အာရုံလေးမျိုး၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတစ်ခုစီသည်၎င်းသည်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည့်အရာ၏ထင်မြင်ချက်များကိုယူပြီး၎င်း၊ ထိုဆွဲဆောင်မှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အရာနှင့်၎င်းတို့ကိုပုံတူကူးယူခြင်းသို့ပို့ရန်စီစဉ်သည်; လူ့ထဲမှာတော့အဲဒါဟာအသက်ရှူပုံစံဖြစ်တယ်။ တစ် ဦး အထင်အမြင်များ၏မျိုးပွားတဲ့မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ဉာဏ်, Doer-: ယင်း၏လက်ရှိကိုယ်ခန္ဓာ၌၎င်း၊ ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသောယခင်အလောင်းများ၌၎င်းခံစားမှုနှင့်လိုချင်မှုအခြေအနေများ၏မျိုးပွားခြင်းဖြစ်သည်။ ပြုသူသည်မမြင်၊ မကြား၊ မမြည်း၊ အနံ့လည်းမရှိပါ။ သို့သော်အသက်ရှုခြင်းပုံစံကိုစွဲမှတ်ထားသောမြင်ကွင်းများ၊ အသံများ၊ အရသာများနှင့်အနံ့များသည်ပြုသူ၏ခံစားချက်နှင့်ဆန္ဒအပေါ်တုံ့ပြန်ပြီးနာကျင်မှုသို့မဟုတ်ပျော်မွေ့ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ဤရွေ့ကားခံစားချက်များကိုကခံစားခဲ့ရသည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါ၏ပြည်နယ်များကိုပွု - အမှတ်တရများဖြစ်ကြသည်။ ပြုသူမှတ်ဉာဏ်အတန်းလေးမျိုးရှိပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်ဘဝ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များအပေါ်ခံစားမှုနှင့်အလိုဆန္ဒ၏တုံ့ပြန်မှုများဖြစ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ၏တုံ့ပြန်မှုနေသောအဘိဥာဏ်အမှတ်တရများ
ယခင်ဘဝများ၌ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောအလားတူအခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောနေရာများနှင့်အရာ ၀ တ္ထုများ၊ ဆန့်ကျင်ခြင်းများကိုခံစားလိုစိတ်၊ အမှားအမှန်မေးခွန်းများသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းခြင်းဖြစ်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ဥာဏ်များ
ရုတ်တရက်သို့မဟုတ်မမျှော်လင့်သောဘဝအခြေအနေများကိုဖြေရှင်းခြင်း၊ နှင့်အချိန်အတန်ကြာပျောက်ကွယ်သွားခြင်းနှင့်ပြုသူ timeless ဝိသေသလက္ခဏာအတွက်၎င်း၏အထီးကျန်သတိထားမိသောအခါ, ဝိသေသလက္ခဏာ၏အသိပညာနှင့်သက်ဆိုင်သော psycho-noetic မှတ်ဉာဏ်,
မှတ်ဉာဏ်, Sense-: (က) ရုပ်ပုံကိုရိုက်ကူးမည့်ကင်မရာကဲ့သို့မျက်စိ၏အင်္ဂါများကိုပါ ၀ င်သည်။ (ခ) ရှင်းလင်းပြတ်သားသောမြင်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းပြုရမည့်မြင်ကွင်း၏အဓိပ္ပာယ်၊ (ဂ) ပုံကိုစွဲမှတ်စေမည့်အနုတ်လက္ခဏာ (သို့) ပုံကိုပုံတူကူးယူရန်။ (d) အာရုံစူးစိုက်။ ဓာတ်ပုံရိုက်သူ။ မျက်လုံးကိုယ်အင်္ဂါအစုသည်မြင်တွေ့ခြင်းတွင်အသုံးပြုသောစက်ယန္တရားဖြစ်သည်။ Sight သည်သက်ရှိပုံသဏ္onာန်ပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုသို့မဟုတ်ပုံရိပ်များကိုထုတ်လွှင့်ရန်အသုံးပြုသည့်သဘာဝအခြေခံယူနစ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပြုသူသည်၎င်း၏အသက်ရှု - ပုံစံအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရုပ်ပုံရိပ်မိသူကိုမြင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ထိုပုံ၏ပုံတူပွားခြင်းသို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်သည်အလိုအလျောက်ဖြစ်ပြီး၊ မှတ်မိရမည့်အရာဝတ္ထုနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ပြန်ထုတ်ပေးသည်။ အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုသည်လွယ်ကူသောမျိုးပွားခြင်းသို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်ကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သည်။ မြင်နိုင်စွမ်းနှင့်မြင်နိုင်သည့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကဲ့သို့၎င်းသည်ကြားခြင်း၊ အရသာ၊ အနံ့တို့နှင့်အတူသူတို့၏ပုံရိပ်များကိုမှတ်ဉာဏ်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ မြင်နေသည့် optical သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံမှတ်ဉာဏ်; အကြားအာရုံ၊ အာရုံသို့မဟုတ်အသံဆိုင်ရာမှတ်ဉာဏ်၊ အရသာရှိသောမှတ်ဉာဏ်၊ နှင့်အနံ့အရသာအနံ့။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်မည်:လူတစ် ဦး ၏စိတ်သဘောထားသည်ဘဝအပေါ်ရှုမြင်ပုံ၊ ၎င်းသည်ဖြစ်ရန်သို့မဟုတ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုရှိရန်ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက်ရှိသည့်လေထုတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ သူ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်သည်အထူးသဖြင့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ တစ်ခုခုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်စဉ်းစားရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်ဆုံးဖြတ်ရန်တစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး: ပြုသူ - ကိုယ်ခန်ဓာကသုံးစိတ်သုံးခုထဲရှိမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊
Metempsychosis: ပြုသူသည်တရားစီရင်ရာခန်းမနှင့်အသက်ရှူခြင်းပုံစံမှထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ကာလသည်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်စေသောအလိုဆန္ဒများကိုပျော်ရွှင်စေသည့်၎င်း၏ပိုမိုကောင်းသောအလိုဆန္ဒများနှင့်ခွဲခြားသည်။ ဤအမှုကိုပြုသောအခါ Metempsychosis အဆုံးသတ်ထားသည်။
စိတ်ထဲ: အသိဉာဏ် - ကိစ္စ၏လည်ပတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကို (၇) မျိုးရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသုံးပါးတစ်ဆူကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ် (၇) မျိုးရှိသည်။ အမျိုးအစားခုနစ်ခုစလုံးသည်နိယာမတစ်ခုအရအလင်းကိုအတွေးအခေါ်နှင့် ပတ်သက်၍ စွဲမြဲစွာကိုင်စွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ - ငါသိခြင်း၏စိတ်နှင့်စိတ်၏စိတ်၊ မှန်ကန်သောစိတ်နှင့်တွေးတောဆင်ခြင်သူ၏စိတ်၊ ခံစားမှုစိတ်နှင့်ပြုမူလိုသောစိတ်၏စိတ်၊ ပြုသူကသဘာဝနှင့်သဘာဝအတွက်သာအသုံးပြုသောခန္ဓာကိုယ်စိတ်။
“ စိတ်” ဟူသောဝေါဟာရကိုထိုလုပ်ဆောင်မှု (သို့) လုပ်ငန်းစဉ် (သို့) စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဖြင့်မည်သည့်၊ ဤနေရာတွင်စိတ်ခုနစ်ပါးအတွက်ယေဘူယျဝေါဟာရဖြစ်ပြီးခုနစ်ခုစလုံးသည် Triune ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်သူများ၏အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုသည်သိသောအလင်း၏တည်မြဲသောကိုင်ထားမှုဖြစ်သည်။ I-ness အတွက်စိတ်နှင့် Self-to စိတ်ကို Triune Self ကိုသိသူနှစ်ဖက်စလုံးမှအသုံးပြုသည်။ မှန်ကန်မှုအတွက်စိတ်နှင့်ဆင်ခြင်တုံတရား၏စိတ်ကို Triune Self ၏တွေးခေါ်သူကအသုံးပြုသည်။ ခံစားမှုစိတ်နှင့်ဆန္ဒစိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်တို့ကိုအသုံးပြုသူမှအသုံးပြုရမည်။ ပထမနှစ်ခုသည်ခံစားမှုနှင့်ဆန္ဒကိုခန္ဓာကိုယ်နှင့်သဘာဝမှ ခွဲခြား၍ မျှတသောပေါင်းစည်းမှုရှိရန်၊ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်နှင့်သဘောသဘာဝတို့နှင့်စပ်လျဉ်း။ အာရုံလေးမျိုးဖြင့်အသုံးပြုရမည်။
စိတ်ကိုက The Body-: ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်၏စစ်မှန်သောရည်ရွယ်ချက်မှာခံစားမှုနှင့်လိုအင်ဆန္ဒကိုအသုံးပြုရန်၊ ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုယ်ခန္ဓာမှတစ်ဆင့်ကမ္ဘာလေးခုကိုအာရုံနှင့်အာရုံအတွင်းရှိ ၄ ခုနှင့်သူတို့၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများမှထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာ ခန္ဓာကိုယ် - စိတ်သည်အာရုံမှတစ်ဆင့်သာအာရုံနှင့်အာရုံခံစားမှုကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်သည်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်မည့်အစားခံစားမှုနှင့်ဆန္ဒကိုထိန်းချုပ်သည်။ သို့မှသာသူတို့သည်ခန္ဓာကိုယ်မှ ခွဲခြား၍ မရနိုင်တော့ဘဲ၊ ကိုယ်ခန္ဓာသည်သူတို့၏အတွေးအခေါ်ကိုလွှမ်းမိုးထားသဖြင့်သူတို့သည်အစားတွင်အာရုံ၌အသုံးအနှုန်းများဖြင့်စဉ်းစားရန်ဖိအားပေးခံရသည်။ ခံစားချက် -and အလိုဆန္ဒနှင့်ကိုက်ညီအသုံးအနှုန်းများ။
စိတ်ကိုက The Feeling-: ခံစားမှုသည် ၄ ​​င်း၏လုပ်ဆောင်ချက် ၄ ခုအရထင်မြင်ယူဆသောအရာဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားသိမြင်နားလည်မှု, အယူအဆရေးရာ, ပုံစံနှင့် projectiveness ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်၎င်းတို့ကိုကျွန်ဘဝမှသဘာဝသို့ကျွန်ဘဝမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်အသုံးပြုမည့်အစား၎င်းတို့သည်အာရုံ၊ အာရုံ၊ အာရုံ၊ အနံ့၊
စိတ်ကိုက The Desire-: အလိုဆန္ဒသည်ခံစားမှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုသင့်သည်၊ မိမိကိုယ်ကိုအလိုဆန္ဒအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်၊ နှင့်ခံစားမှုနှင့်အတူသူ့ဟာသူပြည်ထောင်စုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ၎င်း, ၎င်းသည်၎င်းအစား၎င်းကိုယ်တိုင်အားလက်အောက်ခံဖြစ်ရန်နှင့်သိပ္ပံနှင့်သဘာဝအရာဝတ္ထုများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
ကိုယ်ကျင့်တရား: လူတစ် ဦး ၏ခံစားချက်နှင့်လိုအင်ဆန္ဒများကိုနှလုံးသားထဲရှိကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်ကမလုပ်သင့်သောအရာနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရား၏မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဘာလုပ်ရမည်ကိုလမ်းညွှန်ပေးသောအတိုင်းအတာအထိစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြသည်။ ထို့နောက်အာရုံ၏ဆွဲဆောင်မှုရှိနေလင့်ကစားမိမိ၏အပြုအမူသည်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနှင့်အခြားသူများကိုထောက်ထားစာနာမှုနှင့်အတူရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာပြုမူလိမ့်မည်။ လူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ကျင့်တရားသည်လူတစ် ဦး ၏စိတ်သဘောထားနောက်ခံဖြစ်သည်။
ဘာသာရေး: ဘုရားသခင်နှင့်အတူတကွပေါင်းသင်းခြင်းအတွက်ယုံကွည်ခြင်းသို့မဟုတ်ကွိုးစားအားထုတ်ခြင်း၊ တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်နှင့်နီးကပ်မှု၊ ဘာသာတရားများသည်နိုင်ငံတိုင်းနှင့်ဘာသာတရားအားလုံးမှဖြစ်ပြီးအချို့မှာအထူးဘာသာတရားမရှိပေ။ သူတို့၏နည်းလမ်းများသို့မဟုတ်အလေ့အကျင့်များသည်တိတ်ဆိတ်ခြင်းမှပြင်းထန်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်စကားများခြင်းနှင့်တစ် ဦး ချင်းသီးခြားနေခြင်းမှအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆန္ဒပြခြင်းအထိကွဲပြားသည်။ ဘာသာတရားများသည်များသောအားဖြင့်သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ယုံကြည်မှုများတွင်ရိုးသားကြပြီးသူတို့၏ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုများတွင်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ သူတို့ဟာရုတ်တရက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလောက်အောင်မြင့်တက်လာပြီးစိတ်ဓာတ်ကျတဲ့နက်နဲရာထဲကိုနစ်မြုပ်သွားနိုင်တယ်။ သူတို့၏အတွေ့အကြုံများသည်တိုတောင်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်ကြာရှည်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ခံစားချက်များနှင့်လိုအင်ဆန္ဒများ၏အတွေ့အကြုံများသာဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ရှင်းလင်းသောတွေးခေါ်မှု၏ရလဒ်မဟုတ်ပါ; သူတို့၌ပညာမရှိ။ ၎င်းတို့သည်ဘုရားသခင်အားသိကျွမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်နှင့်နီးစပ်ခြင်းဟုသူတို့ယူမှတ်သောအရာသည်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်ဉာဏ်ရည်မဟုတ်သောအာရုံများဖြစ်သောမျက်မြင်၊ ကြားခြင်း၊ အရသာသို့မဟုတ်အနံ့အရာများနှင့်အမြဲဆက်စပ်နေသည်။
သဘာဝ: အသိဉာဏ်မရှိသောယူနစ်စုစုပေါင်း၏ရေးစပ်စက်ဖြစ်၏ သာသူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအဖြစ်သတိဖြစ်ကြောင်းယူနစ်။
တောလည်ရာ: ဆက်လက်နှင့်စည်းလုံးညီညွတ်ရေး, တညီတညှတျတညျးရှိခွငျးစပ်လျဉ်းထဲမှာဖြစ်ခြင်း၏အခြေခံမူဖြစ်ကြသည်။
တစ်: extension ကိုသို့မဟုတ်ပြီးစီးတစ်ယူနစ်တစ်ခုစည်းလုံးညီညွတ်မှုသို့မဟုတ်တပြင်လုံးကို၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အားလုံးနံပါတ်များ၏မူလအစနှင့်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
အခွင့်အလမ်း: မဆိုပေးထားသောရည်ရွယ်ချက်ပြီးမြောက်ဖို့ action ကိုများအတွက်မထိုက်မတန်သို့မဟုတ်ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲအချိန်သို့မဟုတ်အခြေအနေသို့မဟုတ်နေရာအရပ်သည်နှင့်အထူးသဖြင့်လိုအပ်ချက်များဖြစ်သောအကြောင်းအရာများကိုသို့မဟုတ်လူများ၏လိုလားရာ။
နာကျင်မှု: မလျော်ကန်သောစဉ်းစားတွေးခေါ်၏ပင်နယ်တီအဖြစ်အာရုံနှောင့်ယှက်သို့မဟုတ်လုပ်နေတာအစုတခုဖြစ်ပြီး, အသိပေးစာခံစားမှု-and ဆန္ဒက၎င်း၏အကြောင်းမရှိဖယ်ရှားပစ်ရန်၏ပြုသောအပေါ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်။
စိတ်အားထက်သန်: thesenses ၏အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ဘာသာရပ်များကိုရည်မှတ်ခံစားချက်တွေကိုနှင့်အလိုဆန္ဒများ၏လှိုငျးတံပိုးဖြစ်ပါတယ်။
စုံလင်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်: အဆုံးစွန်သောအပြည့်အဝဖြစ်သောပြည်နယ်သို့မဟုတ်အခြေအနေဖြစ်၏ မည်သည့်အရာကမျှဆုံးရှုံးခြင်းမရှိ၊ ထိုကဲ့သို့သောဘုံအတွင်းရှိ Triune ကိုယ်ပိုင်၏ပြီးပြည့်စုံသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး: အလိုဆန္ဒ-and ခံစားချက်၏ဆွဲသွင်းပါဝင်ပြုသောထင်နှင့်ပြောတတ်ခြင်းနှင့်ပြုမူရာနှင့်မှတဆင့် Corporation လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်မျက်နှာဖုံးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုးမြင်: လူ့အလိုဆန္ဒများကိုကျေနပ်မှုမဖွစျနိုငျကွောငျးလေ့လာရေးသို့မဟုတ်ယုံကြည်ချက်ကနေထုတ်လုပ်တာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားကိုဖြစ်၏ လူအနှင့်ကမ္ဘာပူးတွဲထဲကဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, နှင့်, အကြောင်းပြုသောအမှုခံရဖို့ဘာမှမရှိဘူးကြောင်း။
အပျော်အပါး: ထိုအာရုံနှင့်အတူသဘောတူညီချက်အတွက်အာရုံ၏စီးဆင်းမှုနှင့်ခံစားမှု-and ဆန္ဒမှဝမ်းမြောက်စေပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ပွိုင့်, ဖြေ ကြောင်းအတိုင်းအတာမပါဘဲပေမယ့်ရှုထောင့်လာရာကနေဖြစ်သည့်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကမှတ်တိုင်းအရာ၏အစဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ unmanifested နှင့်မန်နီးဖက်စ်အမှတ်အားဖြင့်ခွဲခြားထားတယ်။ တစ်အချက်မှတဆင့် unmanifested manifest ။ တစ်အချက်မှတဆင့် unmanifested ဖို့ထင်ရှားပြန်။
မှန်မှန်: တဦးတည်းထင်နှင့်အခံစားရနှင့်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူပြုမူ, ခွအေနမြေားသို့မဟုတ်အခြေအနေများအသုံးပြုပုံသို့မဟုတ်အခြားသူများတို့၏အကြံအစည်သို့မဟုတ်အပြုအမူအားဖြင့်နှောင့်အယှက်မပေးသည့်အတွက်စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ထိန်းချုပ်မှုဥပေက္ခာသမ္၏ဟန်ချက်၏ပြည်နယ်, ဖြစ်ပါတယ်။
ဥစ္စာ: အစားအစာ၊ အဝတ်အထည်၊ အမိုးအကာနှင့်ဘဝ၏အနေအထားတွင်လူ၏စရိုက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နည်းလမ်းများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဤအရာများအပြင်အခြားအရာအားလုံးတွင်၎င်းတို့သည်ထောင်ချောက်များ၊ ဂရုစိုက်မှုများနှင့်ခြေချင်းများဖြစ်သည်။
ပါဝါကိုသိ: သူ့ဟာသူပြောင်းလဲမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆောင်တတ်၏, သို့မဟုတ်အခြားအမှုအရာအတွက်ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ပေးသောအရာအလိုဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။
Pranayama: မြောက်မြားစွာအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်သော Sanskrit စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့ကျကျအသုံးချခြင်းသည်သတ်မှတ်ထားသောရှူရှိုက်မိခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ ရှူရှိုက်မိခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲရှူရှိုက်မိခြင်းများကိုသတ်မှတ်ထားသောလေ့ကျင့်ခန်းများဖြင့်အသက်ရှူမှုထိန်းချုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ Patanjali ၏ Yoga Sutras တွင် pranayama သည်အဆင့်ရှစ်ခုသို့မဟုတ်ယောဂအဆင့်များ၌စတုတ္ထမြောက်ဖြစ်သည်။ Pranayama ၏ရည်ရွယ်ချက်သည် prana ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုဖြင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းဟုဆိုသည်။ သို့သော် pranayama လေ့ကျင့်မှုသည်ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးရှုံးနိမ့်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုသည်အသက်ရှူခြင်းသို့ဖြစ်စေ၊ Prana နှင့်ဖြစ်စေ၊ ဤသည်အတွေးအခေါ်နှင့်အသက်ရှူအတွက်ရပ်တန့်စစ်မှန်သောစဉ်းစားတွေးခေါ်ကာကွယ်ပေးသည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်ရာတွင်အသုံးပြုသောသတိရှိရှိအလင်းသည်တွေးခေါ်သူအားမိမိ၏အတွေးအမြင်ကိုဖော်ပြရန် - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှူရှိုက်ခြင်း၏ပုံမှန်နှင့်ပုံမှန်စီးဆင်းမှုကိုရပ်တန့်ခြင်းအားဖြင့်စီးဆင်းခြင်းကိုတားဆီးသည်။ အဆိုပါသိသောအလင်းသည်အသက်ရှူခြင်းနှင့်ရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်အသက်ရှူခြင်းနှင့်အသက်ရှူခြင်းကြားရှိကြားနေနှစ်ခုကြားတွင်သာဝင်သည်။ အဆိုပါရပ်တန့်အလင်းကိုထုတ်စောင့်ရှောက်။ ထို့ကြောင့်အလင်းမရှိ၊ စစ်မှန်တဲ့အတွေးအခေါ်မရှိ၊ အစစ်အမှန်ယောဂသို့မဟုတ်ပြည်ထောင်စုမရှိ; စစ်မှန်သောအသိပညာမရှိ။
preference: ခံစားချက်နှင့်အလိုဆန္ဒအားဖြင့်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်, အရပျသို့မဟုတ်အရာများ၏မျက်နှာသာညာဘက်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်နှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲလျက်ရှိ၏ ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရူပါရုံကိုကာကွယ်ပေးသည်။
စိတ်စွန်းကွက်: အရာခံစားချက်-and ဆန္ဒဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, နေရာသို့မဟုတ်အရာတို့ကိုစီရင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ, ဆန့်ကျင်, ဒါမှမဟုတ်မသက်ဆိုင်, လက်ျာဘက်သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်များနေကြသည်။ စိတ်စွန်းကွက်ပိုင်ခွင့်နှင့်ကိုယ့်တရားသဖြင့်စီရင်ကာကွယ်ပေးသည်။
နိယာမ: အားလုံးအခြေခံမူသူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်ကြပြီးအရာအားဖြင့်သူတို့ကခွဲခြားစေခြင်းငှါအရာကနေ substratum ဖြစ်ပါတယ်။
မူအရ, တစ်ဦးက: ထိုသို့နေရာတိုင်းမှာအဲဒါကိုသည်အဘယ်အရာဖြစ်ဆီသို့ရောက် လာ. , သောကဖြစ်သောအရာတစုံတခုအတွက်အခြေခံအကျဆုံးနှင့်အညီယင်း၏ဇာတ်ကောင်လူသိများစေခြင်းငှါအရာမှဖြစ်ပါတယ်။
ပြစ်ဒဏ်: မှားယွင်းနေအရေးယူများအတွက်ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအပြစ်ပေးတညှဉျးဆဲနဲ့ဆငျးရဲဒုက်ခဖြစ်ပေါ်စေရန်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်သူကမကြာမီသို့မဟုတ်နှောင်းပိုင်းတွင်ဆင်းရဲမရှိဘဲမှားယွင်းတဲ့မပွုနိုငျကွောငျးကိုအပြစ်ပေးတမှား၏အကျိုးဆက်များကိုသင်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားသည်။
ရည်ရွယ်ချက်: တဦးတည်းကြိုးပမ်းရာများအတွက်ချက်ချင်းအရာ, သို့မဟုတ်လူသိများခံရဖို့အဆုံးစွန်ဘာသာရပ်အဖြစ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်လမ်းညွှန်ရည်ရွယ်ချက်ကဖြစ်၏ ကအင်အားသုံး၏သတိဦးတည်ချက်, စကားသို့မဟုတ်အရေးယူမှုအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ကို, အတွေးနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အောင်မြင်ခြင်း, ဆည်း၏အဆုံးဖြစ်ပါသည်။
အရည်အသွေး: အရာ၏သဘောသဘာဝနှင့် function ကိုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးထူးချွန်၏ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်။
အဖြစ်မှန်, တစ်ဦးက: unattached ထိုသို့အဖြစ်ယူနစ်, အမှုသည်ကိုယ်တိုင်ကဖြစ်၏ အရာတစျခုအာရုံခံသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အတွင်းရှိသို့မဟုတ်ထိုသို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဒါမှမဟုတ်ထက်အခြားဘာမှမဆက်စပ်ခြင်းမရှိဘဲ, အရာပေါ်လေယာဉ်ပေါ်မသိကြောင်း။
အဖြစ်မှန်, ဆွေမျိုး: အဆိုပါအချက်အလက်များသို့မဟုတ်အရာဆက်လက်နှင့်ပြည်နယ်နှင့်သူတို့လေ့လာတွေ့ရှိထားတဲ့အပေါ်ကိုလေယာဉ်ပေါ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြား၎င်းတို့၏စပ်လျဉ်း။
အဖြစ်မှန်, Ultimate: changeless နှင့်လုံးဝသတိ, ယင်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှု၏ဆက်လက်၏တခုလုံးအတွင်းထာဝရအတွက်အချိန်နှင့်အာကာသတလျှောက်လုံးတစ်ဦးချင်းစီသည်သဘာဝယူနစ်နှင့် Triune ကိုယ်ပိုင်နှင့်ထောက်လှမ်းရေးနှင့်မှတဆင့်သိစိတ်ကိုရောက်ရှိခြင်း, သတိဖြစ်ခြင်းအစဉ်အမြင့်မားဒီဂရီကနေတဆင့်သိစိတ်ကိုနှင့်အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်သည်အထိ ။
အမြဲတမ်းအတွက်၏ဘုံက The: နေရောင်ခြည်ကျနော်တို့အသက်ရှူလေပြံ့နှံ့ကဲ့သို့မွေးဖွားခြင်းနှင့်သေခြင်း၏ဤလူ့ကမ္ဘာ၏ phantasmagoria ပြံ့နှံ့န။ ဒါပေမယ့်သေတတ်သောဆင်းရဲခြင်းကိုမြင်ခြင်းနှင့်နားလည်ငါတို့မြင်ထက်ဘုံမပိုဒါမှမဟုတ်နေရောင်ခြည်နားလည်ပါတယ်။ အဆိုပါအကြောင်းရင်းအာရုံနှင့်သဘောထားအမြင်အချိန်နှင့်သေခြင်းအကျိုးသက်ရောက်စေမနိုင်သောအရာမှ attuned မဟုတ်သည်ညီမျှမှုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်း၏ဘုံတက်သမုတ်သောနှင့်နေရောင်ခြည်သက်ရှိများ၏အသက်နှင့်ကြီးထွားမအဖြစ်, ပြင်ဖျက်ဆီးခြင်းထဲကလူ့ကမ္ဘာကြီးကိုထိန်းသိမ်း။ သူနားလည်သူအလိုရှိနှင့်ခံစားရနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်ထားတဲ့အတွက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှသူ့ကိုယ်သူခွဲခြားအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသတိပြုသောအပြီးအပိုင်၏ဘုံနားလည်ပြီးရိပ်မိပါလိမ့်မယ်။
အကြောင်းပြချက်: အဆိုပါ Analyzer, စည်းမျဉ်းများနှင့်တရားသူကြီးဖြစ်တော်မူ၏ အခွင့်အရေးတရားအတိုင်းအသိပညာ၏လုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ်တရားမျှတမှု၏စီမံခန့်ခွဲသူ။ ဒါဟာမေးခွန်းများနှင့်ပြဿနာများ၏အဖြေကို, အစအဦးများနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၏အဆုံးနှင့်အသိပညာဖို့လမ်းညွှန်ဖြစ်ပါတယ်။
re-ဖြစ်တည်မှု: သူ့ဟာသူ၏အခြားဝေမျှစွပြုသောဆက်ဆံ istence အတွက်, တိရစ္ဆာန်လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ပြုလုပ်ရိုက်ထည့်ပါနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ဦးဘဝနေထိုင်ရာယူရန်အဘို့အဆင်သင့်လုပ်ထားပြီးအခါ, သဘောသဘာဝ, အပယ်သွားသူ့ဟာသူထံမှပြန်လည်တည်ရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်ခန္ဓာကိုယ်၎င်း၏အာရုံ၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်လမ်းလျှောက်ဖို့, ထိုသို့သုံးစွဲဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားနေသည်ဆိုသောစကားပြန်လုပ်ဖို့ကလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်အဆင်သင့်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနေဆဲတိရိစ္ဆာန်စဉ်ကတစ်ကြက်တူရွေးကဲ့သို့မ။ ဒါဟာအဖြစ်မကြာမီကမေးတယ်မေးခွန်းများနှင့်အဘယ်အရာကိုနားလည်နိုင်ခြင်းဖြင့်ပြထားတဲ့အတိုင်းကအသိဉာဏ်ဖြစ်သကဲ့သို့လူ့ဖြစ်လာသည်။
ပွနျလညျ: မျိုးဆက်များ၏ပြောင်းပြန်သည်, ခန္ဓာကိုယ်မျိုးပွားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ - ခန္ဓာကိုယ်ရှိအမြှေးပါးဆဲလ်များကိုအခြားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုသို့ကမ္ဘာသို့ပို့ဆောင်ရန်မဟုတ်ဘဲအသစ်နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောဘဝလမ်းစဉ်ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အားမပြည့်စုံသောယောက်ျားနှင့်မိန်းမခန္ဓာကိုယ်မှပြည့်စုံပြီးပြည့်စုံသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်လိင်အတွေးအခေါ်များကိုဖျော်ဖြေခြင်း (သို့) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ပြီးမြောက်စေသည်။ ထို့အပြင်မိမိ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုမူရင်းစုံလင်သောအခြေအနေသို့ပြန်လည်ထူထောင်ရန်မဆုတ်မနစ်စိတ်သဘောထားဖြင့်ဖြစ်သည်။
relation: အားလုံးသဘောသဘာယူနစ်နှင့်အသိဉာဏ်ယူနစ်နှင့်ထောက်လှမ်းရေးအသိပညာပေတူညီတဲ့အတွက် related နေကြသည်သောအန္တိမစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်ဇာစ်မြစ်များနှင့် sequence ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာတရား: နောက်ကျောမှခန္ဓာကိုယ်အတွက်သတိပြုသောရရှိထားသူသို့မဟုတ်ချည်နှောင်သောမျက်မှောက်ခန္ဓာကိုယ်အာရုံမှတဆင့်မီးသို့မဟုတ်ဝေဟင်သို့မဟုတ်ရေသို့မဟုတ်မြေကြီးတပြင်အဖြစ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်သဘာဝတရား၏ဒြပ်စင်အပေါငျးတို့သလေးယောက်လည်စည်း, ကြားနာ, အရသာ, ဒါမှမဟုတ်အနံ့ဖြစ်ပါသည် သဘာဝ။ ဤသည်ကိုးကှယျမှုအားဖြင့်၎င်း, ရေ၌မီးရှို့ရာယဇ်နှင့်သီချင်းများနှင့်ဖျန်းသို့မဟုတ် immersive အားဖြင့်၎င်း, မီး, လေ, ရေ, သို့မဟုတ်ညျမွကွေီး၏ဒြပ်စင်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဘုရားတို့အားနံ့သာပေါင်းကိုအားဖြင့်အကြံအစည်များနှင့်လုပ်ရပ်များ၌ပြစ်မှားမိသည်။
တာဝန်ယူမှု: မှားယွင်းတဲ့အနေဖြင့်ညာဘက်ကိုသိရဖို့စွမ်းရည်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်; ကအားလုံးကိုသူအတိတ်ကာလနှင့်ပစ္စုပ္ပန်အတွက်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ, ဒါမှမဟုတ်အနာဂတျမှာအဘို့မိမိကိုမိမိတာဝန်ယူစေလိမ့်မည်ဟုလုပ်ဖို့တဦးတည်းအတွက်ထားရှိရနိုင်သောမှီခိုနှင့်ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူ၏စကားလုံးတရားဝင်စာချုပ်ထက်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်တစ်ဦးအားအကြောက်ကင်းဇာတ်ကောင်, ဖွဲ့စည်းအဖြစ်တာဝန်ရိုးသားမှုနှင့်နျကနျကွောငျး, ဂုဏ်အသရေနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသည်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများပါဝင်သည်။
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း: တစ်နှစ်ဆအဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအလေးပါးအာရုံနှင့်၎င်း၏သေသောနောက်သဘောသဘာဝသို့ဖြန့်ဝေခဲ့ကြရသောအတိတ်ဘဝ၏ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စာစီ၏အတူတကွစုဝေးလျက်, ၏နေအိမ်သို့အဖြစ်အစေခံရန်သစ်တစ်ခုဇာတိကိုယ်ခန္ဓာ၏အသက်တော်-ပုံစံအားဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖြစ်ပါသည် မြေကြီးတပြင်ဘဝကိုရန်၎င်း၏ပြန်လာအပေါ်တာဘဲ။ ဒုတိယနှင့်စစ်မှန်သောအဓိပ္ပာယ်ကိုထိုယောက်ျားမိန်းမကိုယ်၌ပြုသောနှစ်ခုလေ့လာခြင်း၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များတဦးတည်းပြီးပြည့်စုံသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ပွနျလညျထူထောငျ, ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရန်, သောမစုံလင်ယောက်ျားမိန်းမခန္ဓာကိုယ်ကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်မျာကိုပြန်လည်ဖြစ်ပါသည် , စုံလင်၎င်း၏ဟောင်းတဦးနှင့်မူရင်းနှင့်နေိုငျသောပြည်နယ်ဖြစ်သည်။
ရစ်သမ်: အတွေးများ၏အကျင့်စရိုက်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုအသံသည်သို့မဟုတ် form မှာ, ဒါမှမဟုတ်စာဖြင့်ရေးသားဆိုင်းဘုတ်များသို့မဟုတ်စကားအားဖြင့်တိုင်းသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုမှတဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။
ညာဘက်: တဦးတည်းအတွင်းကနေအရေးယူသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုအဖြစ်, သတိဖြစ်သည့်အသိပညာများပေါင်းလဒ်သည်။
Right: စဉ်းစားတွေးခေါ်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်၏စံခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခံစားချက်-and ဆန္ဒ၏ပြုသောအဘို့, ပညတ္တိကျမ်းသတ်မှတ်ထားသောနှင့်ငျြ့စိုးမိုးရေးအဖြစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာနှလုံး၌တည်ရှိသည်။
ဝမ်းနည်းမှု: passive စဉ်းစားတွေးခေါ်နေဖြင့်ခံစား၏စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်, အဆိုပါအဆင့်မြင့်: လူ့အထက်၎င်း၏နေ့စဉ်အသက်တာ၏ sensuous, ဇာတိပကတိလူ, အသေးအဖွဲများနှင့်သေးလိုဆန္ဒများထက်သာလွန်မြင့်မားတဲ့အဖြစ်မသိသောအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒများဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပိုမိုမြင့်မားမိမိကိုယ်ကိုနေဖြစ်ခြင်းသီးခြားမဟုတ်ပါဘူး
လူ့အတွက်အလိုဆန္ဒ, ဒါပေမယ့်သူက, အလိုဆန္ဒအဖြစ်, တင့်အလိုဆန္ဒ၏ဤအရပ်မှအစစ်အမှန်အရင်းအမြစ်က၎င်း၏ Triune ကိုယ်ပိုင်၏ knower ၏ self မှခှဲမခှာဆက်စပ်သောကွောငျ့ "ဟုအဆိုပါအဆင့်မြင့်ကိုယ်ပိုင်။ " လူ့မြင့်မားမိမိကိုယ်ကို၏စဉ်းစားတွေးခေါ်
self-မောဟ: အဆိုပါပြုသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုတွေး, ဆွဲငင်မှုသို့မဟုတ်ရွံဖွယ်, preference ကိုသို့မဟုတ်စှနျးကှကျခွင့်အားဖြင့်ကိုယ်နှိုက်ကိုထည့်လေ့မရှိသည့်ထဲသို့ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။
self: အလိုလိုအသိပညာဗဟုသုတဖြင့် Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏ knower ကဲ့သို့ဖြစ်၏။
Sensation: တစ်ဦးခံစားချက်တစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားမှု, တစ်ဦးအလိုဆန္ဒအတွက်ရရှိလာတဲ့, ကိုယ်ခန္ဓာ၏အာရုံနှင့်အာရုံကြောမှတဆင့်ခံစားအပေါ်သဘောသဘာဝယူနစ်၏အဆက်အသွယ်နှင့်အထင်အမြင်ဖြစ်ပါသည်။ Sensation တဲ့ခံစားမှုတစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားမှု, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအလိုဆန္ဒမဟုတ်ပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်မရှိရင်ခံစားမှုမျှအာရုံရှိပါတယ်။ ခံစားချက်ခန္ဓာကိုယ်၌တည်ရှိ၏နေစဉ်သဘာဝယူနစ်တစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်စီးသည့်အာရုံမှတဆင့်လာမယ့်နှင့်အတန်ငယ်စက္ကူပေါ်မှာမှင်တစ်ဦးအထင်အမြင်လိုပဲခံစားအပေါ်ဆွဲဆောင်မှုအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ဖြတ်သန်းရှိသေး၏။ အဘယ်သူမျှမအာရုံရှိပါလိမ့်မယ်သဘောသဘာဝယူနစ်နှင့်ခံစားချက်၏အစီးမပါဘဲဒါမှင်နှင့်စက္ကူမပါဘဲအဖြစ်မရှိ, ပုံနှိပ်စာမျက်နှာရှိပါလိမ့်မယ်။ အားလုံးသည်ဝေဒနာနှင့်အပျော်အပါးနှင့်စိတ်ခံစားမှုလုံးကိုပျော်ရွှင်မှုများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အစိုးရိမ်မှုတွေ, ညှိုးငယ်, မှောငျနှင့်စိတ်ပျက်အားလျော့အာရုံဖြစ်ကြဆွဲဆောင်မှု၏ရလဒ်များကိုသဘောသဘာဝယူနစ်၏အဆက်အသွယ်ဖြင့်ခံစားချက်ပေါ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒါကြောင့်လည်းခံစားချက်, avid အဖြစ်, Cupid, လောဘလွန်ကျူးခြင်း, လောဘ, rapacity, တပ်မက်သောစိတ်, ဒါမှမဟုတ်ဆန္ဒအပေါ်ရာ၌တွေ့ကြုံမှအလိုဆန္ဒအားဖြင့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်ခန္ဓာကိုယ်မပါဘဲသူ့ဟာသူအတွက်အလိုဆန္ဒခံစားမှုသဘောသဘာဝယူနစ်နှင့်အတူ၎င်း၏အဆက်အသွယ်ကအပေါ်ကိုဖန်ဆင်းထင်မြင်ထက်မပိုသောဤအဘယ်သူအားမျှဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါအဖှဲ့၏အာရုံ: ယောက်ျား၏တရားရုံးမှာသဘာဝတရား၏သံတမန်ပါ၏ မျက်မှောက်, ကြားနာ, အရသာ, နဲ့လူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏အနံ့အဖြစ် individualized ထားတဲ့မီး, လေ, ရေနှင့်မြေကြီးလေးကြီးမြတ်ဒြပ်စင်၏ကိုယ်စားလှယ်များ။
စိတ်ဓါတ်များ: feeling နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, နေရာသို့မဟုတ်အရာနှင့် ပတ်သက်. စဉ်းစားခြင်းဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအမြင်ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်: သဘာဝ-ရူးသို့မဟုတ်သဘာဝမူးယစ်၏ပုံစံများနှင့်အဆင့်ကြုံနေရလူသားတစ်ဦးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခံစားချက်-and ဆန္ဒ၏ညှို့ခွအေနအေဖြစ်ပါတယ်။
မျက်မှောက်: လူသား၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသဘောသဘာဝ၏မီးဒြပ်စင်၏သံအမတ်ကြီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်, မီးတစ်ယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်မှောက်အရာမှတဆင့်သဘောသဘာဝ၏မီးဒြပ်စင်များနှင့်ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ရပ်အတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်စနစ်ကရုပ်သံလိုင်းသည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအပေါ်တုံ့ပြန်။ မျက်မှောက်င်း၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများလျော်သောစပ်လျဉ်းအားဖြင့်မျက်မှောက်အဖြစ်အစဉ်အဆက်စနစ်နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုယ်တွင်းအင်္ဂါပြောပြတယ်နှင့်သြဒိနိတ်သောသဘာဝယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်ဝပ်စွာနေ: repose အတွက်အသိပညာဖြစ်ပါသည်: သတိလှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲတည်ငြိမ်ခြင်းသို့မဟုတ်အသံသည်။
သိန်: တဦးတည်းပိုင်ခွင့်ဖြစ်သိတယ်ဘာတှေးအချေါသည်နှင့်တဦးတည်းနျမှုကိုဆန့်ကျင်, မှားဖို့သိတယ်ဘာလုပ်နေလဲ။ တဦးတည်းပိုင်ခွင့်ဖြစ်သိတယ်အဘယျသို့ကနေမဆိုထွက်ခွာအပြစ်ပါ၏။ အခြားသူများကိုဆန့်ကျင်ခြင်း, သဘောသဘာဝဆန့်ကျင်မိမိကိုယ်ကိုဆန့်ကျင်, အပြစ်ရှိပါတယ်။ အပြစ်တရား၏အပြစ်ဒဏ်များနာကျင်မှု, ရောဂါဆင်းရဲလျက်, နောက်ဆုံးမှာသေခြင်းတရားဖြစ်ကြသည်။ မူရင်းအပြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည့်အတွေးဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်စက်ခြင်း: ခံစားချက်-and ဆန္ဒပြုသော၏, ထိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏အနှင့်ခန္ဓာကိုယ်လေးအာရုံအားဖြင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားလာရင်းဖြစ်ပြီး, dreamless အိပ်စက်ခြင်းမှာသူ့ဟာသူသို့အနားယူ။ အဆိုပါတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားလာရင်းသဘာဝတောပြုပြင်, နှင့်ပြုသောရဲ့မရှိခြင်းစဉ်အတွင်းခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေရန်အဘို့အကြောင့်ကြွင်းသောအရာသည်၎င်း၏လိုအပ်ချက်များ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏လှုပ်ရှားမှုများချလျှော့ခြင်းဖြင့်အကြောင်းကိုယူဆောင်သည်။ ထိုအခါပြုသောသဘောသဘာဝနှင့်အတူထိတွေ့ထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြင်ခြင်း, ကြား, မထိသို့မဟုတ်မနမ်းလို့ရပါတယ်။
အနံ့: မြေကြီးတပြင်ဒြပ်စင်တစ်ခုယူနစ်, တစ်ဦးလူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မြေကြီးတပြင်ဒြပ်စင်များ၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အနံ့အရာအပေါ်သဘောသဘာဝကိုမြေကြီးဒြပ်စင်များနှင့်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ကြံနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိအစာခြေစနစ်မြေပြင်သည်။ မျက်မှောက်အရသာကတဆင့်အမှုအကွားလြှငျ, ကြားနာနှင့်အတူပြုမူ, အနံ့အတွက်အရသာပြုမူသောအမှုကိုခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပြုမူအနံ့။ မျက်မှောက်အဆိုပါ airy ကြားနာခြင်း, မီးဖြစ်ပါသည်, ထိုကြဲကြဲမြည်းစမ်း, နှင့်အစိုင်အခဲဖြစ်သောကြောင့်မြေသားအနံ့။ အနံ့အခြားသုံးအာရုံပြုမူရာအပေါ်အခြေခံသည်။
Somnambulism: နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းစဉ်အတွင်း ပတ်သက်. လမ်းလျှောက်, သည်နိုးလျှင်, အချို့သောကိစ္စများတွင်, နိုးနေစဉ် somnambulist ကြိုးစားမဟုတ်ကြောင်း Feat ဖျော်ဖြေ၏သော်လည်းအဖြစ်အိပ်ပျော်နေဖြင့်အမှုအရာများလုပ်နေတာ။ Somnambulism နိုးနေစဉ် passive စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်; ဒီလို passive စဉ်းစားတွေးခေါ်ထွက်သက်-ပုံစံပေါ်တွင်နက်ရှိုင်းသောဆွဲဆောင်မှုစေသည်။ ထိုအခါတစ်ချိန်ချိန်အတွက်နှိုးပြည်နယ်အတွက်အိပ်မက်မက်ခဲ့သောကြောင့်နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းအတွက် somnambulist အားဖြင့်ပလ္လင်ရေးထိုးအစီအစဉ်အရသိရသည်ထွက်သက်-ပုံစံအားဖြင့်အလိုအလျှောက်ထွက်ယူသွားတတ်၏။
Somnambulist, တစ်ဦးက: တစ်ဦးအိပ်ပျော်ခြင်း Walker, စိတ်ကူးယဉ်သည်နှင့်အဘယ်သူ၏ astral ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အသက်ရှု-form ကို impressionable နှင့်အကြံပေးချက်မှဘာသာရပ်၌နေသောသူတဦးတည်းဖြစ်၏ သူလုပ်ချင်ပါတယ်အရာကိုထင်ပေမယ့်လုပ်ဖို့စိုးရိမ်မှုတွေသောသူ။ သူနှိုးပြည်နယ်နေ့က-အိပ်မက်အတွက်စဉ်းစားသောအမှုအရာသည်အိပ်ပျော်နေစဉ်အတွင်းကသူ့သက်တော်-ပုံစံကပြဋ္ဌာန်းအပေါ်အကြာတွင်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်နှိုးအပေါ်, မိမိခန္ဓာကိုယ်အိပ်ပျော်လုပ်ဖို့လုပ်ထားပြီးအဘယ်အရာကိုမသိမဟုတ်။
ဝိညာဉျသ: တစ်ခါတစ်ရံမသေနိုင်သောအဖြစ်အပျက်ဟုဆိုကြပြီးအခြားအချိန်များတွင်မူသေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသောဘာသာတရားများနှင့်အတွေးအခေါ်များသည်အစဉ်အမြဲတည်ရှိပြီး၊ ကံကြမ္မာကိုအများအားဖြင့်ယူမှတ်ထားပြီး၊ ကိုယ်ခန္ဓာ ၎င်းသည်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏သက်ရှိပုံသဏ္orာန်သို့မဟုတ် passive ဘက်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏တက်ကြွသောဘေးထွက်အသက်ရှုဖြစ်ပါတယ်။
အာကာသ: ပစ္စည်းဥစ္စာ, အစဉ်အဆက် unmanifested နှင့်သတိလစ်ခြင်းမရှိရာ, သော manifest အရာများ၏ဇာစ်မြစ်နှင့်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကန့်သတ်, စိတျအပိုငျး, ပြည်နယ်များသို့မဟုတ်အတိုင်းအတာမပါဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးအတိုင်းအတာတည်ရှိအပေါင်းတို့နှင့်သဘောသဘာဝကိုလှုံ့ဆျောနှင့်၎င်း၏ဖြစ်လျက်ရှိသည့်အတွက်သဘောသဘာဝအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှယူနစ်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
ဝိညာဉ်တော်သည်: ကိစ္စဟုခေါ်တွင်သူ့ဟာသူ၏အခြားသို့မဟုတ် passive ခြမ်းမှတဆင့်တေဲ့နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာတစ်ဦးသဘောသဘာဝယူနစ်၏တက်ကြွသောဘေးထွက်ဖြစ်ပါတယ်။
နတ်ဆိုး:။ များသောအားဖြင့် Spiritualism ကိုခေါ်မီး, လေ, ရေ, မြေကြီး၏သဘောသဘာဝ sprite များနမူနာသို့မဟုတ် elementas တွေဟာနှင့်တစ်ခါတစ်ရံမြေကြီးတပြင်ဘဝထံမှထွက်သွားခဲ့သူလူ့များ၏ပြုသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားများသောအားဖြင့်မြင်ကြသို့မဟုတ်လက်ခံထားတဲ့အစွဲတစ်ခုအလယ်အလတ်မှတဆင့်အတူဆက်သွယ်နေကြသည်။ လက်ခံထားတဲ့အစွဲထဲမှာ, အလတ်စား၏တောက်ပသို့မဟုတ် astral ခန္ဓာကိုယ်ထှကျသှားတဦးတည်းပုံနှင့်အလတ်စားရဲ့ဇာတိကိုယ်ခန္ဓာကိုနှင့်အချို့ကလည်းယင်းကို '' အလောင်းတွေ၏အမှုန်ကနေအမှုန်အသွင်အပြင်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အလေးချိန်ပေးရချွတ်ရေးဆွဲစေခြင်းငှါအရာများတွင်အသုံးပြုပစ္စည်းသို့မဟုတ်ပုံစံဖြစ်ပါသည် ။ seances မှာထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများနှင့်အတူချိတ်ဆက်အဝိဇ္ဇာနှင့်ပရိယာယ်သို့ရာတွင်သေဆုံးရသူတဦးတည်း၏အစိတျအပိုငျးသို့ပြန်လာစေခြင်းငှါနှင့်တစ်ဦးအလတ်၏တန်ဆာမှတဆင့်ပေါ်လာပါသည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာ: လက်နက်ဖြစ်၏အာကာသ, တလျှောက်လုံးအတူတူ, တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း, စိတျအပိုငျးခြင်းမရှိဘဲ, သည်လူအပေါင်းတို့သဘောသဘာဝတစ်လျှောက်လုံးပစ္စုပ္ပန်, လက်ထက်, ဖြစ်သည့် "မအရာ," သတိလစ်အတူတူ, ်။
Succubus: တစ်ဦးမမြင်ရတဲ့အမျိုးသမီးပုံစံ obsessive ဖို့ဒါမှမဟုတ်အိပ်နေစဉ်ယောက်ျားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစပ်လျဉ်းရှိသည်ဖို့ကြိုးစားနေသည်။ အဆိုပါ incubus ကဲ့သို့ပင် succubi နှစ်မျိုး၏ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပုံစံနှင့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ခြားနားသည်။ Incubi နှင့် succubi ဆိုငာအောက်မှာမဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့။ သူတို့ကသိပ်အန္တရာယ်ပြု undreamed-၏လူသားတစ်ဦးမှခံစားနေရပြီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
အရသာ: လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သဘောသဘာဝတစ်ခုဝန်ကြီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်များ၏ဒီဂရီမှတိုးတက်သဘာဝရေဒြပ်စင်တစ်ခုယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အရသာသဘာဝရေဒြပ်စင်များနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကတစ်ဦးချင်းစီကတခြားထဲမှာဖြန့်ဝေထားတဲ့အတွက်ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရသာစောင်ရေများနှင့်အစာခြေနှင့်အရသာအဖြစ်အလုပ်လုပ်မှ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါမှာသူတို့ကိုပြင်ဆင်ထားရန်ရေက၎င်း၏ယူနစ်အတွက်လေထုနှင့်မြေကြီးများ၏ယူနစ် commingles နှင့်ပြောပြတယ်သောသဘာဝယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
တွေးခေါ်: အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏စစ်မှန်သောတွေးခေါ်င်း၏ knower နှင့်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်၎င်း၏ပြုသောအကြားဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအခွင့်အရေးများစိအကြောင်းပြချက်၏စိတျနှငျ့အထင်၏။ ၎င်း၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မဒါမှမဟုတျသံသယ၎င်း၏အခွင့်အရေးနှင့်အကြောင်းပြချက်အကြားမျှသဘောမတူရှိပါသည်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မအမှားတွေစေသည်; နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကထင်မှာတခါထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါပြုသူ -In-The- ခန္ဓာကိုယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်အတွက် spasmodic နှင့်မတည်မငြိမ်ဖြစ်၏ ယင်း၏ခံစားချက်နှင့်လိုချင်မှုစိတ်များသည်အမြဲတစေသဘောတူညီမှုမရှိကြပါ၊ သူတို့၏အတွေးအမြင်ကိုအာရုံနှင့်အာရုံခံစားမှု၏အရာဝတ္ထုများမှတဆင့်ထင်မြင်စေသောကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။ ထို့အပြင်ရှင်းလင်းသောအလင်းနှင့်အစားတွေးခေါ်မှုသည်များသောအားဖြင့်မြူထဲတွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိပြီးအလင်းသည်မြူထဲတွင်ပျံ့နှံ့နေသည်။ သို့သော်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူ့ယဉ်ကျေးမှုသည်အတွေးနှင့်တွေးတောမှု၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအချို့သူများသည်၎င်းတို့သည်မသေနိုင်သည့်အရာများဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိရန်နှင့်သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်၏စိတ်ကိုထိန်းချုပ်မည့်အစားထိန်းချုပ်ရန်သူတို့သည်ကမ္ဘာမြေကိုသာယာလှပသည့်ဥယျာဉ်တစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းနိုင်သည်။ ပရဒိသု။
စဉ်းစား: အတှေးအချေါမြား၏ဘာသာရပ်အပေါ်အတွင်းသိအလင်း၏တည်ငြိမ်ကျင်းပနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဘာသာရပ်၏ရွေးချယ်ရေးသို့မဟုတ်မေးခွန်းတစ်ခု၏ရေးဆွဲရေး (1) ၏ဖြစ်စဉ်ကိုမူကား, (2) ကမှတဦးတည်းရဲ့ညီညွတ်သောအာရုံကိုပေးခြင်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုသောကကိုသိတတ်သောအလင်းလှည့်; (3) ကတည်ငြိမ်ကျင်းပနိုင်ရန်နှင့်ဘာသာရပ်သို့မဟုတ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုအပေါ်ကိုသိတတ်သောအလင်းအာရုံစူးစိုက်; နှင့် (4) အမှတ်အဖြစ်ဘာသာရပ်အပေါ်တစ်ဦးအာရုံစိုက်ဖို့အလင်းယူလာသည်။ သိအလင်းအချက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, အမှတ်ရွေးချယ်ထားသည့်သို့မဟုတ်ရေးဆွဲပြီးမေးခွန်းမှအဖြေအတွက်ဘာသာရပ်၏တစ်ခုလုံးကိုအသိပညာ၏ပြည့်စုံခြင်းသို့ဖွင့်လှစ်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်သူတို့ရဲ့လွယ်ကူစွာထိခိုက်နိုင်မှုနှင့်လက်ျာနှင့်၏တန်ခိုးအားဖြင့်အညီဘာသာရပ်များအပေါ်သက်ရောက်မှု
Active ကို, စဉ်းစား: အကြောင်းအရာပေါ်ထင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်, အတှေးအချေါအာရုံသို့မဟုတ်အခြားဘာသာရပ်လှည့်နေသည်တိုင်အောင်ဘာသာရပ်မသိ, သို့မဟုတ်မှီတိုင်အောင်, ဘာသာရပ်အပေါ်အတွင်းသိအလင်းကိုင်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်။
တွေမှာ Passive စဉ်းစား: မည်သည့်အဓိပ္ပါယ်ရည်ရွယ်ချက်မပါဘဲပြုမိသောအတှေးအချေါတျောမူ၏ ဒါဟာတဒင်္အတွေးဒါမှမဟုတ်အာရုံတစ်ခုစှဲခွငျးအားဖွငျ့စတင်ခဲ့သည်, ထိုကဲ့သို့သောအလင်းအတွက်တဦးတည်းဒါမှမဟုတ်ပြုသောသူအပေါင်းတို့သုံးစိတ်ထဲတွင်ပါဝင်သောရပ်နားခြင်းကစားသို့မဟုတ်တစ်နေ့တာ-အိပ်မက်
ဒါက Thoughts Create မဟုတ်စဉ်းစား, ဒါက, Destiny Is: အဘယ်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထင်သနည်း, မိမိအအာရုံသူ့ကိုလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဖြစ်ရပ်များ, သူတို့ကိုရန်သူ၏တုံ့ပြန်မှုအကြောင်းကို, ထိုအာရုံ၏အရာဝတ္ထုတွေအကြောင်း, စဉ်းစားရန်အတင်းအကျပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကထင်၏။ သူထင်သည့်အခါထိုမင်းအရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့တစ်ခုခုဖြစ်ဖို့, ဒါမှမဟုတ်အရသို့မဟုတ်တစ်ခုခုရှိသည်ဖို့လိုသည်။ သူလိုလား! သူလိုချင်သောအခါသူသည်သူနှင့်သူမနှင့်အလင်းကိုအတွေးတစ်ခု၊ သူလိုချင်သောအရာနှင့်တွဲထားသည်။ သူကတစ် ဦး အတွေးဖန်တီးခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူသည်သူ၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွင်သူလိုချင်သောဆန္ဒ၊ ကိစ္စနှင့်လုပ်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းသို့ဖြစ်စေ၊ သူလိုချင်သည့်အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်အရာများကိုဖြစ်စေသူ၏အတွေးတွင်ပေါင်းစည်းထားသည်။ ထိုအလင်းအားဖြင့်သူသည်အလင်းနှင့်သူ့အားချည်နှောင်ထားသည်။ ထို့အပြင်သူသည်အလင်းနှင့်သူနှင့်၎င်းနှောင်ကြိုးမှသူ့ကိုယ်သူလွတ်မြောက်စေနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာချိတ်ဆက်မှုမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူသည်အလင်းနှင့်သူ၏ဆန္ဒကို၎င်းမှအရာတစ်ခုမှလွတ်မြောက်စေခြင်းဖြင့်သူ့ကိုချည်နှောင်ထားသောအတွေးကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းထားရမည် လိုချင်တပ်။ ထိုသို့ပြုရန်၊ များသောအားဖြင့်အသက်၊ သူသည်သူမကဲ့သို့တွဲဖက်ခြင်း၊ ချည်နှောင်ခြင်းများကိုပြုမူနိုင်သကဲ့သို့လွတ်လပ်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသည်ကိုသူနားလည်ရန်၊ မင်းရဲ့ဆန္ဒက သငျသညျ! သင်လိုချင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အရာသည်သင်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းကိုအတွေးဖြင့်ချိတ်ဆွဲထားပါကသင်သည်အကန့်အသတ်မရှိ၊ ပူးတွဲမှုမရှိပဲလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိသကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မှုလည်းမပြုနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်, အတွေးများကိုဖန်တီးမပေးသောအတွေးအခေါ်သည်လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တွေးခေါ်နိုင်ခွင့်နှင့်မလိုချင်၊ ကိုင်ထား၊ ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ပြုမူခြင်း၊ ပြုမူခြင်း၊ မပါ ၀ င်ခြင်း၊ ကိုင်ထား။ ဆိုလိုသည်မှာလွတ်လပ်မှုကိုစဉ်းစားရန်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါသင်သည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအလင်း၊ စွမ်းအားဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေးနိုင်သည်။
တစ်ဦးကကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်: သိအလင်းနှင့်အတူခံစားမှု-and ဆန္ဒအားဖြင့်ပဋိသန္ဓေနှင့်စိတ်နှလုံးထဲမှာ gestated သဘာဝဖြစ်ခြင်းဟာလူနေမှု, အတွက်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ဦးနှောက်ကနေထုတ်ပေးသည်, အရာကသည်တိုင်အောင်, အဖန်ဖန်တစ်ဦးလုပ်ရပ်, အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်အဖြစ် exteriorize ပါလိမ့်မယ် မျှမျှတတဖြစ်ပါတယ်။ ကြောင်းအတွေးမျှမျှတတအထိအတွေး၏မိဘပြုသောကနေစီးဆင်းသမျှသောရလာဒ်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်; အကြောင်း, အဆိုပါပြင်ပကနေအတွေ့အကြုံများအသုံးပြုပုံအတွေ့အကြုံများကနေသင်ယူမှုသည်ပြုသောဖြစ်ပါသည်
သူတို့ခညျြနှောငျခဲ့ကြသောသဘာဝတရား၏အရာဝတ္ထုကနေအလင်းနှင့်ခံစားမှု-and ဆန္ဒလွှတ်ပေးခြင်း, ဒါကြောင့်အသိပညာရရှိသည်။
တစ်ဦးဟန်ချက်ညီ, ထင်: အလိုဆန္ဒခံစား-and တဲ့အခါအတွေးထဲကနေကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူအလင်းစဉ်းစားတစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့သဘောတူညီချက်ထဲမှာဖြစ်ကြပြီးနှစ်ဦးစလုံးငါ-သမီးတို့ကမျက်မြင်ခဲ့ပြီးသောလုပ်ရပ်, အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်ကိုရည်မှတ် self နှင့်အတူသဘောတူညီချက်၌ရှိကြ၏။ ထိုအခါစဉ်းစားတွေးခေါ်လွှဲပြောင်းနှင့် noetic လေထုနှင့်အတွေးဖို့အလင်းပြုပြင်မျှမျှတတဖြစ်ပါသည်, ရှိတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။
ချိန်ခွင်လျှာ Factor တစ်ဦးအတွက်, ထင်: မရရှိခြင်း၏၎င်း၏တံဆိပျအဖြစ်အတွေးပေါ်အမှတ်အသားဖြစ်သောသြတ္တပ္ပစိတ်တံဆိပ်ခေါင်းများခံစားမှုနှင့်အလိုဆန္ဒအားဖြင့်အတွေး၏ဖန်ဆင်းခြင်း၏အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတဲ့အတွေးအပေါငျးတို့သအပြောင်းအလဲများနှင့်ပြင်ပတော်အားဖြင့်, အမှတ်အသားတစ်ခုကိုအတွေးများ၏ balancing သည်အထိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဆိုတဲ့အတွေးမျှတတဲ့အခါအဆိုပါအမှတ်အသားနှင့်အတွေးပျောက်ကွယ်သွား။
အုပ်ချုပ်ရေး, ထင်: သေမင်း၏ထိုအချိန်က One ရဲ့ဦးအတွေးမွကွေီးပျေါမှာကိုအောက်ပါအသက်အဘို့အအာဏာရအတွေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပြောင်းလဲသွားပေမယ့်အဲဒါကိုကသူ့အတှေးအချေါသြဇာလွှမ်းမိုးအုပ်စိုးစဉ်ကသူ၏အပေါင်းအသင်းများနှင့်ဆောင်၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်ကူညီပေးသည်စေခြင်းငှါ
သို့မဟုတ်အလားတူအတွေး၏အခြားသူတွေကသူ့ကိုမိတ်ဆက်။ ဒါဟာမကြာခဏသူဘဝကတဆင့်အတိုင်းလိုက်နာစေခြင်းငှါအရာတစ်ဦးအလုပ်အကိုင်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်သိမ်းပိုက်၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့အာဏာရဒါဟာသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထား tempers ထင်နေဆဲဖြစ်ပြီးပေးသည်နေစဉ်
လာရောက်လည်ပတ်ကြအတှေး: အတှေးအဖြန့်ဝေ; သူတို့မိဘများကဲ့သို့ gregarious ပါ၏ သူတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဖန်တီးထားသည့်အဘို့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်တ္ထုများ, လူ့သတ္တဝါများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထုထဲတွင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသွားရောက်ကြည့်ရှု, သူတို့သည်ဖန်တီးခဲ့သူလူသား၏အလားတူအကျိုးစီးပွား၏လေထုထဲတွင်ဖြည့်ဆည်း။ အတှေးအလူများ၏အစည်းအဝေးနှင့်ဖွဲ့စည်းအကြီးအကြောင်းတရားများဖြစ်ကြသည်; သူတို့အကြံအစည်ကို၏သဏ္ဍာန်ကလူအတူတူဆွဲပါ။
အချိန်: တစ်ဦးချင်းစီကတခြား၎င်းတို့၏စပ်လျဉ်းယူနစ်သို့မဟုတ်ယူနစ်ထု၏ပြောင်းလဲမှုသည်။ ကမ်ဘာပျေါတှငျနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပြည်နယ်များအတွက်အချိန်များစွာကိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဥပမာ: နေရောင်ရေးသားယူနစ်၏ဒြပ်ထု, လ, မြေကြီး, တစ်ဦးချင်းစီကတခြား၎င်းတို့၏စပ်လျဉ်းပြောင်းလဲနေတဲ့နေရောင်အချိန်, လအချိန်, မြေကြီးတပြင်အချိန်အဖြစ်တိုင်းတာလျက်ရှိသည်။
Transmigration: အသက်တော်-ပုံစံ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းမှာအနာဂတ်ကိုယ်ခန္ဓာ၏စိတ်ဝိညာဉ်၌ကလူ့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုပိုးမွှားများ၏ Bond အောက်ပါအတိုင်းရသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအောင်မြင်မှုအပေါငျးတို့သရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများနှင့်အတူတကွစုဝေးဖြစ်ပါသည်
ဒြပ်စင်များနှင့်အသက်ပေါင်းများစွာနှင့် typal ပုံစံများကိုသူတို့သဆေုံးပွီးနောကျဖြန့်ဝေခဲ့ကြရာသို့ဓာတ်သတ္တုများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်သဘာဝတရား၏တိရိစ္ဆာန်တိုင်းနိုင်ငံတို့ကို၎င်း, အသစ်တစ်ခုကိုလူ့ခန္ဓာကိုယ်သို့သူတို့ကိုငါသက်ဆိုင်သောနှင့်တည်ဆောက်ခြင်း, သစ်တစ်ခုစကွဝဠာ, စိတ်ဝိညာဉ်၌အရသိရသည်ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံမှ ဖြစ်သဖြင့်, Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏ပြုသောတစျပိုငျးကို၏ပြန်လာလျက် re-ဖြစ်တည်မှုများအတွက်ဇာတိနေထိုင်ရာဖြစ်ဖို့ကပြင်ဆင်နေ။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏မဲဆန္ဒနယ်မှများ၏ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ငံတို့သည်ဤနိုင်ငံတို့ကိုဖြတ်ပြီးသို့မဟုတ်တဆင့်ဖြစ်ပါတယ်
သဘာဝတရား၏: ကလေးထဲသို့ဓာတ်သတ္တုသို့မဟုတ်ကို elemental, စက်ရုံသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်တိရစ္ဆာန်အ။ သောအသက်ဝိညာဉ်၏ transmigration ၏အဆုံး, လူ့ထဲသို့လူ့အဘို့, သဘောသဘာဝသုံးနိုင်ငံတို့ကိုဖြတ်ပြီးသို့မဟုတ်မှတစ်ဆင့်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
Triune ကိုယ်ပိုင်: အဆိုပါခွဲခြား Self- သိ. နှင့်နေိုငျတစျခု; knower အဖြစ်ယင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အသိပညာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း; ထာဝရအတွက်တွေးခေါ်, အဖြစ်က၎င်း၏အခွင့်အရေးနှင့်အကြောင်းပြချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း; နှင့်မြေကြီးပေါ်မှာအခါအားလျော်စွာတည်ဆဲပြုသောအဖြစ်က၎င်း၏အလိုဆန္ဒနှင့်အခံစားချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း။
ကမ္ဘာ၏ Triune ကိုယ်ပိုင်က The: Triune တည်၏ noetic ကမ္ဘာ၏ဝိသေသလက္ခဏာကဲ့သို့ဖြစ်၏, ထို Triune ကိုယ်ပိုင်င်း၏ထောက်လှမ်းရေးမှမအဖြစ်အဓိပတိထောက်လှမ်းရေးစပ်လျဉ်းဆိုလိုတာပါ။
ယုံကြည်ကိုးစားပါ: ကိုးစားသူတဦးတည်းအတွက်နက်ရှိုင်းထိုင်ရိုးသားမှုမရှိသောကြောင့်, အခြားလူသား၏ရိုးသားမှုနှင့်အမှန်တရားမှာအခြေခံယုံကြည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်၌မိမိမှားယုံကြည်မှုအားဖြင့်စိတ်ပျက်လျက်ရှိသည်သောအခါသူသင့်ပါတယ်
အမှန်တရားတွေ:တွင်မှအမှားသို့မဟုတ်ရှေ့နောက်မများ၏ဘာသာရပ်အတွေးသို့မဟုတ်အကြောင်းကိုပြောပြီရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိဘဲထင်နှင့်အမှုအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျခွငျးမရှိပြောဆိုရန်ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, တဦးတည်းမှထုတ်ဖေါ်မပြုလုပ်သင့်သည်ကိုနားလည်ကြတာဖြစ်ပါတယ်
သူသိတယ်သမျှသော prying သို့မဟုတ်စပ်စုလူတွေ။
အမျိုးအစားများ: တစ်ဦးကအမျိုးအစားကနဦးသို့မဟုတ်ပုံစံ၏အစအဦးဖြစ်ပြီး, ပုံစံအမျိုးအစားများ၏ပါဝင်မှုနှင့်ပြီးစီးသည်။ အတှေးအတိရစ္ဆာန်များနှင့်အရာဝတ္ထုအမျိုးအစားများဖြစ်ကြပြီးပုံစံများကိုသဘာဝတရား၏ screen ပေါ်မှာလူ့ခံစားချက်တွေကိုနှင့်အလိုဆန္ဒများ၏အသုံးအနှုနျးအဖြစ်ထွက် bodied နေကြသည်။
နားလည်မှု: အဆိုပါ perceiving ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာ, မိမိတို့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ဒါကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဒါဆက်စပ်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့နားလည်နိုင်မှုရှိစေရန်အဘယျသို့သောအရာတို့ကိုခံစား။
ယူနစ်, တစ်ဦးက: အလျားလိုက်အချင်းအားဖြင့်ပြသထားသည့်ခွဲခြား။ မရသောတစ်ခု၊ စက်ဝုိင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလယ်ပိုင်းဒေါင်လိုက်မျဉ်းကြောင်းပြသသည့်ထင်ရှားသောအခြမ်းသည်တက်ကြွ။ passive တစ်ဖက်ရှိသည်။ သူတို့ရဲ့အပြန်အလှန်အားဖြင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုနှစ် ဦး စလုံးမှတဆင့် unmanifested ၏ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့်ထိခိုက်နေကြသည်။ ယူနစ်တိုင်းသည်အမြဲတမ်းသတိရှိခြင်း၌အမြဲတမ်းတိုးတက်မှုအားဖြင့်အဆုံးစွန်အဖြစ်မှန် - သိစိတ်နှင့်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်
ယူနစ်: ယူနစ်များ၏သင်တန်းနှင့်ပညာရေးတိုင်းသဘောသဘာဝယူနစ်တစ်ခုထောက်လှမ်းရေးဖြစ်လာ၏အလားအလာရှိပါတယ်ကြောင်းအဆိုပြုအပေါ်အခြေခံသည်။ ယင်းယူနစ်များ၏ပညာရေးဥပဒေတစ်ခုတက္ကသိုလ်အတွက်ကောက်ယူနေပါတယ်။ ဥပဒေများ၏တစ်ဦးကတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်
တိုးတက်မှု၏ထာဝရအမိန့်အရသိရသည်တစ် Triune ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံ၏ပြုသောနှင့်တွေးခေါ်နဲ့ knower ခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်သောအပြီးအပိုင်၏ဘုံ၏ပြည့်စုံ, sexless ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်။
သဘာဝတရား၏သတိမရှိသောယူနစ်များ၏ပညာရေးကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသဘာဝထက်ကျော်လွန်ကာအသိဉာဏ်ယူနစ်ဖြစ်လာဖို့, တက္ကသိုလ်ကနေဘွဲ့ရသည်အထိအားလုံးဒီဂရီမှတဆင့်၎င်း၏ function ကိုအဖြစ်ဆက်တိုက်သတိဖြစ်ခြင်းအတွက်တိုးလာအတွက်ပါဝင်ပါသည်။
ယာယီယူနစ်, စာစီယူနစ်နှင့်ယူနစ်ခံစားရနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သဘာမှဘွဲ့နှင့်သတိတစ်ခုအသိဉာဏ်ယူနစ်ဖြစ်ခံရဖို့လေ့ကျင့်ရေး၌အသက်တော်-form ကိုယူနစ်, အဲဒီမှာဖြစ်ပါသည်: စုံလင်သောခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဒီဂရီများမှာ as ကိုယ်တိုင်နှင့် of အားလုံး
အမှုအရာများနှင့်ဥပဒေများကို။ ယာယီယူနစ်ဥပဒေများတက္ကသိုလ်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးတွင်ဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ်သို့ရေးစပ်စာစီနှင့် function ကိုအားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ကူးပြောင်းရေးကာလနေထိုင်စဉ်အတွင်းသူတို့အာဏာအပ်နှင်းခြင်းနှင့်တရားစွဲဆိုဥပဒေများအဖြစ်နှင့်သဘာဝတရား၏လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများဖြစ်စေလွှတ်နေကြသည်။ Sense သည်ယူနစ်လေးခုစနစ်များ-General လမ်းပြနေသောကြီးစွာသော element တွေကိုမီး, လေ, ရေ, မြေကြီးကနေသံတမန်, အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ, သွေးလည်ပတ်မှုနှင့်အစာခြေ-၏သောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများမှာ
operating အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်။ အသက်တော်-form ကိုယူနစ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လည်ပတ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသို့အာရုံနှင့်စနစ်များနှင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါကိုသြဒိနိတ်။
ယူနစ်, သဘာဝတရား: သတိဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည် as သာမိမိတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ သဘာဝတရားယူနစ်သတိမပြုပြန်လည် of ဘာမှမ။ လေးမျိုးရှိပါတယ်: အစုလိုက်အပြုံလိုက်သို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာအခြားယူနစ်မှန့်အသတ်နှင့် unattached နေသောအခမဲ့ယူနစ်; သို့ရေးစပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အချိန်များအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာသို့မဟုတ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အတွက် cohere ပြီးတော့အပေါ်လွန်သွားသည့်ယာယီယူနစ်, အချိန်များအတွက်ယာယီယူနစ် compose နဲ့ကိုင်ရာစာစီယူနစ်, နှင့်ထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်လူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးစနစ်များကိုအုပ်ချုပ်ရသောမျက်မှောက်, ကြားနာ, အရသာနှင့်အနံ့အဖြစ်ယူနစ်, ခံစား။ အားလုံးသဘောသဘာယူနစ်သတိမရှိသောဖြစ်ကြသည်။
ယူနစ်, အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု: တစ်ဦးကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုယူနစ်စပ်လျဉ်းစောင့်ရှောက်တဦးတည်းဆဲလ်-link ကိုယူနစ်ကပေးသောရန်၎င်း၏ function ကိုဒါမှမဟုတ်ကိုယ်၌လေးယောက်စနစ်များ၏တဦးတည်းထဲသို့အခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါကလင့်ထားသည်ပေးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်စေခြင်းငှါဒါကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို, ရေးစပ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုဆဲလ်မှတဆင့် ကပိုင်။
ယူနစ်, Sense သည်: မျက်မှောက်သည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှင့်အတူကြားနာ, အထွေထွေနှင့်အတူစောင်ရေနှင့်အတူအရသာနှင့်အတူအနံ့: မိမိတို့၏သက်ဆိုင်ရာလေးစနစ်များနှင့်အတူလေး link ကိုသဘာဝနဲ့ချိတ်ဆက်နှင့်မျက်မှောက်လေးပါးကိုအာရုံဆက်စပ်ပေးသောကိုယ်ခန္ဓာ၌ယူနစ်, နားကြား, အရသာနှင့်အနံ့ဖြစ်ကြ၏ အစာခြေ; နှင့်, လေးပါးဒြပ်စင်နှင့်အတူ: မီး, လေ, ရေ, မြေကြီး။
အနတ္တ: ကမ်ဘာပျေါတှငျဆန္ဒရှိနေကြသည်သမျှအရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်ရာထူးနှင့်အစည်းအဝေးများ၏မွငျနှင့် unappreciated အနတ္တအပြီးအပိုင်၏ဘုံနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကဖြစ်၏ ထိုသို့အဘို့ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏၏အသုံးမဝငျနားလည်သဘောပေါက်သည်မဟုတ်
သူတို့ရဲ့ evanescence ရိုးသားမှုနှင့်အမှန်တရားအလေ့အကျင့်အတွက်အလိုတော်၏တန်ခိုးနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါလူကြိုက်များ၏ခံစားနှင့်အခြေအနေများ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်, ။
ဒု, ရင်ခွင်: ဤနေရာတွင်ဤမျှဟုခေါ်တွင်၎င်း၏သေပြည်နယ်များအတွက်ပြုသောသူတို့ထံမှခွဲခြားရန်ကြိုးစားနေစဉ်ခံစားနေရပြီးဖြစ်ပေါ်စေပြီးနောက်အရာ, လူ့ဘဝ၌ကျင့်၏မတရားသောသူတို့နှင့်ညံ့သညျ့အလိုဆန္ဒများဖြစ်ကြသည်။ ကျင့်ဆိုးတစ်ခုရင်ခွင်အဖြစ်အခြေစိုက်စခန်းအလိုဆန္ဒများလည်းခံရ,
သီလ: ရိုးသားမှုနှင့်အမှန်တရားအလေ့အကျင့်အတွက်ပါဝါ, အလိုတော်၏အစွမ်းသတ္တိကိုဖြစ်ပါတယ်။
အလိုတော်အခမဲ့: အလိုတော်ယခုအချိန်တွင်၏တစ်ဦးကာလဒါမှမဟုတ်အသက်တာ၏ကြီးစိုးလိုသောဆန္ဒဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်လိုဆန္ဒများလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်ခြင်းနှင့်သူတစ်ပါး၏အလိုဆန္ဒများကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ အလိုဆန္ဒသူ့ဟာသူပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်သောအခြားအမှုအရာကိုပြောင်းလဲစေမည်အကြောင်းအရာ, အတွင်းသတိတန်ခိုးတော်ဖြစ်၏။ ကပူးတွဲသို့မဟုတ်စဉ်းစားသည့်အခါအာရုံ၏အရာဝတ္ထုမှသူ့ဟာသူအလေးထားကြောင့်လူ့အတွက်အဘယ်သူမျှမအလိုဆန္ဒ, အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းဆန္ဒထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်သို့မဟုတ်အခြားအလိုဆန္ဒကထိန်းချုပ်ထားလိမ့်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအလိုဆန္ဒသည်အခြားဆန္ဒပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်သူ့ဟာသူပြောင်းပေးဖို့မဖြစ်မနေရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထက်အခြားအဘယ်သူမျှမပါဝါကပြောင်းလဲနိုင်သည်။ တစ်ဦးကအလိုဆန္ဒ, နှိမ့်ချကြေမွနှင့်လက်အောက်ခံလုပ်ပေမယ့်ရွေးကောက်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်အလိုတော်မဟုတ်လျှင်သူကသူ့ဟာသူကိုပြောင်းလဲစေမရနိုငျနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသို့မဟုတ်သူ့ဟာသူပြောင်းလဲပစ်မည်မဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိရွေးချယ်ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ဆက်လက်တည်ရှိဤပူးတွဲပါသို့မဟုတ်ကြောင်းအရာ, သို့မဟုတ်ပါကထိုအမှုကို၏သွားနှင့် unattached ကြစေပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိရွေးချယ်ဖို့ဤသည်မှာပါဝါ, လွတ်လပ်မှုက၎င်း၏အချက်သည်အလိုဆန္ဒသည်နှင့်ရှိကြောင်းလွတ်လပ်ခွင့်၏အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြစ်ဆန္ဒရှိနေဖြင့်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတစ်ဦးဧရိယာရန်၎င်း၏အမှတ်တိုးချဲ့စေခြင်းငှါပြုကြဖို့, ဒါမှမဟုတ်လုပ်ဖို့, ကဖြစ်ဖို့အလိုတော်အဘယ်အရာကိုမှကိုယ်နှိုက်ကပူးတွဲခြင်းမရှိဘဲ, ရှိသည်ဖို့, ဒါမှမဟုတ်ရှိသည်။ အလိုတော်ကြောင့်ထင်သောအရာကိုတွဲလျက်ရှိခြင်းမရှိဘဲထင်တဲ့အခါ, ကအခမဲ့ဖြစ်တယ်, လွတ်လပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ကြောင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးကြောင့် unattached ဖြစ်နေဆဲအဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်လုပ်ပေးသို့မဟုတ်ကြောင့်ဖြစ်သို့မဟုတ်လုပ်ပေးသို့မဟုတ်ရှိသည်ဖို့အလိုတော်အဘယ်အရာကိုရှိနိုင်ပါသည်။ အခမဲ့အလိုတော် unattachment, unattached ခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်: ယင်းနည်းလမ်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံသောအားဖြင့်ထုံးစံ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဖလား, Noetic: သဘာဝ-ကိစ္စ၏လောကဓာတ်မျှမက, ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းအပေါင်းတို့, Triune တည်နှင့်သဘောသဘာဝကိုအုပ်ချုပ်သောဥပဒေများ၏ noetic လေထု၏ရေးစပ်တဲ့တညီတညှတျတညျး၏ဘုံ၏အသိဉာဏ်ဘုံသို့မဟုတ်အသိပညာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမပြောင်းလဲတဲ့သောထာဝရအသိပညာအားလုံး Triune တည်ရည်နှင့်အတိတ်၏တခုလုံးကိုရည်မှတ်, ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုမြေကြီးစက်လုံးလေးကမ္ဘာ၏အနာဂတ်အဖြစ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကြုံတွေ့နေရနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်လူ့ကမ္ဘာအတွက်အာရုံ၏အစဉ်အဆက်စုဆောင်းနှင့်ပြောင်းလဲနေတဲ့အသိပညာအသိပညာလောကီသားတို့သည်အမှထည့်လို့မရပါ။ ဤရွေ့ကားလာများနှင့်သွားရသည့်နွေရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီ၏ထုတ်ကုန်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ အသိပညာလောကီသားတို့သည်
အားလုံး Triune တည်၏အသိပညာများပေါင်းလဒ်သည်, လူအပေါင်းတို့၏အသိပညာအသီးအသီး Triune ကိုယ်ပိုင်ရရှိနိုင်ပါသည်။